Audios Dr. Nandamalabhivamsa Sayadaw - Rector Itbmu (burmese)
September 2, 2021 September 8, 2021 Dhamma Nanda	28 Views
Rector International Theravada Buddhist Missionary University, Yagon
(Ngài Hiệu trưởng Sayadaw Bhaddanta, Tiến sĩ Nandamalabhivamsa)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာပြု တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ်
The Dhamma Sahāya Sasana Centre
Institude for Dhamma Education (IDE)
Address: Aung Chan Thar Village @ 33miles and2furlongs,
Pyin Oo Lwin Township, Mandalay Division, Myanmar
Centre for Buddhist Studies (CBS),
Mahāsubodhayon Monastery, Sagaing Hills, Sagaing, Myanmar.
– (၁၃၀၁) ခုနှစ်၊တပေါင်းလပြည့်၊ (၁၉၄၀)ခုနှစ်၊မတ်လ(၂၂)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်း၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ညောင်ပင်ရွာ နေ ခမည်းတော် ဦးစံလှ+မယ်တော် ဒေါ်ခင်တို့မှ ဖွားမြင်သည်။
– (၁၃၁၀)ခုနှစ်၊(၁၉၄၉)၊ဝါဆိုလဆန်း (၁၁)ရက်၊ အသက် (၁၀)နှစ်အရွယ်တွင် စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး၊ဝိပဿနာဂန္ဓာရုံ ကျောင်းရှိ အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု၊ နဝမမြောက်ရွှေကျင်သာသနာပိုင် စံကင်းဆရာတော်ကြီးကို ဥပဇ္ဈာယ်ပြုလျက် ရှင်သာမဏေပြုခဲ့သည်။
– (၁၃၂၀)ခုနှစ်၊(၁၉၅၈) စစ်ကိုင်းမြို့ မဟာသုဗေရုံတိုက်ကိုနောင်တော်များနှင့်အတူတည်ထောင်ကာ ပဓာန စာချ၊တိုက်ကြပ်အဖြစ် အဆင့်ဆင့်တာဝန်များထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
– (၁၃၂၁)ခုနှစ်၊(၁၉၆၀)ပြည့်နှစ်တွင် နဝမရွှေကျင်သာသနာပိုင် စံကင်းဆရာတော်ဘုရာကြီးကို ဥပဇ္ဈာယ်ပြု၍ ရဟန်းဘဝသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ နောင်တော်ရင်းဖြစ်သော ဘဒ္ဒ န္တနာရဒ ထံတွင် သဒ္ဒါ။ သင်္ဂဟဓပိဋက အခြေခံများ၊ ပထမပြန်စာမေးပွဲဆိုင်ရာ ကျမ်းစားများသင်ယူခဲ့ပြီး၊ ဇယမေဓနီ ၊ ဝါဆိုကျောင်းဆရာတော် ဘဒ္ဒ န္တ အဂ္ဃိယ (ရွှေကျင်သာသနာပိုင်၊ အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု) ထံဓမ္မာစရိယတန်းဆိုင်ရာ ကျမ်းစားများကို သင်ယူခဲ့သည်။ စစ်ကိုင်းမြို့ မဟာသုဗောဓာရုံ တိုက်ရှိ နောင်တော်များဖြစ်ကြသည့် နာယက၊ တိုက်အုပ်၊ တိုက်ကြပ်ဆရာတော်များထံတွင် သကျသီဟ၊ စေတိယင်္ဂဏတန်းဆိုင်ရာ ကျမ်းစာများကိုသင်ယူခဲ့သည်။ ရန်ကုန်မြို့ ဇမ္ဗူဒီပကျောင်းဆောင်တွင် တိပိဋကပါဠိ+မြန်မာအဘိဓာန်ကျမ်းပြုအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေစဉ် ချမ်းမြေ့ရိပ်သာဆရာတော် ဘဒ္ဒ န္တ ဇနကာဘိဝံသထံတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို စတင်သင်ယူခဲ့သည်။
– (၁၃၂၄)ခုနှစ်၊ (၁၉၆၃) ရန်ကုန်စေတိယင်္ဂဏ အဘိဝံသ ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့သည်။
– (၁၃၂၅)ခုနှစ်၊ (၁၉၆၄) မန္တလေး သကျသီဟ အဘိဝံသဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့သည်။
– (၁၃၅၇)ခုနှစ်၊ (၁၉၉၆) နိုင်ငံတော်မှ အဂ္ဂမဟာဂန္တဝါစကပဏ္ဍိတ ဘွဲ့ကိုဆက်ကပ်ခဲ့သည်။ သီတဂူ ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် တွင် ပါမောက္ခအဖြစ် ဆောင်ရွက်ကာ Department of Language Studies တွင် English Diploma Class နှင့် B.A တန်းများရှိ ဘာသာရပ်များကို လည်းကောင်း၊ အမေရိက၊ကိုရီးယား၊မက္ကဆီကို၊ဂျာမဏီ၊ပြင်သစ် စသောနိုင်ငံများမှ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအား ပါဠိဘာသာ၊အဘိဓမ္မာ ဘာသာရပ်များကို လည်းကောင်းသင်ကြားပို့ချပေးခဲ့သည်။
– (၁၃၅၈)ခုနှစ်၊ (၁၉၉၇) အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ဘော်လတီမိုးမြို့၊ကေလာသဝိဟရကျောင်းရှိ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အား အဘိဓမ္မ ညသင်တန်းပို့ချပေးခဲ့သည်။
– (၁၃၆၀)ခုနှစ်၊ (၁၉၉၉) ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်၏ သြဝါဒစရိယ ဧည့်ပါမောက္ခအဖြစ် ပြည်တွင်းပြည်ပကျောင်းသားများအား စာပေပို့ချပေးခဲ့သည်။
– (၁၃၆၁)ခုနှစ်၊ (၂၀၀၀) နိုင်ငံတော်မှ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ ဘွဲ့ကိုဆက်ကပ်ခဲ့သည်။
– (၁၃၆၄)ခုနှစ်၊ (၂၀၀၃) အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မဂဓတက္ကသိုလ်မှ Ph.D ဒေါက်တာဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့သည်။ ထိုနှစ်မှစတင်၍ ဂျာမဏီ၊ နယ်သာလန်၊သြစတြီးယား၊အင်္ဂလန်၊ စင်္ကာပူ၊မလေးရှား၊ကိုးရီးယား နိုင်ငံများသို့ နှစ်စဉ်မပျက်ကြွရောက်၍ အဆိုပါနိုင်ငံသားများအား အဘိဓမ္မာသင်တန်းများ သင်ကြားပို့ချပေလျက်ရှိသည်။
– (၁၃၆၇)ခုနှစ်၊ (၂၀၀၆) ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်၏ ပါမောက္ခချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်သည်။
– (၁၃၈၁)ခုနှစ်၊ (၂၀၂၀) နိုင်ငံတော်မှ အဘိဓဇ မဟာရဋ္ဌဂုရု ဘွဲ့ကိုဆက်ကပ်ခဲ့သည်။
– ယခုအခါ ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန္တနန္ဒမာလာဘိဝံသ သည်စစ်ကိုင်းမြို့ မဟာသုဗောဓာရုံစာသင်တိုက် ၏ပဓာနနာယကဆရာတော် တာဝန်၊ သီတဂူ ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် တွင် ပါမောက္ခချုပ်တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရင်း Diploma သင်တန်းများနှင့် B.A ပ၊ဒု၊တတိယ နှစ်များတွင် စာပေပို့ချပေးတော်မူခြင်း၊ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်၏ ပါမောက္ခချုပ်၊အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဘိဓမ္မာမဟာသိပ္ပံ ပါမောက္ခချုပ် အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း လူသားများအကျိုးအတွက် တရားဓမ္မများဟောပြောခြင်းဖြင့် သာသနာပြုလျက်ရှိသည်။
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်၏ တရားတော်များကို အမျိုးအစားတူရာစုဆည်းမှု။
၁၁-၀၂-၂၀၂၀ – ဆရာကောင်းရှိမှ နိဗ္ဗာန်ရနိုင်သည်
၁၀-၀၂-၂၀၂၀ – သာသနာ‌ရေးရာ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏မိန့်မှာချက်များ
၀၉-၀၂-၂၀၂၀ – စိတ်စွဲလမ်းမှုကိုအောင်နိုင်သူ
၀၇-၀၂-၂၀၂၀ – ဓမ္မဦးဆောင်သည့် သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းအ‌ကြောင်း
၀၆-၀၂-၂၀၂၀ – မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့်ကျောင်းအလှူရှင်များ
၀၅-၀၂-၂၀၂၀ – ပါပနှင့်ကလျာဏ
၀၅-၀၂-၂၀၂၀ – နေ့လည်ခင်း ဩဝါဒတရားတော် (သစ္စာနန္ဒ ဓမ္မစင်တာ မဟာသတိပဌာန်ဝိပဿနာ အလုပ်ပေး (၇)စခန်း)
၀၄-၀၂-၂၀၂၀ – သံသရာစီးပွား ကုသိုလ်ကောင်းမှုများ
၀၃-၀၂-၂၀၂၀ – ဗျာဒိတ်တော်ကြား ဘုရား၂၄ဆူ တရားတော်
၀၃-၀၂-၂၀၂၀ – လူသားတို့အတွက်မြတ်နိုးဖွယ်အကောင်းဆုံးရတနာ
၀၂-၀၂-၂၀၂၀ – မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့်သာလွန်မင်းတရားအကြောင်း
၃၀-၀၁-၂၀၂၀ – မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့်ပုဂံဒေသ
၂၉-၀၁-၂၀၂၀ – လိုချင်တာရရှိရေး အကြောင်းတရားကိုမျှော်တွေးခြင်း
၂၈-၀၁-၂၀၂၀ – အခွင့်သာခိုက် လုံ့လစိုက် တရားတော်
၂၇-၀၁-၂၀၂၀ – မြတ်ဗုဒ္ဓအပေါ် ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာသူ ပုဂ္ဂိုလ် ဆယ်ဦးအကြောင်း
၂၆-၀၁-၂၀၂၀ – တရားမျှတမှုတရားတော်
၂၆-၀၁-၂၀၂၀ – အနုမောဒနာသြဝါဒတရားတော်
၂၅-၀၁-၂၀၂၀ – အနုမောဒနာသြဝါဒတရားတော်
၁၉-၀၁-၂၀၂၀ – အနုမောဒနာတရားတော်
၁၈-၀၁-၂၀၂၀ – အနုမောဒနာသြဝါဒတရားတော်
၁၄-၀၁-၂၀၂၀ – သံသရာအတွင်းမှ အမှားအယွင်းများ တရားတော် a>
၁၃-၀၁-၂၀၂၀ – သံသရာဆုတောင်းအကောင်းချည်းမရ တရားတော်
၁၂-၀၁-၂၀၂၀ – လူတိုင်းအတွက်အမှန်တရား
၁၁-၀၁-၂၀၂၀ – ဝိသာခါ၏အဘိုးအဘွားများနှင့် သူတို့၏အစွမ်းတန်ခိုးများ
၁၀-၀၁-၂၀၂၀ – ကမ္မဝါဒနှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမ
၀၈-၀၁-၂၀၂၀ – ဝိသာခါနှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာ
၀၈-၀၁-၂၀၂၀ – အနုမောဒနာသြဝါဒတရားတော်
၀၇-၀၁-၂၀၂၀ – စွမ်းအားပညာမြှင့်တင်ပါ
၀၇-၀၁-၂၀၂၀ – စူဠဟတ္ထိပဒေါပမသုတ် စာဝါပို့ချခြင်း (သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် )
၀၆-၀၁-၂၀၂၀ – ပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေခြင်းနှင့် သုံးစွဲခြင်း တရားတော်
၀၆-၀၁-၂၀၂၀ – စူဠဟတ္ထိပဒေါပမသုတ် စာဝါပို့ချခြင်း (သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် )
၀၅-၀၁-၂၀၂၀ – ဘုရားအစစ်တွေ့ရန် ခြေရာခံခြင်း တရားတော်
၀၄-၀၁-၂၀၂၀ – ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း (၆၅)
၀၄-၀၁-၂၀၂၀ – အနုမောဒနာသြဝါဒတရားတော်
၀၃-၀၁-၂၀၂၀ – ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း (၆၄)
၀၂-၁၀-၂၀၂၀ – တိုင်းရေးပြည်ရေး မျှော်တွေးခြင်း တရားတော် (ပြည်သူ့ရင်ပြင်)
၀၂-၀၁-၂၀၂၀ – မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမသြဝါဒတရား(စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်)
၀၁-၀၁-၂၀၂၀ – ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း (၆၃)
၀၁-၀၁-၂၀၂၀ – သတိသမ္ပဇည တရားတော်
၀၁-၀၁-၂၀၂၀ – နိုင်ငံတကာနှစ်သစ်ကူး ဩဝါဒ ကထာ
၃၁-၁၂-၂၀၁၉ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၆၂)
၃၀-၁၂-၂၀၁၉ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၆၁)
၂၉-၁၂-၂၀၁၉ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၆၀)
၂၉-၁၂-၂၀၁၉ – မြတ်ဗုဒ္ဓကို အမြတ်ဆုံးပူဇော်ခြင်း
၂၈-၁၂-၂၀၁၉ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၅၉)
၂၇-၁၂-၂၀၁၉ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၅၈)
၂၆-၁၂-၂၀၁၉ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၅၇)
၂၅-၁၂-၂၀၁၉ – ရှင်ပြုနားသအလှူတော်နှင့် အနုမောဒနာတရားတော်
၂၅-၁၂-၂၀၁၉ – ကထိန်အလှူတော် ရေစက်ချ အနမောဒနာတရားတော်
၂၃-၁၂-၂၀၁၉ – ရှင်ပြုပွဲ၏ အနှစ်သာရ
၂၂-၁၂-၂၀၁၉ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၅၆)
၂၁-၁၂-၂၀၁၉ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၅၅)
၂၀-၁၂-၂၀၁၉ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၅၄)
၁၉-၁၂-၂၀၁၉ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၅၃)
၁၈-၁၂-၂၀၁၉ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၅၂)
၀၉-၁၂-၂၀၁၉ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၅၁)
၀၈-၁၂-၂၀၁၉ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၅၀)
၀၇-၁၂-၂၀၁၉ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၄၉)
၀၆-၁၂-၂၀၁၉ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၄၈)
၀၅-၁၂-၂၀၁၉ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၄၇)
၀၃-၁၂-၂၀၁၉ – ကိုယ်ချင်းစာတရားနှင့်ကိုယ်ကျင့်သီလ တရားတော်
၀၂-၁၂-၂၀၁၉ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၄၆)
၀၁-၁၂-၂၀၁၉ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၄၅)
၀၁-၁၂-၂၀၁၉ – သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် စစ်ကိုင်း စာဝါပို့ချခြင်း
၃၀-၁၁-၂၀၁၉ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၄၄)
၃၀-၁၁-၂၀၁၉ – သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် စစ်ကိုင်း စာဝါပို့ချခြင်း
၂၉-၁၁-၂၀၁၉ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၄၃)
၂၉-၁၁-၂၀၁၉ – သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် စစ်ကိုင်း စာဝါပို့ချခြင်း
၂၈-၁၁-၂၀၁၉ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၄၂)
၂၇-၁၁-၂၀၁၉ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၄၁)
၂၅-၁၁-၂၀၁၉ – အရှင်မဟာကဿပမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကားများ တရားတော် အပိုင်း (၃)
၂၅-၁၁-၂၀၁၉ – အနုမောဒနာတရားတော်
၂၃-၁၁-၂၀၁၉ – ရှင်မဟာကဿပမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကားများ အပိုင်း(၂)
၂၁-၁၁-၂၀၁၉ – ရှင်မဟာကဿပမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကားများ အပိုင်း(၁)
၂၀-၁၁-၂၀၁၉ – အရှင်အာနန္ဒာမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကားများ (၆) တရားတော်
၁၉-၁၁-၂၀၁၉ – လူတိုင်းအတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမစကားများ
၁၄-၁၁-၂၀၁၉ – အရှင်အာနန္ဒာမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကားများ (၅) တရားတော်
၁၁-၁၁-၂၀၁၉ – ဝဇိတာနန္ဒဓမ္မစင်တာကျောင်းတိုက် ကထိန်အလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနား
၀၉-၁၁-၂၀၁၉ – အရှင်အာနန္ဒာမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကားများ (၄) တရားတော်
၀၈-၁၁-၂၀၁၉ – အရှင်အာနန္ဒာမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကားများ (၃) တရားတော်
၀၆-၁၁-၂၀၁၉ – အရှင်အာနန္ဒာမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကားများ (၂) တရားတော်
၀၄-၁၁-၂၀၁၉ – ကထိန်အလှူတော် တရားတော်
၃၀-၁၀-၂၀၁၉ – ကောင်းမှုတိုးပွား ထာဝရကုသိုလ်များ တရားတော်
၂၉-၁၀-၂၀၁၉ – ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် တရားနှင့် ဝိပဿနာရှုပွားခြင်း တရားတော်
၂၇-၁၀-၂၀၁၉ – အရှင်အာနန္ဒာမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကားများ (၁)တရားတော်
၂၅-၁၀-၂၀၁၉ – အရှင်သာရိပုတ္တမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကား အပိုင်း (၅) တရားတော်
၂၄-၁၀-၂၀၁၉ – အရှင်သာရိပုတ္တမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကား အပိုင်း (၄) တရားတော်
၂၀-၁၀-၂၀၁၉ – အရှင်သာရိပုတ္တမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကား (၃) တရားတော်
၁၉-၁၀-၂၀၁၉ – အရှင်သာရိပုတ္တမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကား (၂) တရားတော်
၁၈-၁၀-၂၀၁၉ – အရှင်သာရိပုတ္တမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကား အပိုင်း(၁) တရားတော်
၁၇-၁၀-၂၀၁၉ – ပါရာပရိယမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကားများ တရားတော်
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ – အနုရုဒ္ဓါမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကားများ (၂) တရားတော်
၁၆-၁၀-၂၀၁၉ – အနုမောဒနာ သြဝါဒ တရားတော်
၁၅-၁၀-၂၀၁၉ – အနုရုဒ္ဓါမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကားများ (၁) တရားတော်
၁၅-၁၀-၂၀၁၉ – အနုမောဒနာသြဝါဒတရားတော်
၁၃-၁၀-၂၀၁၉ – အဘိဓမ္မာနေ့မြတ်အခါ တရားတော် (သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့)
၁၁-၁၀-၂၀၁၉ – အင်္ဂုလိမာလမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကားများ (၁)
၁၂-၁၀-၂၀၁၉ – အင်္ဂုလိမာလမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကားများ (၂)
၁၀-၁၀-၂၀၁၉ – ဘဒ္ဒိယမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကား
o၉-၁၀-၂၀၁၉ – အရှင်ဥပါလိနှင့်ဝိနယသာသနာ
o၈-၁၀-၂၀၁၉ – သေလ မထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကား တရားတော်
o၇-၁၀-၂၀၁၉ – မာလုကျပုတ္တမထေရ်မြတ်၏ အမှတ်တရစကား
o၇-၁၀-၂၀၁၉ – သြဝါဒကထာ တရားတော်
၀၆-၁၀-၂၀၁၉ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၃၉)
၂၉.၀၉.၂၀၁၉ – အနုမောဒနာသြဝါဒတရားတော် (သကျဓိတာ ဗုဒ္ဓကောလိပ် သီလရှင်စာသင်တိုက်)
၂၇-၀၉-၂၀၁၉ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၃၈)
၂၆-၉-၂၀၁၉ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၃၇)
၂၅-၀၉-၂၀၁၉ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၃၆)
၂၄-၀၉-၂၀၁၉ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၃၅)
၂၄-၀၉-၂၀၁၉ – သြဝါဒကထာ တရားတော်
၂၃-၀၉-၂၀၁၉ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၃၄)
၂၂-၀၉-၂၀၁၉ – ရှင်ရဋ္ဌပါလမထေရ်မြတ် ဟောကြားအပ်သောတရား (အပိုင်း-၂ )
၂၁-၀၉-၂၀၁၉ – ရှင်ရဋ္ဌပါလမထေရ်မြတ် ဟောကြားအပ်သောတရား (အပိုင်း-၁ )
၂၁-၀၉-၂၀၁၉ – အနုမောဒနာသြဝါဒတရားတော်
၂၀-၀၉-၂၀၁၉ – မထေရ်မြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း(၁၆၅)
၁၉-၀၉-၂၀၁၉ – မထေရ်မြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း(၁၆၄)
၁၇-၀၉-၂၀၁၉ – မထေရ်မြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း(၁၆၂)
၁၆-၀၉-၂၀၁၉ – မထေရ်မြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း(၁၆၁)
၁၆-၀၉-၂၀၁၉ – မထေရ်မြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း(၁၆၀)
၁၅.၀၉.၂၀၁၉ – အနုမောဒနာ သြဝါဒတရားတော် (ပြင်ဦးလွင်)
၁၄-၀၉-၂၀၁၉ – မထေရ်မြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း(၁၅၉)
၁၁-၀၉-၂၀၁၉ – ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် ဓမ္မပညာသင်တန်း (B)
၁၁-၀၉-၂၀၁၉ – ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် ဓမ္မပညာသင်တန်း (A)
၁၀-၀၉-၂၀၁၉ – ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် ဓမ္မပညာသင်တန်း (B)
၁၀-၀၉-၂၀၁၉ – ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် ဓမ္မပညာသင်တန်း (A)
၀၉-၀၉-၂၀၁၉ – ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် ဓမ္မပညာသင်တန်း (B)
၀၉-၀၉-၂၀၁၉ – ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် ဓမ္မပညာသင်တန်း (A)
၀၉.၀၉.၂၀၁၉ – မလွန်စျေး ဆန်လှူအသင်းကြီး၏ ၁၂၃ နှစ်မြောက် မဟာဒဏ္ဍုလဒါန ရေစက်ချ အနုမောဒနာတရားတော် (မန္တလေး)
၀၈.၀၉.၂၀၁၉ – ယင်ကောင်နှင့်တူသော စိတ် တရားတော် (ချမ်းသာကြီးဘုရား ရွှေဘိုမြို့)
၀၈.၀၉.၂၀၁၉ – တေမိယဇာတ်တော်လာ မိတ္တပူဇာ တရားတော် (မန္တလေး)
၀၈-၀၉-၂၀၁၉ – ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် ဓမ္မပညာသင်တန်း (B)
၀၈-၀၉-၂၀၁၉ – ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် ဓမ္မပညာသင်တန်း (A)
၀၇-၀၉-၂၀၁၉ – ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် ဓမ္မပညာသင်တန်း (B)
၀၇-၀၉-၂၀၁၉ – ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် ဓမ္မပညာသင်တန်း (A)
၀၆-၀၉-၂၀၁၉ – ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် ဓမ္မပညာသင်တန်း (B)
၀၆-၀၉-၂၀၁၉ – ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် ဓမ္မပညာသင်တန်း (A)
၀၅-၀၉-၂၀၁၉ – ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် ဓမ္မပညာသင်တန်း (B)
၀၅-၀၉-၂၀၁၉ – ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် ဓမ္မပညာသင်တန်း (A)
၀၄-၀၉-၂၀၁၉ – ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် ဓမ္မပညာသင်တန်း (B)
၀၄-၀၉-၂၀၁၉ – ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် ဓမ္မပညာသင်တန်း (A)
၀၃-၀၉-၂၀၁၉ – ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် ဓမ္မပညာသင်တန်း (B)
၀၃-၀၉-၂၀၁၉ – ဓမ္မူပပရိက္ခာပို့ချချက် ဓမ္မပညာသင်တန်း (A)
၀၂-၀၉-၂၀၁၉ – မထေရ်မြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း(၁၅၈)
၀၁-၀၉-၂၀၁၉ – မထေရ်မြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း(၁၅၇)
၀၁-၀၉-၂၀၁၉ – မွေးနေ့မင်္ဂလာတရားတော်
၃၁-၀၈-၂၀၁၉ – မထေရ်မြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း(၁၅၆)
၃၀-၀၈-၂၀၁၉ – မထေရ်မြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း(၁၅၅)
၂၉-၀၈-၂၀၁၉ – မထေရ်မြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း(၁၅၄)
၂၇-၀၈-၂၀၁၉ – မထေရ်မြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း(၁၅၃)
၂၆-၀၈-၂၀၁၉ – မထေရ်မြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း(၁၅၂)
၂၅-၀၈-၂၀၁၉ – မထေရ်မြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း(၁၅၁)
၂၄-၀၈-၂၀၁၉ – မထေရ်မြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း(၁၅၀)
၂၃-၀၈-၂၀၁၉ – မထေရ်မြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း(၁၄၉)
၂၂-၀၈-၂၀၁၉ – သြဝါဒကထာတရားတော်
၂၁-၀၈-၂၀၁၉ – မထေရ်မြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း(၁၄၈)
၁၆-၀၈-၂၀၁၉ – မထေရ်မြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း(၁၄၇)
၁၅-၀၈-၂၀၁၉ – မထေရ်မြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း(၁၄၆)
၁၄-၀၈-၂၀၁၉ – သြဝါဒကထာတရားတော်
၁၂-၀၈-၂၀၁၉ – မထေရ်မြတ်တို့၏အမှတ်တရစကားများအပိုင်း(၁၄၅)
၁၁-၀၈-၂၀၁၉ – အနုမောဒနာသြဝါဒတရားတော်
၀၉-၀၈-၂၀၁၉ – မဟော်သဓာပညာရှိနှင့် သူ၏ပညာစွမ်းအား အပိုင်း(၁၆)
၀၈-၀၈-၂၀၁၉ – စကားနှင့်နားထောင်သူ
၀၇-၀၈-၂၀၁၉ – အနုမောဒနာသြဝါဒတရားတော်
၀၅-၀၈-၂၀၁၉ – အနုမောဒနာသြဝါဒတရားတော်
၁-၇-၂၀၁၉ – မြင့်မြတ်သူအကြောင်း တရားတော်
၁-၇-၂၀၁၉ – ၀ါဆိုအလှူ အနုမောဒနသြဝါဒ တရားတော် (နိုဗိုတယ် ဟိုတယ်)
၂၁-၆-၂၀၁၉ – မဟောသဓာပညာရှိနှင့် သူ၏ပညာစွမ်းအား အပိုင်း(၁၅)
၁၉-၆-၂၀၁၉ – အနုမောဒနာသြဝါဒတရားတော်
၁၈-၆-၂၀၁၉ – အတ္တသမ္မာ ပဏီဓိ တရားတော်
၁၇-၆-၂၀၁၉ – (၆၅)ကြိမ်မြောက် မဟာသုဗောဓာရုံကျောင်းတိုက်နေ့ သြဝါဒတရားတော်
၁၇-၅-၂၀၁၉ အနုမောဒနာ သြဝါဒ
မဟော်သဓာပညာရှိနှင့် သူ၏ပညာစွမ်းအား အပိုင်း(၁) (၁၃.၄.၂၀၁၉)
မဟော်သဓာပညာရှိနှင့် သူ၏ပညာစွမ်းအား အပိုင်း(၂) (၁၄.၄.၂၀၁၉)
မဟော်သဓာပညာရှိနှင့် သူ၏ပညာစွမ်းအား အပိုင်း(၃) (၁၅.၄.၂၀၁၉)
မဟော်သဓာပညာရှိနှင့် သူ၏ပညာစွမ်းအား အပိုင်း(၄) (၁၆.၄.၂၀၁၉)
မဟော်သဓာပညာရှိနှင့် သူ၏ပညာစွမ်းအား အပိုင်း(၅) (၁၇.၄၂၀၁၉)
မဟော်သဓာပညာရှိနှင့် သူ၏ပညာစွမ်းအား အပိုင်း(၆) (၁၈.၄.၂၀၁၉)
မဟော်သဓာပညာရှိနှင့် သူ၏ပညာစွမ်းအား အပိုင်း(၇) (၂၀.၄.၂၀၁၉)
မဟော်သဓာပညာရှိနှင့် သူ၏ပညာစွမ်းအား အပိုင်း(၈) (၁၇.၅.၂၀၁၉)
မဟော်သဓာပညာရှိနှင့် သူ၏ပညာစွမ်းအား အပိုင်း(၉) (၁၈.၅.၂၀၁၉)
မဟော်သဓာပညာရှိနှင့် သူ၏ပညာစွမ်းအား အပိုင်း(၁၀) (၁၉.၅.၂၀၁၉)
မဟော်သဓာပညာရှိနှင့် သူ၏ပညာစွမ်းအား အပိုင်း(၁၁) (၂၀.၅.၂၀၁၉)
မဟော်သဓာပညာရှိနှင့် သူ၏ပညာစွမ်းအား အပိုင်း(၁၂) (၂၁.၅.၂၀၁၉)
မဟော်သဓာပညာရှိနှင့် သူ၏ပညာစွမ်းအား အပိုင်း(၁၃) (၂၅.၅.၂၀၁၉)
မဟော်သဓာပညာရှိနှင့် သူ၏ပညာစွမ်းအား အပိုင်း(၁၄) (၂၆.၅.၂၀၁၉)
မဟောသဓာပညာရှိနှင့် သူ၏ပညာစွမ်းအား အပိုင်း(၁၅) (၂၁.၆.၂၀၁၉)
မဟော်သဓာပညာရှိနှင့် သူ၏ပညာစွမ်းအား အပိုင်း(၁၆) (၀၉.၈.၂၀၁၉)
၁-၁၁-၂၀၁၈ ကံ၊ ကိလေသာ၊ ဘဝသံသရာ တရားတော် (စင်္ကာပူနိုင်ငံ)
၀၄-၀၁-၂၀၂၀ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း (၆၅)
၀၃-၀၁-၂၀၂၀ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း (၆၄)
၀၁-၀၁-၂၀၂၀ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း (၆၃)
၂၄-၁၁-၂၀၁၉ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၄၀)
၂၆-၀၉-၂၀၁၉ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်ခန်းစာများ အပိုင်း(၃၇)
၀၃-၀၂-၂၀၁၉ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၃၃)
၂၅-၀၁-၂၁၀၉ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၃၂)
၂၄-၀၁-၂၀၁၉ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၃၁)
၂၃-၀၁-၂၀၁၉ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၃၀)
၂၂-၀၁-၂၀၁၉ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၂၉)
၂၁-၀၁-၂၀၁၉ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၂၈)
၁၈-၀၁-၂၀၁၉ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၂၇)
၀၁-၀၁-၂၀၁၉ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၂၆)
၃၀-၁၂-၂၀၁၈ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၂၅)
၂၉-၁၂-၂၀၁၈ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၂၄)
၂၈-၁၂-၂၀၁၈ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၂၃)
၂၇-၁၂-၂၀၁၈ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၂၂)
၂၆-၁၂-၂၀၁၈ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၂၁)
၂၅-၁၂-၂၀၁၈ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၂၀)
၂၄-၁၂-၂၀၁၈ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၁၉)
၂၃-၁၂-၂၀၁၈ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၁၈)
၂၂-၁၂-၂၀၁၈ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၁၇)
၂၀-၁၂-၂၀၁၈ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၁၆)
၁၉-၁၂-၂၀၁၈ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၁၅)
၁၈-၁၂-၂၀၁၈ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၁၄)
၁၇-၁၂-၂၀၁၈ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၁၃)
၁၆-၁၂-၂၀၁၈ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၁၂)
၁၄-၁၂-၂၀၁၈ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၁၁)
၁၃-၁၂-၂၀၁၈ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့်ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၁၀)
၁၂-၁၂-၂၀၁၈ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၉)
၁၁-၁၂-၂၀၁၈ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၈)
၁၀-၁၂-၂၀၁၈ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၇)
၀၉-၁၂-၂၀၁၈ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၆)
၀၈-၁၂-၂၀၁၈ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၅)
၀၇-၁၂-၂၀၁၈ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၄)
၀၆-၁၂-၂၀၁၈ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၃)
၀၅-၁၂-၂၀၁၈ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၂)
၀၄-၁၂-၂၀၁၈ – ဓမ္မပဒဒေသနာမှ ဓမ္မရသနှင့် ဘဝသင်္ခန်းစာများ အပိုင်း(၁)
၀၄-၀၉-၂၀၁၈ မထေရ်မြတ်တို့၏ အမှတ်တရ စကားများ အပိုင်း(၉၈)
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေများ
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၁
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၂
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၃
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၄
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၅
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၆
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၇
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၈
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၉
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၁၀
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၁၁
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၁၂
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၁၃
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၁၄
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၁၅
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၁၆
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၁၇
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၁၈
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၁၉
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၂၀
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၂၁
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၂၂
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၂၃
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၂၄
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၂၅
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၂၆
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၂၇
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၂၈
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၂၉
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၃၀
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၃၁
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၃၂
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၃၃
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၃၄
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၃၅
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၃၆
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၃၇
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၃၈
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၃၉
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၄၀
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၄၁
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၄၂
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၄၃
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၄၄
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၄၅
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၄၆
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၄၇
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၄၈
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၄၉
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၅၀
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၅၁
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၅၂
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၅၃
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၅၄
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၅၅
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၅၆
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၅၇
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၅၈
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၅၉
ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ ဆိုင်ရာအမေးအဖြေ – ၆၀
*ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်၏ တရားတော်များကို အမျိုးအစားတူရာစုဆည်းမှု*
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ဂုဏ်တော်များ ရှင်းလင်းချက်သဘာဝတရားများကို အစုလိုက်လေ့လာခြင်း အပိုင်း (၁) မှ အပိုင်း (၁၀) အထိပရိတ်ကြီး (၁၁)သုတ် အနှစ်ချုပ်များဓမ္မစကြာ အပိုင်း (၁) မှ အပိုင်း (၄) အထိ “စိတ်”နှင့်ပတ်သက်သောတရားများ “သုတ်” အနှစ်ချုပ်များ အဘိဓမ္မာ တရားတော်များဝိပဿနာ တရားတော်များပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာ တရားတော်များ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုပဋ္ဌာန်းနည်းဖြင့်လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း တရားတော်များ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် အပိုင်း (၁) မှ အပိုင်း (၈၂) အထိ“နိဗ္ဗာန်” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် တရားတော်များ“ဘဝ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် တရားတော်များဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်း စကားများ အပိုင်း (၁) မှ အပိုင်း (၃၁) အထိမိလိန္ဒမင်းနှင့်ရှင်နာဂသေနတို့၏ ဗုဒ္ဓဝါဒရေးရာ အချေအတင်ပြောဆိုချက်များ အပိုင်း (၁) မှ အပိုင်း (၂၅) အထိ
၂၂-၁၀-၂၀၁၁ ဘာသာတရားကို ရွေးချယ်ခြင်း
၂၃-၁၀-၂၀၁၁ ဘာသာတရားကို လိုက်နာ ကျင့်သုံးခြင်း
၂၄-၁၀-၂၀၁၁ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ မဇ္ဈိမ ပဋိပဒါ တရား အကြောင်း ဒေသနာတော်
၁၀၆။ ဓမ္မအမေးအဖြေ (စင်္ကာပူ) (၂၇.၁၀.၂၀၁၂)
၁၀၇။ ဓမ္မအမေးအဖြေ (စင်္ကာပူ) (eng) (၁၈.၁၀.၂၀၁၂)
၁၀၈။ အဆုံးအမများ (စင်္ကာပူ)
၁၀၉။ အဆုံးအမများ (စင်္ကာပူ)
၁၁၀။ အဆုံးအမများ (စင်္ကာပူ)
၁၁၁။ အဆုံးအမများ (စင်္ကာပူ)
၁၁၂။ အဆုံးအမများ (စင်္ကာပူ)
၁၁၃။ အဆုံးအမများ (စင်္ကာပူ)
၁၁၄။ အဆုံးအမများ (စင်္ကာပူ)
၁၂၇။ သံသရာနှင့် နိဗ္ဗာန် (၁) (၄-၄-၂၀၁၅) (စင်္ကာပူ)
၁၂၈။ သံသရာနှင့် နိဗ္ဗာန် (၂) (၅-၄-၂၀၁၅) (စင်္ကာပူ)
အောက်ပါ တရားတော်များသည် ဆရာတော်ကြီးမှ အလင်းတန်းတရားဖြန့်ချီရေးနှင့်
ပြန်လည် စီစဉ် ထုတ်ဝေထားသော တရားတော်များ ဖြစ်ပါသည်
ဟောကြားတော်မူအပ်သောတရားတော်များ (အတွဲ -၁ )
ဖိုင်အမှတ်စဉ် – ၁
ဖိုင်အမှတ်စဉ် – ၂
၀၀၈။ ရုပ်တရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း (၁)
၀၀၉။ ရုပ်တရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း (၂)
၀၁၆။ စိတ်ဖြစ်ပုံကိုလေ့လာခြင်း (၁)
၀၁၇။ စိတ်ဖြစ်ပုံကိုလေ့လာခြင်း (၂)
၀၁၉။ စိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာခြင်း (၁)
၀၂၀။ စိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာခြင်း (၂)
ဖိုင်အမှတ်စဉ် – ၃
ဖိုင်အမှတ်စဉ် – ၄
ဖိုင်အမှတ်စဉ် – ၅
ဖိုင်အမှတ်စဉ် – ၆
၀၆၇။ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်အနှစ်ချုပ် (နိဒါန်း)
၀၆၈။ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်အနှစ်ချုပ် (ကာယာနုပဿနာ)
၀၆၉။ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်အနှစ်ချုပ် (ဝေဒနာနုပဿနာ)
၀၇၁။ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်အနှစ်ချုပ် (ဓမ္မာနုပဿနာ)
ဖိုင်အမှတ်စဉ် – ၇
၀၇၂။ နိဗ္ဗာန်တံခါးကြီးဖွင့်တော်မူပါ (၁)
၀၇၃။ နိဗ္ဗာန်တံခါးကြီးဖွင့်တော်မူပါ (၂)
၀၇၄။ နိဗ္ဗာန်တံခါးကြီးဖွင့်တော်မူပါ (၃)
၀၇၅။ နိဗ္ဗာန်တံခါးကြီးဖွင့်တော်မူပါ (၄)
ဖိုင်အမှတ်စဉ် – ၈
၀၇၆။ သစ္စဒေသနာဓမ္မစကြာ (၁)
၀၇၇။ သစ္စဒေသနာဓမ္မစကြာ (၂)
၀၇၈။ သစ္စဒေသနာဓမ္မစကြာ (၃)
၀၇၉။ သစ္စဒေသနာဓမ္မစကြာ (၄)
၀၈၀။ အနတ္တလက္ခဏသုတ် အနှစ်ချုပ်
ဖိုင်အမှတ်စဉ် – ၉
၀၈၄။ အက္ခဏ သုတ္တန်
၀၈၅။ အဘယ သုတ္တန်
၀၈၆။ သမာပတ္တိ သုတ္တန်
၀၈၇။ သမာပတ္တိ သုတ္တန်
< ၀၈၉။ ကတ္တာရုဇာတ်
၀၉၁။ အမြတ်ရတနာ ဥပါသကာကျင့်စဥ်
၀၉၆။ ဃဋိကာရ သုတ္တန်
ဖိုင်အမှတ်စဉ် – ၁၀
၁၄၃။ ဒိဠေ ဒိဠေ မတ္တံ
၁၄၈။ (၂၅၉၇) ကြိမ်မြောက် ဓမ္မစကြာအခါတော်နေ့
၁၅၂။ အသိသုံးပါး နှင့်အမေးအဖြေ
၁၆၂။ အနှစ်မဲ့တာမြင်မှအနှစ်သာရ ရနိုင်မည်
၁၆၆။ ပါရမီပုံရိပ် အမှတ်တံဆိပ်
၁၆၇။ စွမ်းအားပြည့်စိတ်နှင့် စွမ်းအားမဲ့စိတ်
ဖိုင်အမှတ်စဉ် – ၁၁
၁၈၂။ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ
၁၈၉။ န စ သော န စ အညော
၁၉၁။ သဗ္ဗေ ဓမ္မာ အနတ္တာ
၁၉၈။ မတူတာတွေကို အတူထားနိုင်ခြင်း
၁၉၉။ အဘိဓမ္မာ နှင့် ဝိပဿနာ
၂၀၀။ အဘိဓမ္မာဆိုင်ရာ ဗဟုသုတနှင့်အမေးအဖြေများ – ၁
၂၀၁။ အဘိဓမ္မာဆိုင်ရာ ဗဟုသုတနှင့်အမေးအဖြေများ – ၂
၂၀၂။ ဆုမြတ်(၆) ဖြာ
၂၁၀။ ကံကိုဖယ်ရှား ကံတရား
၂၁၇။ အနတမဂ္ဂ သံသရာ
၂၂၀။ ၁၂-နှစ်ကြာ အဖြေရှာခဲ့ရသော မေးခွန်းများ
၂၂၇။ ပါရမီရှင်တို့၏ဘဝ (ကုဏ္ဍလကေသာ)
၂၂၈။ ပါရမီရှင်တို့၏ဘဝ (ကိသာဂေါတမီ)
၂၄၄။ ဥပါဒါန ပစ္စယော ဘဝေါ
၂၄၇။ လူတိုင်းအတွက် ဝိပဿနာ
၂၅၃။ သာသနာပြု မြတ်ကောင်းမှု
၂၅၄။ အကြောင်းကင်းပြတ် အငြိမ်းဓါတ်
၂၆၄။ သံဝေဇနိယ ဓမ္မကထာ
ဖိုင်အမှတ်စဉ် – ၁၂
၂၆၇။ မေတ္တ သုတ်အနှစ်ချုပ်
၂၇၃။ ဝိယတော ဇာယတေ သောကော
၂၇၅။ ဘဝနှင့်ဆက်စပ်၍ ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း (၁)
၂၇၆။ ဘဝနှင့်ဆက်စပ်၍ ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း (၂)
၂၇၈။ သေဝိတဗ္ဗနှင့် အသေဝိတဗ္ဗ
၂၇၉။ ဒေဝဒဟသုတ် အနှစ်ချုပ်
၂၈၀။ မလ္လိကာဒေဝီ အမေါ်ပုစ္ဆာ
၂၈၆။ သံသရာခရီးသွား အမှားမလုပ်မိစေနှင့်
၂၉၂။ အနာမဲ့သူ ရှင်ဗာကူ
၃၀၁။ ဆန္ဒောဝါဒ သုတ္တန်
၃၀၃။ သမထပုဗ္ဗင်္ဂမ ဝိပဿနာ
၃၀၅။ သင်္ခတ နှင့် အသင်္ခတ
၃၀၇။ ဘဝခရီးသွား အနည်းအများ
၃၁၁။ ရေစက်ချ အနုမောဒနာ
၃၁၂။ သတိမကွာ အသိပညာဖြင့်နေထိုင်ခြင်း
၃၁၈။ သတိမထားက လှည့်စားခံရခြင်း
၃၂၁။ အခက်ခဲကျော်လွှား လူခွန်အား
၃၂၆။ ရန်ကုန်မြို့ သဒ္ဓမ္မရံသီ ယောဂီများဝါဆိုသင်္ကန်းကပ် အနုမောဒနာ
၃၂၈။ စစ်ကိုင်းမြို့မဟာသုဘောဓာရ ကျောင်းဆောင်သစ်ရေစက်ချအနုမောဒနာ
၃၂၉။ မုံရွာမြို့ သဒ္ဓမ္မဇောတိကသုဗောဓာရုံကျောင်းအတွင်းတွင်ကျောင်းဆောင်ရေစက်ချအနုမောဒနာ
၃၃၀။ တိပိဋက ပူဇော်ပွဲ သြဝါဒတရား
၃၃၁။ စစ်ကိုင်းမြို့ မဟာသုဗောဓာရုံ(၅၂)နှစ်ပြည့်ကျောင်းတိုက်နေ့ သြဝါဒတရား
၃၃၂။ ကွန်ပြူတာ တက္ကသိုလ် ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ် အနုမောဒနာ
၃၃၃။ ရတနာသုတ် အနှစ်ချုပ်-၁
၃၃၄။ ရတနာသုတ် အနှစ်ချုပ်-၂
၃၃၆။ အဝိဇ္ဇာနှင့် ဝိဇ္ဇာ
၃၃၈။ ဘုရားအလောင်းတို့၏ ဘဝအပေါ် ရှုမြင်သုံးသပ်ခြင်း
၃၃၉။ ပညာဝိမုတ္တ ရဟန္တာ
၃၄၀။ သွားဘက်ဆိုင်ရာ မဟာပုရိသ လက္ခဏာတော်
၃၄၁။ ဒက္ခိဏဝိဘင်္ဂသုတ် အနှစ်ချုပ်
၃၄၂။ ဓမ္မအမေးနှင့်အဖြေများ – ၁
၃၄၃။ ဓမ္မအမေးနှင့်အဖြေများ – ၂
၃၄၄။ ဓမ္မအမေးနှင့်အဖြေများ – ၃
၃၄၅။ AKH မိသားစု၏ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ် အနုမောဒနာ
၃၄၆။ အိမ်သစ်တက်အလှူ အနုမောဒနာ
ဟောကြားတော်မူအပ်သောတရားတော်များ (အတွဲ -၂ )
၀၀၁။ စွယ်တော်လေးဆူ ဘုရားရှိခိုး
၀၀၂။ ဆရာ နှင့် တပည့်
၀၀၄။ လူလိမ္မာ ပညာရှိ
၀၀၅။ သင်ယူခြင်း နှင့် သာသနာ
၀၀၆။ ကောင်းကျိုးပြည့်၀ မြတ်သီလ
၀၀၈။ ဤဘဝ၏အခြားမဲ့ ၌
၀၀၉။ ဆဆက္ကဒေသနာ နှင့် ဓမ္မဝိပဿနာ
၀၁၀။ မဟာပညာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ ထူးခြားသောတရား (၂)ပုဒ်
၀၁၂။ ကာယဘာဝနာနှင့် စိတ္တဘာဝနာ
၀၁၄။ ရှင်ရာဟုလာ၏ဘဝနှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမ -၁
၀၁၅။ ရှင်ရာဟုလာ၏ဘဝနှင့် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမ-၂
၀၁၆။ ရှင်ရာဟုလာ၏ဘဝနှင့် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမ -၃
၀၁၉။ သူတော်ကောင်း နှင့် သူတော်ကောင်းတရား
၀၂၄။ ဆွမ်းအနုမောဒနာ (ဖြုးမိသာစု)
၀၂၆။ ပါရာယနဒေသနာ – ၁
၀၂၇။ ပါရာယနဒေသနာ -၂
၀၂၈။ ပါရာယနဒေသနာ – ၃
၀၂၉။ ပါရာယနဒေသနာ – ၄
၀၃၀။ ပါရာယနဒေသနာ – ၅
၀၃၁။ ပါရာယနဒေသနာ – ၆
၀၃၂။ ပါရာယနဒေသနာ – ၇
၀၃၃။ ပါရာယနဒေသနာ – ၈
၀၃၄။ ပါရာယနဒေသနာ – ၉
၀၃၅။ ဗုဒ္ဓ္ဓစွမ်းအား ဉာဏ် (၁၀) ပါး
၀၃၇။ ခန္ခာနှင့် ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ
၀၃၈။ ပဋိသမ္ဘိဒါ ဉာဏ်ကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း
၀၄၀။ သာရဏီယ အနုမောဒနာ (သံလျင်)
၀၄၂။ ကုသိုလ်တစ်ပဲ ငရဲတစ်ပိဿာ
၀၄၃။ သူယုတ်မာတို့၏ အမူအကျင့်များ – ၁
၀၄၄။ သူယုတ်မာတို့၏ အမူအကျင့်များ -၂
၀၄၅။ ဓမ္မစကြာည၏ အမှတ်တရဒေသနာ
၀၄၆။ နိဗ္ဗာန်သည် အားလုံးအတွက်
၀၄၇။ ပြစ်မှားခြင်း နှင့် ဒဏ်သင့်ခြင်း
၀၄၈။ နိယျာနိက သာသနာ
၀၅၀။ သုခချမ်းသာ အကြောင်းရှာ
၀၅၁။ ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမည့် အရည်အချင်းများ
၀၅၂။ မဓုပိဏ္ဍိကသုတ် အနှစ်ချုပ်
၀၅၃။ ဝေဒနာတရားကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း – ၁
၀၅၄။ ဝေဒနာတရားကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း -၂
၀၅၅။ ဝေဒနာတရားကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း – ၃
၀၅၆။ ဝေဒနာတရားကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း – ၄
၀၅၇။ ဝေဒနာတရားကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း – ၅
၀၅၈။ ယထာဘူတ ဒဿန
၀၅၉။ ကမ္မဝဋ်မှ လွတ်မြောက်ရေး
၀၆၀။ လက်တွဲညီညာ သာသနာပြုကြ
၀၆၂။ မာရ်နတ်သို့တုန့်ပြန်ပြောကြားသည့် ဘိက္ခုနီတို့၏ဓမ္မစကား – ၁
၀၆၃။ မာရ်နတ်သို့တုန့်ပြန်ပြောကြားသည့် ဘိက္ခုနီတို့၏ဓမ္မစကား – ၂
၀၆၄။ မာရ်နတ်သို့တုန့်ပြန်ပြောကြားသည့် ဘိက္ခုနီတို့၏ဓမ္မစကား – ၃
၀၆၅။ မာရ်နတ်သို့တုန့်ပြန်ပြောကြားသည့် ဘိက္ခုနီတို့၏ဓမ္မစကား – ၄
၀၆၆။ သိက္ခာထပ်၊ ရဟန်းခံ၊မွေးနေ့ အလှူအနုမောဒနာ
၀၆၇။ ဘာသာတရားနှင့် ကိုးကွယ်မှုသရဏဂုံ
၀၆၈။ ပုဂ္ဂိုလ်လေးဆင့် ကြာလေးပွင့်
၀၇၀။ အခွင့်ကောင်းကို ရအောင်ယူ
၀၇၁။ သံသရာအမှား နှင့် ရှင်သာရိပုတြာ၏အကြင်နာတရား
၀၇၂။ မိဘကျေးဇူးတရားနှင့် ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမစကား
၀၇၃။ အလေးထား ၍စဉ်းစားဆင်ခြင်ကောင်းအောင်ပြင်
၀၇၄။ ကိုယ့်ဘဝ ကိုယ်ပြင်
၀၇၅။ မကောင်းမှုရှောင် ကောင်းမှုဆောင်
၀၇၇။ ကမ္မနိယာမ နှင့် လောကသဘာဝ
၀၇၈။ ရှာဖွေခြင်း နှင့် ရရှိခြင်း
၀၇၉။ ငါမရှိလျှင် ငါ့ဟာမရှိ
၀၈၃။ အနုမောဒနာ ( ရွှေမြိုင်သီလရှင်ကျောင်း)
၀၈၄။ ဗောဓိပက္ခိယတရားကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း – ၁
၀၈၅။ ဗောဓိပက္ခိယတရားကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း – ၂
၀၈၆။ ဗောဓိပက္ခိယတရားကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း – ၃
၀၈၇။ ဗောဓိပက္ခိယတရားကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း – ၄
၀၈၈။ ဗောဓိပက္ခိယတရားကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း – ၅
၀၈၉။ ဗောဓိပက္ခိယတရားကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း – ၆
၀၉၀။ ဗောဓိပက္ခိယတရားကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း – ၇
၀၉၁။ ဗောဓိပက္ခိယတရားကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း – ၈
၀၉၂။ ဗောဓိပက္ခိယတရားကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း – ၉
၀၉၃။ ဗောဓိပက္ခိယတရားကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း – ၁၀
၀၉၄။ မွေးနေ့အနုမောဒနာ ( ကိုရန်အောင်ဖြူး)
၀၉၅။ အမ္ဗ္ဗပါလီ၏ဘဝ နှင့် သင်္ခန်းစာ
၁၀၀။ အရှုပ်ကို ရှင်းနိုင်သူ
၁၀၁။ သဒ္ဓမ္မပတိရူပကသုတ် အနှစ်ချုပ်
၁၀၃။ ဘုရားပွင့်မှ ကြားရသည့်အဖြေ
၁၀၄။ အဖေါ်နဲ့နေခြင်းနှင့် အဖေါ်မဲ့နေခြင်း
၁၀၇။ ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိကို လေ့ကျင့်မွေးမြူခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း
၁၀၉။ အိမ်တက်အလှူမင်္ဂလာအနုမောဒနာ (ဦးစံသာ)
၁၁၀။ သြဝါဒ အနုမောဒနာ (သန်လျင်)
၁၁၁။ ကမ္မဝိပါကောအစိနေ ္တယျော
၁၁၂။ စုံဆင်းယူ နှင့်ဆန်တက်သူ
၁၁၃။ သြဝါဒအနုမောဒနာ (မြန်အောင်သီလရှင်စာသင်တိုက်)
၁၁၅။ ဓမ္မစာပေသင်ယူခြင်းနှင့် မှန်ကန်သောအမြင်
၁၁၆။ အလှူအနုမောဒနာ (လင်း စိန်ရွှေရတနာဆိုင်)
၁၁၇။ သစ္စာအနက် (၁၆)ချက်ကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း
၁၁၈။ အနုမောဒနာ (စုပေါင်းရဟန်းခံရှင်ပြု)
၁၂၀။ ခိုင်မာသော ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ကြံ့ခိုင်သည့်စိတ်ထား
၁၂၃။ သြဝါဒ အနုမောဒနာ (ထားဝယ်)
၁၂၆။ ဓမ္မသာကစ ္ဆာ
၁၃၁။ သက္ကာယဒိဋ္ဌိက နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကို ပိတ်ဆို့ထားသည်
၁၃၄။ သီလအကြောင်းကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း
၁၃၇။ အာသဝက္ခယကျင့်စဉ် – ၁
၁၃၈။ အာသဝက္ခယကျင့်စဉ် – ၂
၁၃၉။ အာသဝက္ခယကျင့်စဉ် – ၃
၁၄၀။ အာသဝက္ခယကျင့်စဉ် – ၄
၁၄၁။ အာသဝက္ခယကျင့်စဉ် – ၅
၁၄၂။ ပါချုပ်ဆရာတော်၏ (၅၂)ဝါမြောက် ဥပသမ္ပဒါအနုမောဒနာ
၁၄၃။ စိတ်ချမ်းသာမှ ကိုယ်ကျန်းမာ မည်
၁၄၄။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကျေးဇူးကို အထူးပေးဆပ်ခဲ့သူ
၁၄၅။ အကြောင်းရှာကြံ အဖြေမှန်တွေ့ – ၁
၁၄၆။ အကြောင်းရှာကြံ အဖြေမှန်တွေ့ – ၂
၁၄၇။ နတ်တွေစုံစမ်းတဲ့ လူ့ပြည်သတင်း
၁၄၉။ မွေးနေ့အနုမောဒနာ (ပြင်ဦးလွင်မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီးအိမ်)
၁၅၀။ ဘိုးဘွားများနှင့် အပစာယနာကုသိုလ်တရား
၁၅၁။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နှင့် ဝိပဿနာ
၁၅၂။ ဝေဒယိတသုခ နှင့်သန ္တိသုခ
၁၅၃။ အနုမောဒနာ (ရွှေအိုးဝေ ကျောင်းရေစက်ချ)
၁၅၄။ သာမာဝတီ၏ဘဝ နှင့် သင်္ခန်းစာ
၁၅၅။ မြတ်ဗုဒ္ဓဒေသနာ နှင့်စကြာဝဠာ
၁၅၆။ သက္ကပဉ္စသုတ်လာ ဓမ္မမေးခွန်းနှင့် အဖြေများ – ၁
၁၅၇။ သက္ကပဉ္စသုတ်လာ ဓမ္မမေးခွန်းနှင့် အဖြေများ -၂
၁၅၈။ သက္ကပဉ္စသုတ်လာ ဓမ္မမေးခွန်းနှင့် အဖြေများ – ၃
၁၆၀။ ကျင့်ပုံ့ထူးခြား ဉာဏ်စွမ်းအား
၁၆၁။ တရားနာငြား ဉာဏ်စွမ်းအား
ဟောကြားတော်မူအပ်သောတရားတော်များ (အတွဲ -၃ )
DVD MP3 တရားတော်များ ( တတိယတွဲ )
တရားတော် ( ၂၈၉ ) ပုဒ်
၀၀၁။ ဥပနိဿယပစ္စည်းကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း(၁) (၆.၇.၂၀၁၁)
၀၀၂။ ဥပနိဿယပစ္စည်းကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း(၂) (၇.၇.၂၀၁၁)
၀၀၃။ ဥပနိဿယပစ္စည်းကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း(၃) (၈.၇.၂၀၁၁)
၀၀၄။ ဥပနိဿယပစ္စည်းကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း(၄) (၉.၇.၂၀၁၁)
၀၀၅။ ဥပနိဿယပစ္စည်းကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း(၅) (၁၀.၇.၂၀၁၁)
၀၀၆။ ဘဝမှာ အကောင်းဆုံး (၁၁.၇.၂၀၁၁)
၀၀၇။ စွမ်းအားရှိသောစိတ်နှင့် စွမ်းအားပြည့်သောစိတ် (၁၂.၇.၂၀၁၁)
၀၀၈။ သူ့မြတ်တို့၏ လောကတ္ထစရိယတရား (၁၄.၇.၂၀၁၁)
၀၀၉။ ဘဝကူးကောင်းရေး ကျင့်ဆောင်ရေး (၁၇.၇.၂၀၁၁)
၀၁၀။ အရောဂျပရမာ လာဘာ (၁၇.၇.၂၀၁၁)
၀၁၁။ ဘဝဒုက္ခကိုရှုမြင်သုံးသပ်ခြင်း (၂၀.၇.၂၀၁၁)
၀၁၂။ ကိုယ်ရွေးတဲ့လမ်း (၂၁.၇.၂၀၁၁)
၀၁၃။ အပြစ်ကင်းသော အစာအဟာရ (၂၃.၇.၂၀၁၁)
၀၁၄။ တမလွန်ဘဝနှင့် ကံအကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း(၁) (၂၄.၇.၂၀၁၁)
၀၁၅။ တမလွန်ဘဝနှင့် ကံအကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း(၂) (၂၅.၇.၂၀၁၁)
၀၁၆။ သာရဏီယသြဝါဒကထာ ( ဦးစံသာ ) (၂၇.၇.၂၀၁၁)
၀၁၇။ သောတာပန်နှင့် သံယောဇဉ် (၂၇.၇.၂၀၁၁)
၀၁၈။ သာရဏီယသြဝါဒကထာ ( သွားဆေးတက္ကသိုလ် )(၂၈.၇.၂၀၁၁)
၀၁၉။ ဗောဓိပက္ခိယတရားကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း(၁၁)(၁.၈.၂၀၁၁)
၀၂၀။ ဗောဓိပက္ခိယတရားကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း(၁၂)(၂.၈.၂၀၁၁)
၀၂၁။ ဗောဓိပက္ခိယတရားကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း(၁၃)(၃.၈.၂၀၁၁)
၀၂၂။ ဗောဓိပက္ခိယတရားကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း (၁၄)(၄.၈.၂၀၁၁)
၀၂၃။ ဗောဓိပက္ခိယတရားကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း (၁၅)(၅.၈.၂၀၁၁)
၀၂၅။ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ် အနုမောဒနာ (ဦးကောင်း+ဒေါ်ကြင်မွှေး) (၂.၈.၁၁)
၀၂၆။ အနုမောဒနာ (ဒေါ်နန်းစံခမ်း)(၃.၈.၂၀၁၁)
၀၂၇။ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ် အနုမောဒနာ (ဦးတင်မြင်အောင်)(၄.၈.၂၀၁၁)
၀၂၈။ အနုမောဒနာ ( ဒုဗိုလ်မှူးကြီးတင်မျိုးမြင့် )(၇.၈.၂၀၁၁)
၀၂၉။ ဆွမ်း အနုမောဒနာ (ဦးမောင်မောင်တာ+ဒေါ်မြင့်မြင့်ဝေ)(၈.၈.၂၀၁၁)
၀၃၀။ သံသရာခရီးသွား အမှားလုပ်မိသူများ (၉.၈.၂၀၁၁)
၀၃၁။ သမ္မာပဋိပဒါ (၁၀.၈.၂၀၁၁)
၀၃၂။ လုပ်မိတဲ့အမှား ဖယ်ရှားခြင်း (၁၁.၈.၂၀၁၁)
၀၃၃။ မြတ်ဆုနိဗ္ဗာန် အကျင့်မှန်(၁) (၁၂.၈.၂၀၁၁)
၀၃၄။ မြတ်ဆုနိဗ္ဗာန် အကျင့်မှန်(၂) (၁၃.၈.၂၀၁၁)
၀၃၅။ မြတ်ဆုနိဗ္ဗာန် အကျင့်မှန်(၃) (၁၄.၈.၂၀၁၁)
၀၃၆။ သြဝါဒကထာ အနုမောဒနာ (တောင်ကြီး)(၁၄.၈.၂၀၁၁)
၀၃၇။ အတ္တဒီပနှင့် တဒင်္ဂအငြိမ်း (၁၆.၈.၂၀၁၁)
၀၃၈။ ပရိညာသုံးဖြာ ဝိပဿနာ (၁၇.၈.၂၀၁၁)
၀၃၉။ သီလစွမ်းအား အကျိုးဆယ်ပါး (၂၀.၈.၂၀၁၁)
၀၄၀။ နရ ဝိပဿနာ (၂၁.၈.၂၀၁၁)
၀၄၁။ စွဲလန်းစိတ်နှင့် ပူပန်စိတ် (၂၂.၈.၂၀၁၁)
၀၄၃။ မွေးနေ့ အနုမောဒနာ ( ဆုံဆည်းရာ) (၂၆.၈.၂၀၁၁)
၀၄၄။ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ် အနုမောဒနာ (ဦးတင်မောင်)(၂၆.၈.၂၀၁၁)
၀၄၅။ အဂတိလေးပါး မလိုက်စားခြင်း (၂၇.၈.၂၀၁၁)
၀၄၆။ ချုပ်နှောင်ထားသော စိတ်ရှိသူ (၂၈.၈.၂၀၁၁)
၀၄၇။ ခန္ဓာကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း (၁.၉.၂၀၁၁)
၀၄၈။ အာယတနကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း (၂.၉.၂၀၁၁)
၀၄၉။ ဓါတ်(၁၈)ပါးကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း (၃.၉.၂၀၁၁)
၀၅၀။ အရိယသစ္စာကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း(၁)(၄.၉.၂၀၁၁)
၀၅၁။ အရိယသစ္စာကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း(၂)(၅.၉.၂၀၁၁)
၀၅၂။ အရိယသစ္စာကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း(၃)(၆.၉.၂၀၁၁)
၀၅၃။ အဘိဓမ္မကျမ်းများ၏ မေးခွန်းနှင့် ဖြေဆိုချက်များ (၆.၉.၂၀၁၁)
၀၅၄။ အကုသိုလ်တား စိတ်စွမ်းအား (၅.၉.၂၀၁၁)
၀၅၅။ နိဗ္ဗာန်ဝင်ရောက် တံခါးပေါက်များ (၇.၉.၂၀၁၁)
၀၅၈။ တိုးတက်ခြင်းနှင့်ဆုတ်ယုတ်ခြင်း (၁၀.၉.၂၀၁၁)
၀၅၉။ အာကင်္ခေယျသုတ် အနှစ်ချုပ်(၁၂.၉.၂၀၁၁)
၀၆၀။ အမှားကင်းစင် ပစ္စက္ခဉာဏ်အမြင်(၁)(၁၃.၉.၂၀၁၁)
၀၆၁။ အမှားကင်းစင် ပစ္စက္ခဉာဏ်အမြင်(၂)(၁၄.၉.၂၀၁၁)
၀၆၂။ ကမ္မဋ္ဌာန်းကျောင်းနှင့်ယောဂီအင်္ဂါညီလျှင် တရားထူးရနိုင်သည်(၁၆.၉.၂၀၁၁)
၀၆၃။ သဠာယတန ဝိဘင်္ဂသုတ်အနှစ်ချုပ်(၁)(၁၇.၉.၂၀၁၁)
၀၆၄။ သဠာယတနဝိဘင်္ဂသုတ် အနှစ်ချုပ်(၂)(၁၈.၉.၂၀၁၁)
၀၆၅။ သဠာယတနဝိဘင်္ဂသုတ် အနှစ်ချုပ်(၃)(၁၉.၉.၂၀၁၁)
၀၆၆။ ဆင်းရဲမွဲတေမှုလျော့ချရေး (၂၀.၉.၂၀၁၁)
၀၆၇။ ကျေးဇူးသိခြင်း (၁၉.၉.၂၀၁၁)
၀၆၈။ အဓိပညာ ဓမ္မဝိပဿနာ (၂၁.၉.၂၀၁၁)
၀၇၁။ နိယတ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း (၂၅.၉.၂၀၁၁)
၀၇၂။ အရိဋ္ဌရဟန်း၏ မိစ္ဆာဝါဒ (၂၆.၉.၂၀၁၁)
၀၇၃။ သာတိရဟန်း၏ မိစ္ဆာဝါဒ (၂၇.၉.၂၀၁၁)
၀၇၄။ အနုတ္တရိယ(၆)ပါးမြတ်တရား (၁.၁၀.၂၀၁၁)
၀၇၅။ သုညကမ္ဘာ၏ သရုပ်ဆောင်မှုများ(၁)(၂.၁၀.၂၀၁၁)
၀၇၆။ သုညကမ္ဘာ၏ သရုပ်ဆောင်မှုများ(၂)(၃.၁၀.၂၀၁၁)
၀၇၇။ သုညကမ္ဘာ၏ သရုပ်ဆောင်မှုများ(၃)(၄.၁၀.၂၀၁၁)
၀၇၈။ သုညကမ္ဘာ၏ သရုပ်ဆောင်မှုများ(၄)(၅.၁၀.၂၀၁၁)
၀၇၉။ ဘာသာတရားလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် (၆.၁၀.၂၀၁၁)
၀၈၀။ စွမ်းအားကြီးမား လူ့ခွန်အား (၈.၁၀.၂၀၁၁)
၀၈၁။ မတွေဝေသောအသိ (၉.၁၀.၂၀၁၁)
၀၈၂။ ပုဗ္ဗဏှသုတ် အနှစ်ချုပ် (၁၂.၁၀.၂၀၁၁)
၀၈၃။ သုံးသပ်ဆင်ခြင်ခြင်းနှင့် အမှန်မြင်ခြင်း (၂၀.၁၀.၂၀၁၁)
၀၈၄။ ဘာသာတရားကိုရွေးချယ်ခြင်း (စင်္ကာပူ) (၂၂.၁၀.၂၀၁၁)
၀၈၅။ ဘာသာတရားကို လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်း (စင်္ကာပူ) (၂၃.၁၀.၂၀၁၁)
၀၈၆။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ မဇ္ဈိမပဋိပဒါတရား (စင်္ကာပူ) (၂၄.၁၀.၂၀၁၁)
၀၈၇။ မြတ်ဗုဒ္ဓအဆုံးအမ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ (၂၆.၁၀.၂၀၁၁)
၀၈၈။ ဗောဓိသတ္တ၏ ဝိပဿနာတရား (၂၇.၁၀.၂၀၁၁)
၀၈၉။ သစ္စာသိမှ အမှန်မြင်မည် (၂၈.၁၀.၂၀၁၁)
၀၉၀။ နတ်လူတို့၏ဆရာ (၂၉.၁၀.၂၀၁၁)
၀၉၁။ ကုသိုလ်ပင်မျိုး စိုက်ပျိုးကြခြင်း (၃၁.၁၀.၂၀၁၁)
၀၉၂။ လူဆယ်ယောက်တွင် အတော်ဆုံးလူတစ်ယောက် (၁၃.၁၁.၂၀၁၁)
၀၉၃။ ပသာဒနိယတရား မြတ်(၁၀)ပါး (၁၄.၁၁.၂၀၁၁)
၀၉၄။ မေးခွန်းထုတ်၍ အဖြေရှာခြင်း (၁၅.၁၁.၂၀၁၁)
၀၉၅။ အားလုံးရဲ့မေတ္တာကိုခံယူပါ (၁၆.၁၁.၂၀၁၁)
၀၉၆။ စဉ်းစားဉာဏ်နှင့် အကျင့်မှန် (၁၇.၁၁.၂၀၁၁)
၀၉၇။ ကဲ့ရဲ့သောစကားလုံးများဖြင့် ချီးမွမ်းအပ်သော မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ဂုဏ်ရည်များ (၂၀.၁၁.၂၀၁၁)
၀၉၈။ ကာလမသုတ် အနှစ်ချုပ် (၂၆.၁၁.၂၀၁၁)
၀၉၉။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အလုပ်အကျွေးရဟန်းများ(၁)(၂၈.၁၁.၂၀၁၁)
၁၀၀။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အလုပ်အကျွေးရဟန်းများ(၂)(၂၉.၁၁.၂၀၁၁)
၁၀၁။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အလုပ်အကျွေးရဟန်းများ(၃)(၃၀.၁၁.၂၀၁၁)
၁၀၂။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အလုပ်အကျွေးရဟန်းများ(၄)(၁.၁၂.၂၀၁၁)
၁၀၃။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အလုပ်အကျွေးရဟန်းများ(၅)(၂.၁၂.၂၀၁၁)
၁၀၄။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အလုပ်အကျွေးရဟန်းများ(၆)(၃.၁၂.၂၀၁၁)
၁၀၅။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်း(၁)(၄.၁၂.၂၀၁၁)
၁၀၆။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်း(၂)(၅.၁၂.၂၀၁၁)
၁၀၇။ အရဏဝိဘင်္ဂသုတ် အနှစ်ချုပ် (၈.၁၂.၂၀၁၁)
၁၀၈။ ဗြဟ္မဇာလသုတ် အနှစ်ချုပ်(၁)(၉.၁၂.၂၀၁၁)
၁၀၉။ ဗြဟ္မဇာလသုတ် အနှစ်ချုပ်(၂)(၁၀.၁၂.၂၀၁၁)
၁၁၀။ ဗြဟ္မဇာလသုတ် အနှစ်ချုပ်(၃)(၁၁.၁၂.၂၀၁၁)
၁၁၁။ ဗြဟ္မဇာလသုတ် အနှစ်ချုပ်(၄)(၁၂.၁၂.၂၀၁၁)
၁၁၂။ ပရိသတ်ကြားမှ မြတ်ဘုရား (၁၃.၁၂.၂၀၁၁)
၁၁၃။ မွေးနေ့အနုမောဒနာ (ဦးထင်ကျော်)(၁၄.၁၂.၂၀၁၁)
၁၁၄။ ဆွမ်းအလှူ အနုမောဒနာ (ဦးသောင်းစုငြိမ်း)(၁၄.၁၂.၂၀၁၁)
၁၁၅။ အများကောင်းကျိုး ရွက်သယ်ပိုး(၁)(၁၄.၁၂.၂၀၁၁)
၁၁၆။ အများကောင်းကျိုး ရွက်သယ်ပိုး(၂)(၁၅.၁၂.၂၀၁၁)
၁၁၇။ အများကောင်းကျိုး ရွက်သယ်ပိုး(၃)(၁၆.၁၂.၂၀၁၁)
၁၁၈။ ရဟန်းငါးရာအတွက် ဝိပဿနာအလုပ်ပေး (၁၇.၁၂.၂၀၁၁)
၁၁၉။ လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်အတွက်အားလုံးကိုစွန့်လွတ်ရမည် (၁၈.၁၂.၂၀၁၁)
၁၂၀။ အရှင်အာနန္ဒဟောကြားသည့် သေခပဋိပဒါ (၁၉.၁၂.၂၀၁၁)
၁၂၁။ သေမင်းမမြင်ရာသို့ သွားကြစို့ (၂၀.၁၂.၂၀၁၁)
၁၂၂။ အဆိုးဆုံးဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းမှ အကောင်းဆုံးချမ်းသာရမည် (၂၁.၁၂.၁၁)
၁၂၃။ ဗုဒ္ဓသာဝကများ၏ သာသနာပြုတာဝန်ကြီးလေးရပ် (၂၃.၁၂.၂၀၁၁)
၁၂၄။ ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ (၂၄.၁၂.၂၀၁၁)
၁၂၅။ ဓမ္မရေးရာ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ခြင်း (၂၅.၁၂.၂၀၁၁)
၁၂၆။ ပဋိပဒါလေးပါး (၂၆.၁၂.၂၀၁၁)
၁၂၇။ အကြောင်းတရားကိုစူးစမ်းရှာဖွေခြင်း (၂၇.၁၂.၂၀၁၁)
၁၂၈။ အနုမောဒနာ (ဒေါ်သန်းစိန်)(၂၇.၁၂.၂၀၁၁)
၁၂၉။ ပါရမီသမ္ဘာရ မြတ်ပုည
၁၃၀။ ဓမ္မဗျုဟာသင်တန်း တရားအမေးအဖြေများ(၁)(၂၈.၁၂.၂၀၁၁)
၁၃၁။ ဓမ္မဗျုဟာသင်တန်း တရားအမေးအဖြေများ(၂)(၂၉.၁၂.၂၀၁၁)
၁၃၂။ တစ်ရာတန်းလူသား၏ ဆယ်စုနှစ်များ (၂၉.၁၂.၂၀၁၁)
၁၃၃။ ခဏိကသမာဓိ လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း (၃၀.၁၂.၂၀၁၁)
၁၃၄။ အဆုံးကိုကျော်လွန်သည့် အဆုံးမဲ့တရား (၃၁.၁၂.၂၀၁၁)
၁၃၅။ နှစ်ဦးမေတ္တာလူတိုင်းမှာ (၁.၁.၂၀၁၂)
၁၃၆။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမနှင့် ဘဝနေထိုင်နည်း (၁.၁.၂၀၁၂)
၁၃၇။ စိတ္တဘာဝနာဖြင့်သာ စိတ်ဖြူစင်နိုင်သည် (၂.၁.၂၀၁၂)
၁၃၈။ သမာဓိဘာဝနာ စွမ်းဆောင်မှုလေးမျိုး (၃.၁.၂၀၁၂)
၁၃၉။ အနုမောဒနာ (ရတနာမာန်အောင်တောရဓမ္မရိပ်သာ)(၄.၁.၂၀၁၂)
၁၄၀။ ဣန္ဒြေစောင်းကြိုးညှိနိုင်မှ တရားသိမည် (၄.၁.၂၀၁၂)
၁၄၁။ အနုမောဒနာ ( ရန်ကုန်တိုင်းဆက်သွယ်ရေး ) (၅.၁.၂၀၁၂)
၁၄၂။ ဝက္ကလိရဟန်းအတွက် စိတ်ဓါတ်ခွန်အားနှင့် ဓမ္မစွမ်းပကား (၅.၁.၂၀၁၂)
၁၄၃။ သြဝါဒ ( အလက-၁ ဒဂုံ) (၆.၁.၂၀၁၂)
၁၄၄။ မျှော်လင့်ခြင်း၏ အင်အားများ (၆.၁.၂၀၁၂)
၁၄၅။ ဝီဏောပမသုတ် အနှစ်ချုပ် (၇.၁.၂၀၁၂)
၁၄၆။ အနုမောဒနာ (မဏိရတနာသီလရှင်စာသင်တိုက်)(၈.၁.၂၀၁၂)
၁၄၇။ သိမ်ရေစက်ချအနုမောဒနာ (သံလျင်)(၈.၁.၂၀၁၂)
၁၄၈။ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုကို မြတ်နိုးသူ (၈.၁.၂၀၁၂)
၁၄၉။ တရားကိုမြတ်နိုးသူ (၉.၁.၂၀၁၂)
၁၅၀။ သြဝါဒ (မြိတ်)(၉.၁.၂၀၁၂)
၁၅၁။ သိရီဂေဟာဖြစ်အောင် ကျင့်ဆောင်ပါ (၁၀.၁.၂၀၁၂)
၁၅၂။ သြဝါဒ (ဦးအင်ပို)(၁၁.၁.၂၀၁၂)
၁၅၃။ အဘိရူပနန္ဒာ၏ဘဝနှင့် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမ (၁၁.၁.၂၀၁၂)
၁၅၅။ ဘိက္ခူနီငါးရာနှင့် အရှင်နန္ဒက၏ ဝိပဿနာအလုပ်ပေး (၁၂.၁.၂၀၁၂)
၁၅၆။ ဒီဃနကသုတ် အနှစ်ချုပ် (၁၄.၁.၂၀၁၂)
၁၅၇။ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ခြင်းကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း (၁၅.၁.၂၀၁၂)
၁၅၈။ ဖယ်ရှားခြင်း သုံးမျိုး (၁၆.၁.၂၀၁၂)
၁၅၉။ သြဝါဒ (အမေထွား)(၁၇.၁.၂၀၁၂)
၁၆၀။ သီလသည်နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင် အကျိုးပေးသည် (၁၇.၁.၂၀၁၂)
၁၆၁။ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း (၁၉.၁.၂၀၁၂)
၁၆၂။ သံဝေဂသြဝါဒ (ဒေါက်တာဦးကိုကိုကြီး)(၁၉.၁.၂၀၁၂)
၁၆၃။ စိတ်ထိန်းနိုင်မှ ချမ်းသာရ (၂၀.၁.၂၀၁၂)
၁၆၄။ အငြင်းပွားသူတို့၏ အတွင်းရေးများ (၂၀.၁.၂၀၁၂)
၁၆၅။ စိတ်ကိုစောင့်ကြည့် မြဲသတိထား (၂၁.၁.၂၀၁၂)
၁၆၆။ အကောင်းဆုံး ဘာသာတရား (၂၂.၁.၂၀၁၂)
၁၆၇။ လက်တွေ့ကျသော အဆုံးအမ (၂၃.၁.၂၀၁၂)
၁၇၃။ ဓမ္မကိုအဖော်ပြုမှ ထာဝရချမ်းသာမည် (၂၉.၁.၂၀၁၂)
၁၇၄။ အနုမောဒနာ (၃.၂.၂၀၁၂)
၁၇၅။ အဆိုးသံသရာကိုလွတ်မြောက်ခြင်း (၅.၂.၂၀၁၂)
၁၇၆။ ဆွမ်းအလှူ အနုမောဒနာ (ကိုရဲထွန်းမင်း)(၁၀.၂.၂၀၁၂)
၁၇၇။ အနုမောဒနာ (စစ်ကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်)(၁၁.၂.၂၀၁၂)
၁၇၈။ အနုမောဒနာ (၁၂.၂.၂၀၁၂)
၁၇၉။ အနုမောဒနာ (ဒေါ်လှမြင့်)(၁၄.၂.၂၀၁၂)
၁၈၀။ ပါရမီပုံရိပ် အမှတ်တံဆိပ်များ(၁)(၉.၂.၂၀၁၂)
၁၈၁။ ပါရမီပုံရိပ် အမှတ်တံဆိပ်များ(၂)(၁၀.၂.၂၀၁၂)
၁၈၂။ ပါရမီပုံရိပ် အမှတ်တံဆိပ်များ(၃)(၁၁.၂.၂၀၁၂)
၁၈၃။ ပါရမီပုံရိပ် အမှတ်တံဆိပ်များ(၄)(၁၃.၂.၂၀၁၂)
၁၈၄။ ပါရမီပုံရိပ် အမှတ်တံဆိပ်များ(၅)(၁၄.၂.၂၀၁၂)
၁၈၅။ သူ့အမြင် ကိုယ့်အမြင်နှင့် ဓမ္မအမြင် (၁၅.၂.၂၀၁၂)
၁၈၆။ အနုမောဒနာ (၁၇.၂.၂၀၁၂)
၁၈၇။ စိတ်၌ဖြစ်ပွားအဆိုးတရားတို့၏ လှည့်စားမှုများ(၁)(၃၁.၁.၂၀၁၂)
၁၈၈။ စိတ်၌ဖြစ်ပွားအဆိုးတရားတို့၏ လှည့်စားမှုများ(၂)(၂.၂.၂၀၁၂)
၁၈၉။ စိတ်၌ဖြစ်ပွားအဆိုးတရားတို့၏ လှည့်စားမှုများ(၃)(၁၆.၂.၂၀၁၂)
၁၉၀။ စိတ်၌ဖြစ်ပွားအဆိုးတရားတို့၏ လှည့်စားမှုများ(၄)(၁၇.၂.၂၀၁၂)
၁၉၁။ စိတ်၌ဖြစ်ပွားအဆိုးတရားတို့၏ လှည့်စားမှုများ(၅)(၁၈.၂.၂၀၁၂)
၁၉၂။ စိတ်၌ဖြစ်ပွားအဆိုးတရားတို့၏ လှည့်စားမှုများ(၆)(၁၉.၂.၂၀၁၂)
၁၉၃။ တပည့်များလေးစားမြတ်နိုးတဲ့ဆရာ (၂၀.၂.၂၀၁၂)
၁၉၄။ အနုမောဒနာ (၂၀.၂.၂၀၁၂)
၁၉၅။ အနုမောဒနာ (မက်စ်မြန်မာ)(၂၀.၂.၂၀၁၂)
၁၉၆။ စိတ်ပူပန်မှုကင်းအောင် ကျင့်ဆောင်ခြင်း (၂၁.၂.၂၀၁၂)
၁၉၇။ မင်္ဂလာသြဝါဒ (၂၁.၂.၂၀၁၂)
၁၉၈။ ချမ်းသာနှစ်ပါး (၂၁.၂.၂၀၁၂)
၁၉၉။ စံထားရမည့် ယဉ်ကျေးမူ (၂၇.၂.၂၀၁၂)
၂၀၀။ မွေးနေ့အမှတ်တရ ဂုဏပူဇာ (၆.၃.၂၀၁၂)
၂၀၁။ လေ့ကျင့်ပွားများ သညာများ (၆.၃.၂၀၁၂)
၂၀၂။ လူတော်လူကောင်း (၈.၃.၂၀၁၂)
၂၀၃။ နေ့တိုင်းဆင်ခြင် စိတ်ကိုပြင် (၉.၃.၂၀၁၂)
၂၀၄။ ဆရာရှိမှ အမှန်သိနိုင်မည် (၁၀.၃.၂၀၁၂)
၂၀၅။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမနှင့်အညီ နေထိုင်ခြင်း (၁၁.၃.၂၀၁၂)
၂၀၆။ ကိုးပါးသီလဖြင့် ဥပုသ်စောင့်သုံးခြင်း (၁၂.၃.၂၀၁၂)
၂၀၇။ အောင်မြင်ကြီးပွား လ့ူစွမ်းအား (၁)(၁၃.၃.၂၀၁၂)
၂၀၈။ အောင်မြင်ကြီးပွား လ့ူစွမ်းအား (၂)(၁၄.၃.၂၀၁၂)
၂၀၉။ အောင်မြင်ကြီးပွား လ့ူစွမ်းအား (၃)(၁၅.၃.၂၀၁၂)
၂၁၀။ အောင်မြင်ကြီးပွား လ့ူစွမ်းအား (၄)(၁၆.၃.၂၀၁၂)
၂၁၁။ အောင်မြင်ကြီးပွား လ့ူစွမ်းအား (၅)(၁၇.၃.၂၀၁၂)
၂၁၂။ တရားအသိမကွာ စီးပွားရှာ (၁၉.၃.၂၀၁၂)
၂၁၃။ တရားသိလျှင် စိတ်ပျော်ရွှင် (၂၀.၃.၂၀၁၂)
၂၁၄။ ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမကို လက်ဆင့်ကမ်းခြင်း (၂၃.၃.၂၀၁၂)
၂၁၅။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမနှင့် ညီညွတ်သည်ဇနီးမောင်နှံဘဝ (၂၇.၃.၂၀၁၂)
၂၁၆။ သြဝါဒ (ဓမ္မသဟာယစင်တာ)(၇.၄.၂၀၁၂)
၂၁၇။ သြဝါဒ (ဓမ္မသဟာယစင်တာ)(၈.၄.၂၀၁၂)
၂၁၈။ စင်ကြယ်မှု (၇) ပါး (၁) (၁၂.၄.၂၀၁၂)
၂၁၉။ စင်ကြယ်မှု (၇) ပါး (၂) (၁၃.၄.၂၀၁၂)
၂၂၀။ စင်ကြယ်မှု (၇) ပါး (၃) (၁၄.၄.၂၀၁၂)
၂၂၁။ စင်ကြယ်မှု (၇) ပါး (၄) (၁၅.၄.၂၀၁၂)
၂၂၂။ စင်ကြယ်မှု (၇) ပါး (၅) (၁၆.၄.၂၀၁၂)
၂၂၃။ စင်ကြယ်မှု (၇) ပါး (၆) (၁၇.၄.၂၀၁၂)
၂၂၄။ ဗျာဒိတ်တော်ကြား ဘုရား(၂၄)ဆူ (၄.၅.၂၀၁၂)
၂၂၅။ အံဖွယ်လူသား မြတ်ဘုရား (၅.၅.၂၀၁၂)
၂၂၆။ သီလစောင့်မှ အူမတောင့်မည် (၁၀.၅.၂၀၁၂)
၂၂၉။ သြဝါဒ (မူဆယ်) (၁၆.၅.၂၀၁၂)
၂၃၀။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ မှာကြားချက်များ(၁)(၁၆.၅.၂၀၁၂)
၂၃၁။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ မျာကြားချက်များ(၂)(၁၇.၅.၂၀၁၂)
၂၃၄။ အနုမောဒနာ (ဒေါ်နန်းခင်သိန်း) (၂၁.၅.၂၀၁၂)
၂၃၅။ ကျောင်းဖွင့်ပွဲ သြဝါဒ (၁.၆.၂၀၁၂)
၂၃၆။ မဟာဝေဒလ္လသုတ် အနှစ်ချုပ်(၁)(၂၆.၅.၂၀၁၂)
၂၃၇။ မဟာဝေဒလ္လသုတ် အနှစ်ချုပ်(၂)(၂၇.၅.၂၀၁၂)
၂၃၈။ မဟာဝေဒလ္လသုတ် အနှစ်ချုပ်(၃)(၂.၆.၂၀၁၂)
၂၃၉။ မဟာဝေဒလ္လသုတ် အနှစ်ချုပ်(၄)(၅.၆.၂၀၁၂)
၂၄၀။ မဟာဝေဒလ္လသုတ် အနှစ်ချုပ်(၅)(၂၉.၆.၂၀၁၂)
၂၄၁။ ဒုဂ္ဂတိဘုံသားတို့၏ အမှာစကား(၁)(၉.၆.၂၀၁၂)
၂၄၂။ ဒုဂ္ဂတိဘုံသားတို့၏ အမှာစကား(၂)(၁၀.၆.၂၀၁၂)
၂၄၃။ ဒုဂ္ဂတိဘုံသားတို့၏ အမှာစကား(၃)(၁၁.၆.၂၀၁၂)
၂၄၄။ ဒုဂ္ဂတိဘုံသားတို့၏ အမှာစကား(၄)(၁၂.၆.၂၀၁၂)
၂၄၅။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အနုတ္တရိယဂုဏ် (၁၆) ပါး(၁)(၁၄.၆.၂၀၁၂)
၂၄၆။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အနုတ္တရိယဂုဏ် (၁၆) ပါး(၂)(၁၅.၆.၂၀၁၂)
၂၄၇။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အနုတ္တရိယဂုဏ် (၁၆) ပါး(၃)(၁၆.၆.၂၀၁၂)
၂၄၈။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အနုတ္တရိယဂုဏ် (၁၆) ပါး(၄)(၁၇.၆.၂၀၁၂)
၂၄၉။ အနုမောဒနာ (သမဝါယမဝန်ကြီးဌာန)(၁၇.၆.၂၀၁၂)
၂၅၁။ အနုမောဒနာ (ဦးလှိုင်ဝင်း)(၁၉.၆.၂၀၁၂)
၂၅၂။ အာဋာနာဋိယသုတ် အနှစ်ချုပ်(၁)(၁၉.၆.၂၀၁၂)
၂၅၃။ အာဋာနာဋိယသုတ် အနှစ်ချုပ်(၂)(၂၀.၆.၂၀၁၂)
၂၅၄။ အာဋာနာဋိယသုတ် အနှစ်ချုပ်(၃)(၂၁.၆.၂၀၁၂)
၂၅၅။ အာဋာနာဋိယသုတ် အနှစ်ချုပ်(၄)(၂၂.၆.၂၀၁၂)
၂၅၇။ စာနာစိတ် (၃၀.၆.၂၀၁၂)
၂၅၈။ သီဟနာဒသုတ် အနှစ်ချုပ်(၁)(၂.၇.၂၀၁၂)
၂၅၉။ သီဟနာဒသုတ် အနှစ်ချုပ်(၂)(၃.၇.၂၀၁၂)
၂၆၀။ သီဟနာဒသုတ် အနှစ်ချုပ်(၃)(၄.၇.၂၀၁၂)
၂၆၁။ အနုမောဒနာ (သွား ဆေးတက္ကသိုလ်)(၄.၇.၂၀၁၂)
၂၆၂။ သြဝါဒ (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဘိဓမ္မတက္ကသိုလ်)(၅.၇.၂၀၁၂)
၂၆၃။ သံသရာခရီးသွား ပျက်စီးမူတွေသတိထား (၅.၇.၂၀၁၂)
၂၆၅။ ရဟန်းခံသြဝါဒ (၇.၇.၂၀၁၂)
၂၆၆။ သြဝါဒ (၈.၇.၂၀၁၂)
၂၆၇။ ဘုရားကြည်ညိုက အပါယ်မကျ (၉.၇.၂၀၁၂)
၂၆၈။ အနုမောဒနာ (ဒေါက်တာအဖွဲ့)(၁၀.၇.၂၀၁၂)
၂၆၉။ အတွေးမှားကိုဖယ်ရှားနိုင်ရမည် (၁၄.၇.၂၀၁၂)
၂၇၀။ ရဟန်းခံ ရှင်ပြု သြဝါဒ (၁၅.၇.၂၀၁၂)
၂၇၁။ ကြီးသူငယ်သူ သတ်မှတ်ချက် (၂၁.၇.၂၀၁၂)
၂၇၂။ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ် သြဝါဒ (ဦးအာလိယ)(၂၁.၇.၂၀၁၂)
၂၇၃။ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ် သြဝါဒ (၂၁.၇.၂၀၁၂)
၂၇၄။ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ် သြဝါဒ (၂၂.၇.၂၀၁၂)
၂၇၅။ ကိုယ်ချင်းစာတရား (၂၃.၇.၂၀၁၂)
၂၇၆။ မြတ်ဗုဒ္ဓနှင့် ဗုဒ္ဓသာသနာ (၂၃.၇.၂၀၁၂)
၂၇၇။ ဗုဒ္ဓတိုက်ကြွေး တရားဆေး (၂၄.၇.၂၀၁၂)
၂၇၈။ တရားဆိုသည်မှာ ပညာဖြင့်သာသိနိုင်သည် (၂၅.၇.၂၀၁၂)
၂၇၉။ သံယောဇဉ်ကို ရှာဖွေခြင်း (၂၆.၇.၂၀၁၂)
၂၈၀။ သမ္မာဒိဋ္ဌိနှင့် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ (၂၈.၇.၂၀၁၂)
၂၈၁။ ဆွမ်းအနုမောဒနာ ( ဦးတေဇစောဦး)(၂၈.၇.၂၀၁၂)
၂၈၂။ အနုမောဒနာ (လှိုင်)(၂၉.၇.၂၀၁၂)
၂၈၃။ စင်ကြယ်အောင် အားထုပ်ခြင်း (၂၉.၇.၂၀၁၂)
၂၈၄။ လမ်းနှစ်သွယ်ဖြင့် သံမတ္တနိယာမသို့ဝင်ရောက်ခြင်း (၂၉.၇.၂၀၁၂)
၂၈၅။ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ် အနုမောဒနာ(ဦးချစ်မွှေး)(၃၀.၇.၂၀၁၂)
၂၈၆။ ဒွယဝိပဿနာ (၃၀.၇.၂၀၁၂)
၂၈၇။ အနုမောဒနာ (မင်းဓမ္မအိမ်ရာ)(၃၁.၇.၂၀၁၂)
၂၈၈။ အနုမောဒနာ (ဖြိုးမိသားစု)(၃၁.၇.၂၀၁၂)
၂၈၉။ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ် အနုမောဒနာ (တပည့်အများ)(၃၁.၇.၂၀၁၂)
****dhamma talks uploaded and published on 10 Jan 2013****
ဟောကြားတော်မူအပ်သောတရားတော်များ (အတွဲ – ၄ )
DVD MP3 တရားတော်များ ( စတုတ္ထတွဲ )
တရားတော် ( ၂၇၉ ) ပုဒ်
၀၀၁။ အဘိဓမ္မာဆိုင်ရာသင်တန်း (၁၄.၆.၂၀၀၉)
၀၀၂။ ဝိဘင်ကျမ်း သင်တန်း – ၁ (၂၅.၇.၂၀၀၉)
၀၀၃။ ဝိဘင်ကျမ်း သင်တန်း – ၂ (၆.၉.၂၀၀၉)
၀၀၄။ ဝိဘင်ကျမ်း သင်တန်း – ၃ (၁၂.၁၂.၂၀၀၉)
၀၀၅။ ဝိဘင်ကျမ်း သင်တန်း – ၄ (၁၈.၁၂.၂၀၁၀)
၀၀၆။ ဝိဘင်ကျမ်း သင်တန်း – ၅ (၂၅.၁၂.၂၀၁၀)
၀၀၇။ ဝိဘင်ကျမ်း သင်တန်း – ၆ (၂၂.၁.၂၀၁၁)
၀၀၈။ ဝိဘင်ကျမ်း သင်တန်း – ၇ (၂၉.၁.၂၀၁၁)
၀၀၉။ ဝိဘင်ကျမ်း သင်တန်း – ၈ (၈.၃.၂၀၁၁)
၀၁၀။ အနုမောဒနာ (အမေထွား) (၁၇.၁.၂၀၁၁)
၀၁၁။ အနုမောဒနာ (ဓမ္မစေတီကျောင်း) (၁၂.၂.၂၀၁၁)
၀၁၂။ အနုမောဒနာ ရေစက်ချတရား (၂၆.၂.၂၀၁၁)
၀၁၃။ အနုမောဒနာ (ပြင်ဦးလွင်) (၇.၄.၂၀၁၁)
၀၁၄။ အနုမောဒနာ (ပြင်ဦးလွင်) (၈.၄.၂၀၁၁)
၀၁၅။ အနုမောဒနာ (SSC) (၂၃.၂.၂၀၁၂)
၀၁၆။ ကုသိုလ်မင်္ဂလာ သြဝါဒ (ဦးရေဝတ) (၂၃.၂.၂၀၁၂)
၀၁၇။ အနုမောဒနာ (ဦးသာအေး) (၂၁.၄.၂၀၁၂)
၀၁၈။ ဘာသာတရားဆိုတိုင်း လိုက်နာသင့်သလား (၂၀.၇.၂၀၁၂)
၀၁၉။ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ် သြဝါဒ (ဦးချစ်မွှေး) (၃၀.၇.၂၀၁၂)
၀၂၀။ အနုမောဒနာ (တပည့်များဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်) (၃၁.၇.၂၀၁၂)
၀၂၁။ အနုမောဒနာ (ဦးကြည်သာဦး) (၂.၈.၂၀၁၂)
၀၂၂။ အနုမောဒနာ (၇.၈.၂၀၁၂)
၀၂၃။ အပြစ်ကို ကုစားခြင်း (၈.၈.၂၀၁၂)
၀၂၄။ တရားရှာ ကိုယ်မှာတွေ့ (၉.၈.၂၀၁၂)
၀၂၅။ အနုမောဒနာ (အနန္တဂုဏပူဇာ) (၁၁.၈.၂၀၁၂)
၀၂၆။ အနုမောဒနာ (ဒေါ်တင်တင်ဦး) (၁၂.၈.၂၀၁၂)
၀၂၇။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့၏ ဘဝနှင့်ဓမ္မအမြင် – ၁ (၁၄.၈.၂၀၁၂)
၀၂၈။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့၏ ဘဝနှင့်ဓမ္မအမြင် – ၂ (၁၅.၈.၂၀၁၂)
၀၂၉။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့၏ ဘဝနှင့်ဓမ္မအမြင် – ၃ (၁၆.၈.၂၀၁၂)
၀၃၀။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့၏ ဘဝနှင့်ဓမ္မအမြင် – ၄ (၁၇.၈.၂၀၁၂)
၀၃၁။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့၏ ဘဝနှင့်ဓမ္မအမြင် – ၅ (၇.၉.၂၀၁၂)
၀၃၂။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့၏ ဘဝနှင့်ဓမ္မအမြင် – ၆ (၈.၉.၂၀၁၂)
၀၃၃။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့၏ ဘဝနှင့်ဓမ္မအမြင် – ၇ (၉.၉.၂၀၁၂)
၀၃၄။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့၏ ဘဝနှင့်ဓမ္မအမြင် – ၈ (၁၀.၉.၂၀၁၂)
၀၃၅။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့၏ ဘဝနှင့်ဓမ္မအမြင် – ၉ (၁၀.၁၀.၂၀၁၂)
၀၃၆။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့၏ ဘဝနှင့်ဓမ္မအမြင် – ၁၀ (၁၁.၁၀.၂၀၁၂)
၀၃၇။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့၏ ဘဝနှင့်ဓမ္မအမြင် – ၁၁ (၁၂.၁၀.၂၀၁၂)
၀၃၈။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့၏ ဘဝနှင့်ဓမ္မအမြင် – ၁၂ (၁၃.၁၀.၂၀၁၂)
၀၃၉။ ဝါဆိုသင်င်္ကန်းကပ် အနုမောဒနာ (ဓမ္မဗျူဟာ) (၁၅.၈.၂၀၁၂)
၀၄၀။ အနုမောဒနာ (ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဓာတုဗေဒ) (၁၆.၈.၂၀၁၂)
၀၄၁။ အနုမောဒနာ (ဒေါ်ကြည်ကြည်စမ်း) (၁၇.၈.၂၀၁၂)
၀၄၂။ အနုမောဒနာ (ဟိုတယ်ရန်ကုန်) (၁၇.၈.၂၀၁၂)
၀၄၃။ အနုမောဒနာ (လှိုင်သာယာ) (၁၈.၈.၂၀၁၂)
၀၄၄။ အနုမောဒနာ (ပန်းလှိုင်ဆေးရုံ) (၁၈.၈.၂၀၁၂)
၀၄၅။ အနုမောဒနာ (မက်စ်မြန်မာ) (၁၉.၈.၂၀၁၂)
၀၄၆။ ဝိဇ္ဇိနိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်း (၁၉.၈.၂၀၁၂)
၀၄၇။ အနုမောဒနာ (၂၁.၈.၂၀၁၂)
၀၄၈။ စိတ်၏ကျက်စားရာ အာရုံများ (၂၄.၈.၂၀၁၂)
၀၄၉။ နိဗ္ဗာန သပ္ပါယ ပဋိပဒါ (၂၅.၈.၂၀၁၂)
၀၅၀။ သုံးခြင်းနှင့်ဆုံးခြင်း (၂၆.၈.၂၀၁၂)
၀၅၁။ အနုမောဒနာ (ဆန်းပွဲရုံ) (၂၇.၈.၂၀၁၂)
၀၅၂။ မာဂဏ္ဍီမိသားစု၏ ဘဝနှင့်သင်ခန်းစာ-၁ (၂၇.၈.၂၀၁၂)
၀၅၃။ မာဂဏ္ဍီမိသားစု၏ ဘဝနှင့်သင်ခန်းစာ- ၂ (၂၈.၈.၂၀၁၂)
၀၅၄။ မာဂဏ္ဍီမိသားစု၏ ဘဝနှင့်သင်ခန်းစာ- ၃ (၂၉.၈.၂၀၁၂)
၀၅၅။ ဘုံဘဝမှာဆုံမိကြခြင်း (၃၀.၈.၂၀၁၂)
၀၅၆။ သတိကောင်းအောင် ကျင့်ဆောင်ခြင်း (၃၀.၈.၂၀၁၂)
၀၅၇။ သတ္တဝါတို့၏ဘဝနှင့် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ရှုမြင်သုံးသပ်ချက် (၃၁.၈.၂၀၁၂)
၀၅၈။ အဂ္ဂတိလေးပါး မလိုက်စားနဲ့ (၂.၉.၂၀၁၂)
၀၅၉။ တိုင်ပင်ဆွေးနွေး ကြီးပွားရေး (၃.၉.၂၀၁၂)
၀၆၀။ ဒါနကောင်းမှု တောင်းဆုရှစ်ဖြာ (၅.၉.၂၀၁၂)
၀၆၁။ အနုမောဒနာ (ဆန်းကုမ္ပဏီ) (၈.၉.၂၀၁၂)
၀၆၂။ အနုမောဒနာ (ဦးသန့်ဇင်) (၉.၉.၂၀၁၂)
၀၆၃။ အနုမောဒနာ (မက်စ်မြန်မာ) (၉.၉.၂၀၁၂)
၀၆၄။ ကျေနပ်စရာအတွေး ရောဂါပျောက်ဆေး (၉.၉.၂၀၁၂)
၀၆၅။ အနုမောဒနာ (ဦးရဲမြင့်) (၁၀.၉.၂၀၁၂)
၀၆၆။ ဗုဒ္ဓသည်ဓမ္မကိုအလေးပြုသည်။ (၁၁.၉.၂၀၁၂)
၀၆၇။ လူမွဲဘဝမှ လာခဲ့သူ (၁၃.၉.၂၀၁၂)
၀၆၈။ အနုမောဒနာ (ဝင်းပပရွှေလုပ်ငန်း) (၁၅.၉.၂၀၁၂)
၀၆၉။ သလ္လေခသုတ် အနှစ်ချုပ် – ၁ (၁၆.၉.၂၀၁၂)
၀၇၀။ သလ္လေခသုတ် အနှစ်ချုပ် -၂ (၁၇.၉.၂၀၁၂)
၀၇၁။ သလ္လေခသုတ် အနှစ်ချုပ် – ၃ (၁၈.၉.၂၀၁၂)
၀၇၂။ သလ္လေခသုတ် အနှစ်ချုပ် – ၄ (၁၉.၉.၂၀၁၂)
၀၇၃။ သလ္လေခသုတ် အနှစ်ချုပ် – ၅ (၂၀.၉.၂၀၁၂)
၀၇၄။ အနုမောဒနာ (ဒေါ်ကုမ္မာရီ) (၂၁.၉.၂၀၁၂)
၀၇၅။ အစွမ်းထက်သောကာကွယ်မှု (၂၁.၉.၂၀၁၂)
၀၇၆။ သံဃာရတနာနှင့်သာသနာ (၂၂.၉.၂၀၁၂)
၀၇၇။ မဓုပိဏ္ဍိကသုတ် အနှစ်ချုပ် (၂၅.၉.၂၀၁၂)
၀၇၈။ တဏှာသည်ဘဝသစ်ကိုဖြစ်စေနိုင်သည် (၂၆.၉.၂၀၁၂)
၀၇၉။ အနုမောဒနာ (ဦးအောင်ဝင်း) (၃၀.၉.၂၀၁၂)
၀၈၀။ ဘာသာတရားထူးချွန်သူ အမျိုးသမီး(၁၀)ဦး – ၁ (၂၇.၉.၂၀၁၂)
၀၈၁။ ဘာသာတရားထူးချွန်သူ အမျိုးသမီး(၁၀)ဦး – ၂ (၂၈.၉.၂၀၁၂)
၀၈၂။ ဘာသာတရားထူးချွန်သူ အမျိုးသမီး(၁၀)ဦး – ၃ (၂၉.၉.၂၀၁၂)
၀၈၃။ ဘာသာတရားထူးချွန်သူ အမျိုးသမီး(၁၀)ဦး – ၄ (၃၀.၉.၂၀၁၂)
၀၈၄။ ဘာသာတရားထူးချွန်သူ အမျိုးသမီး(၁၀)ဦး – ၅ (၁.၁၀.၂၀၁၂)
၀၈၅။ ဘာသာတရားထူးချွန်သူ အမျိုးသမီး(၁၀)ဦး – ၆ (၂.၁၀.၂၀၁၂)
၀၈၆။ တရားသူကြီး (၃.၁၀.၂၀၁၂)
၀၈၇။ ဗိမ္မိသာရမင်း၏ ဘဝနှင့်သင်ခန်းစာ (၄.၁၀.၂၀၁၂)
၀၈၈။ မမေ့ေဉာဥတိ မလျှော့ေဉာဇွဲလုံလ (၅.၁၀.၂၀၁၂)
၀၈၉။ ပညာရှိမှ အမှန်သိမည် (၆.၁၀.၂၀၁၂)
၀၉၀။ ခိုင်မာစိတ်ထား (၇.၁၀.၂၀၁၂)
၀၉၁။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ထိပ်တန်းတပည့်ရှစ်ဦး (၉.၁၀.၂၀၁၂)
၀၉၂။ အနုမောဒနာ (ဦးမြင့်ဦး) (၁၀.၁၀.၂၀၁၂)
၀၉၃။ အနုမောဒနာ(ဖိုးစိန်လမ်းဟော်တယ်) (၁၃.၁၀.၂၀၁၂)
၀၉၄။ အဘိဓမ္မာသင်ယူခြင်းသည် သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိုရင့်သန်စေနိုင်သည် (၁၄.၁၀.၂၀၁၂)
၀၉၅။ အာမဂန္ဓသုတ် အနှစ်ချုပ် – ၁ (၁၅.၁၀.၂၀၁၂)
၀၉၆။ အာမဂန္ဓသုတ် အနှစ်ချုပ် – ၂ (၁၆.၁၀.၂၀၁၂)
၀၉၇။ အာမဂန္ဓသုတ် အနှစ်ချုပ် – ၃ (၁၇.၁၀.၂၀၁၂)
၀၉၈။ မကြောက်တရား (၁၈.၁၀.၂၀၁၂)
၀၉၉။ ဒါနတရားနှင့် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏သဘောထား (၁၉.၁၀.၂၀၁၂)
၁၀၀။ စကြာဝတေးမင်းဘဝကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း (၂၀.၁၀.၂၀၁၂)
၁၀၁။ ဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပေးခြင်း (၂၁.၁၀.၂၀၁၂)
၁၀၂။ ယမကရဟန်း၏အမြင်မှားနှင့် ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏သွန်သင်မှု (၂၃.၁၀.၂၀၁၂)
၁၀၃။ မြက်ဗုဒ္ဓ၏လောကဝိဇယလမ်းစဉ်-၁ (၂၆.၁၀.၂၀၁၂)
၁၀၄။ မြက်ဗုဒ္ဓ၏လောကဝိဇယလမ်းစဉ်-၂ (၂၇.၁၀.၂၀၁၂)
၁၀၅။ မြက်ဗုဒ္ဓ၏လောကဝိဇယလမ်းစဉ်-၃ (၂၈.၁၀.၂၀၁၂)
၁၁၅။ လူတိုင်းရှုပွား ဝိပဿနာတရား (၁.၁၁.၂၀၁၂)
၁၁၆။ မိတ်ကောင်းရှိမှတရားသိနိုင်သည်။ (၂.၁၁.၂၀၁၂)
၁၁၇။ အနုမောဒနာ (ရတနာပုံသာသနာရိပ်သာ) (၄.၁၁.၂၀၁၂)
၁၁၈။ အနုမောဒနာ (လမ်းရေစက်ချ) (၇.၁၁.၂၀၁၂)
၁၁၉။ ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာ (၁၂.၁၁.၂၀၁၂)
၁၂၀။ ပေါ်လာသည့် အာရုံများနှင့်ရှုပွားရမည့် ဝိပဿနာတရား (၁၄.၁၁.၂၀၁၂)
၁၂၁။ ရှင်နာဋ္ဌက၏မောနေယျပဋိပဒါ – ၁ (၂၅.၁၁.၂၀၁၂)
၁၂၂။ ရှင်နာဋ္ဌက၏မောနေယျပဋိပဒါ – ၂ (၂၆.၁၁.၂၀၁၂)
၁၂၃။ ရှင်နာဋ္ဌက၏မောနေယျပဋိပဒါ – ၃ (၂၇.၁၁.၂၀၁၂)
၁၂၄။ ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်သန်ရေး (၁၉.၁၁.၂၀၁၂)
၁၂၅။ အနုမောဒနာ (ကောင်းမြတ်စံပညာရေးမိသားစု) (၂၁.၁၁.၂၀၁၂)
၁၂၆။ ဖခင်ကို ကယ်တင်သည့်သမီး (၂၁.၁၁.၂၀၁၂)
၁၂၇။ တို့ပြည် တို့ရွာ တို့သာသနာ – ၁ (၂၂.၁၁.၂၀၁၂)
၁၂၈။ တို့ပြည် တို့ရွာ တို့သာသနာ – ၂ (၂၃.၁၁.၂၀၁၂)
၁၂၉။ ကျေးဇူးတရားအလေးထားခြင်း (၂၄.၁၁.၂၀၁၂)
၁၃၁။ အနုမောဒနာ (သဟပုညကာရီ) (၂၅.၁၁.၂၀၁၂)
၁၃၃။ အနုမောဒနာ (ဈေးချိုဝါးတန်းရပ်) (၂၇.၁၁.၂၀၁၂)
၁၃၄။ အနုမောဒနာ (သံလျင်) (၂၈.၁၁.၂၀၁၂)
၁၃၅။ စွမ်းအားပြည့်လျှံ အားနှစ်တန် (၂၈.၁၁.၂၀၁၂)
၁၃၆။ သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်များ နေ့စဉ်ဘဝမှာနေထိုင်ကြပုံ (၂၉.၁၁.၂၀၁၂)
၁၃၇။ ဒေါသစရိုက်နှင့်ရန်သူအကြိုက် (၃၀.၁၁.၂၀၁၂)
၁၃၈။ ကာမဂုဏ်ကင်းတဲ့ပီတိ (၃.၁၂.၂၀၁၂)
၁၃၉။ ခန္ဓာဝန်ကိုစင်ကြယ်စွာ ထမ်းဆောင်ခြင်း (၄.၁၂.၂၀၁၂)
၁၄၀။ လူစိတ်ကင်းမဲ့သည့်လူ (၅.၁၂.၂၀၁၂)
၁၄၁။ စိတ်နွမ်းသူနှင့်စိတ်လွမ်းသူ (၆.၁၂.၂၀၁၂)
၁၄၂။ ဒါနကိုအခြေခံတဲ့သမထဝိပဿနာ (၆.၁၂.၂၀၁၂)
၁၄၃။ အနုတ္တရိယဒါန(၉)ပါး (၇.၁၂.၂၀၁၂)
၁၄၄။ အနုမောဒနာ (၉.၁၂.၂၀၁၂)
၁၄၅။ သြဝါဒ (၁၀.၁၂.၂၀၁၂)
၁၄၆။ အနုမောဒနာ (၁၃.၁၂.၂၀၁၂)
၁၄၇။ ဓမ္မအစစ်ဖြင့်ဘဝအနှစ်ကိုရယူခြင်း (၁၃.၁၂.၂၀၁၂)
၁၄၈။ သြဝါဒ (၁၄.၁၂.၂၀၁၂)
၁၄၉။ အနုမောဒနာ (ကိုရန်နိုင်အောင်) (၂၁.၁၂.၂၀၁၂)
၁၅၀။ အနုမောဒနာ (စိမ်ကမ္ဘာ) (၂၃.၁၂.၂၀၁၂)
၁၅၁။ (၁၈) ပါး မဟာဝိပဿနာတရား (၂၇.၁၂.၂၀၁၂)
၁၅၂။ အနုမောဒနာ (၂၉.၁၂.၂၀၁၂)
၁၅၃။ အနုမောဒနာ (ရဟန်းခံ) (၃၀.၁၂.၂၀၁၂)
၁၅၄။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် နောက်ဆုံးနေ့ ဓမ္မအတွေးများ (၃၁.၁၂.၂၀၁၂)
၁၅၅။ မေတ္တာကမ္ဘာ၏စွမ်းဆောင်မှု အကြီးမားဆုံးသော တရားနှစ်ပါး (၁.၁.၂၀၁၂)
၁၅၆။ အနုမောဒနာ (ဦးဇော်မင်း) (၂.၁.၂၀၁၃)
၁၅၇။ နှစ်သစ်အခါမှာကျက်သရေရှိအောင်နေထိုင်ပါ (၂.၁.၂၀၁၃)
၁၅၈။ အနုမောဒနာ (ဒေါ်မာလာချို) (၄.၁.၂၀၁၃)
၁၅၉။ အနုမောဒနာ (မောင်ဝေဖြိုးမောင်) (၅.၁.၂၀၁၃)
၁၆၀။ သည်းခံခြင်းနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားထိမ်းသိမ်းခြင်း (၅.၁.၂၀၁၃)
၁၆၁။ သြဝါဒစကား (ဓမ္မဒီပဗုဒ္ဓစာပေသင်တန်း) (၆.၁.၂၀၁၃)
၁၆၂။ အမှီကောင်းရှိသူ (၆.၁.၂၀၁၃)
၁၆၃။ အနုမောဒနာ (ဦးအောင်မင်းညို) (၇.၁.၂၀၁၃)
၁၆၄။ ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်ခြင်း (၇.၁.၂၀၁၃)
၁၆၅။ တဒင်္ဂငြိမ်းအေးသူ (၉.၁.၂၀၁၃)
၁၆၆။ သမာဓိနှင့်ယထာဘူတဉာဏ် (၁၀.၁.၂၀၁၃)
၁၆၇။ အားကိုးစရာလူတိုင်းမှာ (၁၂.၁.၂၀၁၃)
၁၆၈။ ဓမ္မအရည်အခြင်းလေးရပ် (၁၃.၁.၂၀၁၃)
၁၆၉။ အနုမောဒနာ (ဦးထွန်းလွင်) (၁၄.၁.၂၀၁၃)
၁၇၀။ ဥပါဒါန်အစွဲရှိလျှက် ဂတိမြဲသူများ – ၁ (၁၄.၁.၂၀၁၃)
၁၇၁။ ဥပါဒါန်အစွဲရှိလျှက် ဂတိမြဲသူများ – ၂ (၁၅.၁.၂၀၁၃)
၁၇၂။ အနုမောဒနာ (ရဟန်းခံ)(၁၅.၁.၂၀၁၃)
၁၇၃။ ကမ္မဋ္ဌာန်းဘာဝနာ ကြိုးစားအားထုတ်ပါ (၁၆.၁.၂၀၁၃)
၁၇၄။ ဆရာမြတ်ကို ဆည်းကပ်ခြင်း (၁၇.၁.၂၀၁၃)
၁၇၅။ အနုမောဒနာ (၁၈.၁.၂၀၁၃)
၁၇၆။ ဖြည့်ကြကိုယ်စီမြတ်ပါရမီ (၁၈.၁.၂၀၁၃)
၁၇၇။ အနုမောဒနာ (၁၉.၁.၂၀၁၃)
၁၇၈။ အနုမောဒနာ (၁၉.၁.၂၀၁၃)
၁၇၉။ ဝေဒနာကို ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့် ရှုမြင်သုံးသပ်ခြင်း (၁၉.၁.၂၀၁၃)
၁၈၀။ အနုမောဒနာ (၂၀.၁.၂၀၁၃)
၁၈၁။ သုံးမျိုးဖယ်ရှား သုံးမျိုးပွား – ၁ (၂၀.၁.၂၀၁၃)
၁၈၂။ သုံးမျိုးဖယ်ရှား သုံးမျိုးပွား – ၂ (၂၁.၁.၂၀၁၃)
၁၈၃။ စိတ်ကူးကြံစည် အာဇာနည် (၂၂.၁.၂၀၁၃)
၁၈၄။ သီလ နှင့် ပညာ (၂၃.၁.၂၀၁၃)
၁၈၅။ အနုမောဒနာ (ဦးတင်အောင်) (၂၄.၁.၂၀၁၃)
၁၈၆။ အကျိုးသက်ရောက်မှုခြင်းမတူသည့် သူတို့နှစ်ယောက် (၂၅.၁.၂၀၁၃)
၁၈၇။ ဘဝချမ်းသာနှင့်ဓမ္မပီတိ (၂၆.၁.၂၀၁၃)
၁၈၈။ ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောသည့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ (၂၆.၁.၂၀၁၃)
၁၈၉။ အနုမောဒနာ (ဦးတင်လှိုင်) (၂၇.၁.၂၀၁၃)
၁၉၀။ အနုမောဒနာ (ဒေါ်ခင်သန်းဝင်း) (၂၇.၁.၂၀၁၃)
၁၉၁။ အင်္ဂုလိမာလသုတ် အနှစ်ချုပ် (၂၈.၁.၂၀၁၃)
၁၉၂။ အနုမောဒနာ (၂၈.၁.၂၀၁၃)
၁၉၃။ ဝဋသုတ် အနှစ်ချုပ် (၂၇.၁.၂၀၁၃)
၁၉၄။ အနုမောဒနာ (၂၉.၁.၂၀၁၃)
၁၉၅။ မောရသုတ် အနှစ်ချုပ် (၂၉.၁.၂၀၁၃)
၁၉၆။ အနုမောဒနာ (ကျောင်းလွတ်ပူဇာ) (၃၀.၁.၂၀၁၃)
၁၉၇။ အကျိုးအပြစ်ကို ခံစားသိမြင်ခြင်း (၃၁.၁.၂၀၁၃)
၁၉၈။ အသိရှင်းမှ မသိမှုကင်းမည်။ (၂၃.၂.၂၀၁၃)
၁၉၉။ သုံးပါးရတနာ ကိုးကွယ်ပါ (၂၄.၂.၂၁၀၃)
၂၀၀။ အာရုံကိုအနိုင်ယူသည့်စိတ် (၂၅.၂.၂၀၁၃)
၂၀၁။ လုပ်မှရမည်။ (၂၆.၂.၂၀၁၃)
၂၀၂။ အနုမောဒနာ (၂၇.၂.၂၀၁၃)
၂၀၃။ ကိုးကွယ်မှုကိုရွေးချယ်ခြင်း (၂၈.၂.၂၀၁၃)
၂၀၄။ အနုမောဒနာ (၁.၃.၂၀၁၃)
၂၀၅။ နှလုံးစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းခြင်း (၁.၃.၂၀၁၃)
၂၀၆။ အနုမောဒနာ (ဦးမျိုးသိန်း) (၂.၃.၂၀၁၃)
၂၀၈။ ဒုစရိုက်အကျိုးအဆိုးပုံရိပ်များ (၃.၃.၂၀၁၃)
၂၀၉။ စာသင်စာချပြုကြသာသနာ (၄.၃.၂၀၁၃)
၂၁၀။ အနုမောဒနာ (ဦးအေးကိုဇင်) (၅.၃.၂၀၁၃)
၂၁၁။ အနုမောဒနာ (၉.၃.၂၀၁၃)
၂၁၂။ သာရဏီယသြဝါဒ (မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကျွေး) (၁၀.၃.၂၀၁၃)
၂၁၃။ မြင့်မြတ်သောစိတ်ထားသည် ဂုဏ်အရည်အချင်းများထက်တန်ဖိုးရှိသည်။ (၁၀.၃.၂၀၁၃)
၂၁၄။ သြဝါဒ (ဝိဘဇ္ဇဝါဒီဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာအခြေခံသင်တန်း) (၁၁.၃.၂၀၁၃)
၂၁၅။ ကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းပညာ (၁၁.၃.၂၀၁၃)
၂၁၆။ ဓမ္မစွမ်းအားနှင့်စွမ်းဆောင်မှုများ (၁၂.၃.၂၀၁၃)
၂၁၇။ အနုမောဒနာ (၂၃.၃.၂၀၁၃)
၂၁၈။ အမှုကိစ္စပြေငြိမ်းရေးဆိုင်ရာ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမများ (၂၉.၃.၂၀၁၃)
၂၁၉။ ရာပြည့်အောင်ပန်းရှေ့တက်လှမ်း (၁၀.၄.၂၀၁၃)
၂၂၀။ သီလသာသနာ (၁၃.၄.၂၀၁၃)
၂၂၁။ ခန္ဓာငါးပါးမှာအားကိုးစရာမရှိ (၁၄.၄.၂၀၁၃)
၂၂၂။ အနုမောဒနာ (၁၅.၄.၂၀၁၃)
၂၂၃။ စူဋ္ဌပုဏ္ဏမသုတ် အနှစ်ချုပ် (၁၅.၄.၂၀၁၃)
၂၂၄။ မဟာပုဏ္ဏမသုတ် အနှစ်ချုပ် – ၁ (၁၆.၄.၂၀၁၃)
၂၂၅။ မဟာပုဏ္ဏမသုတ် အနှစ်ချုပ် – ၂ (၁၇.၄.၂၀၁၃)
၂၂၆။ ဝိပဿနာကျင့်စဉ်အလုပ်ပေးတရား-၁ (၁၄.၄.၂၀၁၃)
၂၂၇။ ဝိပဿနာကျင့်စဉ်အလုပ်ပေးတရား-၂ (၁၅.၄.၂၀၁၃)
၂၂၈။ ဝိပဿနာကျင့်စဉ်အလုပ်ပေးတရား-၃ (၁၆.၄.၂၀၁၃)
၂၂၉။ ဝိပဿနာကျင့်စဉ်အလုပ်ပေးတရား-၄ (၁၇.၄.၂၀၁၃)
၂၃၀။ အနုမောဒနာ (၁၈.၄.၂၀၁၃)
၂၃၁။ ကြည်ညိုစိတ်၏အခြေခံအကြောင်းများ (၂၂.၄.၂၀၁၃)
၂၃၂။ ဓမ္မပါလရွာ (၁၅.၅.၂၀၁၃)
၂၃၃။ အနုမောဒနာ (၁၉.၅.၂၀၁၃)
၂၃၄။ ငြိမ်းချမ်းသာယာ ဒို့ပြည်ရွာ (၂၁.၅.၂၀၁၃)
၂၃၅။ အနုမောဒနာ (၂၂.၅.၂၀၁၃)
၂၃၆။ မြတ်ဗုဒ္ဓနှင့်စီးတော်မြင်းကဏ္ဍကတို့၏ဆုံတွေ့ခြင်း (၂၃.၅.၂၀၁၃)
၂၃၇။ အနုမောဒနာ (အယုပါလဆေးခန်းရေစက်ချ) (၂၄.၅.၂၀၁၃)
၂၃၈။ မြတိဗုဒ္ဓ၏စကားတော်များ (၂၄.၅.၂၀၁၃)
၂၃၉။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဂယာအမှတတရလေးဆယ်ကိုးည (၂၆.၅.၂၀၁၃)
၂၄၀။ မြန်မာတို့၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဘာသာတရား (၁.၆.၂၀၁၃)
၂၄၁။ မြတ်ဗုဒ္ဓနှင့်ကြာပန်းအမှတ်တရ (၃.၆.၂၀၁၃)
၂၄၂။ အနုမောဒနာ (၁၅.၆.၂၀၁၃)
၂၄၃။ ရောင့်ရဲမှုရှိတာနှင့် မရှိတာ (၁၆.၆.၂၀၁၃)
၂၄၄။ အနုမောဒနာ (သိန်းထိုက်အောင်ဆန်းရောင်းဝယ်ရေး) (၂၂.၆.၂၀၁၃)
၂၄၅။ ဓဇဂ္ဂသုတ် အနှစ်ချုပ် (၂၂.၆.၂၀၁၃)
၂၄၆။ အနုမောဒနာ (သန္တိသုခရွှေလရောင်ကျောင်းတော်) (၂၄.၆.၂၀၁၃)
၂၄၇။ အနုမောဒနာ (၁.၇.၂၀၁၃)
၂၄၈။ လိုချင်နေသမျှ ဘဝမဆုံးနိုင် (၃.၇.၂၀၁၃)
၂၄၉။ အနုမောဒနာ (၁၀.၇.၂၀၁၃)
၂၅၀။ အနုမောဒနာ (၁၀.၇.၂၀၁၃)
၂၅၁။ အနုမောဒနာ (မြန်မာကြယ်ငါးပွင့်သင်္ဘောလုပ်ငန်း) (၁၁.၇.၂၀၁၃)
၂၅၂။ အနုမောဒနာ (SSC) (၁၂.၇.၂၀၁၃)
၂၅၃။ အနုမောဒနာ (၁၇.၇.၂၀၁၃)
၂၅၄။ အနုမောဒနာ (၁၇.၇.၂၀၁၃)
၂၅၅။ အနုမောဒနာ (၁၇.၇.၂၀၁၃)
၂၅၆။ မြတ်ဗုဒ္ဓနှင့်ဝါဆိုလပြည့်နေ့အမှတ်တ၇များ (၂၂.၇.၂၀၁၃)
၂၆၅။ အနုမောဒနာ (ဘုရင်ခံစံအိမ်)
၂၆၆။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပန်းချက် – ၁ (၁၁.၇.၂၀၁၃)
၂၆၇။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပန်းချက် – ၂ (၁၂.၇.၂၀၁၃)
၂၆၈။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပန်းချက် – ၃ (၁၃.၇.၂၀၁၃)
၂၆၉။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပန်းချက် – ၄ (၁၄.၇.၂၀၁၃)
၂၇၀။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပန်းချက် – ၅ (၁၅.၇.၂၀၁၃)
၂၇၁။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပန်းချက် – ၆ (၁၆.၇.၂၀၁၃)
၂၇၂။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပန်းချက် – ၇ (၁၇.၇.၂၀၁၃)
၂၇၃။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပန်းချက် – ၈ (၁၈.၇.၂၀၁၃)
၂၇၄။ အနုမောဒနာ (သွားဖက်ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်) (၁၅.၇.၂၀၁၃)
၂၇၅။ သြဝါဒ အနုမောဒနာ (အောင်ချမ်းသာပြင်ဦးလွင်) (၇.၈.၂၀၁၃)
၂၇၆။ ဘဝရိက္ခာ (၂၀.၈.၂၀၁၃)
၂၇၇။ သမုဒ္ဒရာ ဝမ်းတစ်လွှာ (၂၁.၈.၂၀၁၃)
၂၇၈။ အနုဓမ္မကျင့်စဉ် (၂၂.၈.၂၀၁၃)
၂၇၉။ မေတ္တသုတ် အနှစ်ချုပ် (၃.၉.၂၀၁၃)
ဟောကြားတော်မူအပ်သောတရားတော်များ (အတွဲ – ၅ )
DVD MP3 တရားတော်များ ( မဉ္စမတွဲ )
တရားတော် ( ၂၅၉ ) ပုဒ်
၁။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၁)
၂။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၂)
၃။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၃)
၄။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၄)
၅။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၅)
၆။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၆)
၇။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၇)
၈။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၈)
၉။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၉)
၁၀။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၁၀)
၁၁။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၁၁)
၁၂။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၁၂)
၁၃။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၁၃)
၁၄။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၁၄)
၁၅။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၁၅)
၁၆။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၁၆)
၁၇။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၁၇)
၁၈။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၁၈)
၁၉။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၁၉)
၂၀။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၂၀)
၂၁။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၂၁)
၂၂။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၂၂)
၂၃။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၂၃)
၂၄။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၂၄)
၂၅။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၂၅)
၂၆။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၂၆)
၂၇။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၂၇)
၂၈။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၂၈)
၂၉။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၂၉)
၃၀။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၃၀)
၃၁။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၃၁)
၃၂။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၃၂)
၃၃။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၃၃)
၃၄။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၃၄)
၃၅။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၃၅)
၃၆။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၃၆)
၃၇။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၃၇)
၃၈။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၃၈)
၃၉။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၃၉)
၄၀။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၄၀)
၄၁။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၄၁)
၄၂။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၄၂)
၄၃။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၄၃)
၄၄။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၄၄)
၄၅။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၄၅)
၄၆။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၄၆)
၄၇။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၄၇)
၄၈။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၄၈)
၄၉။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၄၉)
၅၀။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၅၀)
၅၁။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၅၁)
၅၂။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၅၂)
၅၃။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၅၃)
၅၄။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၅၄)
၅၅။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၅၅)
၅၆။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၅၆)
၅၇။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၅၇)
၅၈။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၅၈)
၅၉။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၅၉)
၆၀။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၆၀)
၆၁။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၆၁)
၆၂။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၆၂)
၆၃။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၆၃)
၆၄။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၆၄)
၆၅။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၆၅)
၆၆။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၆၆)
၆၇။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၆၇)
၆၈။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၆၈)
၆၉။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၆၉)
၇၀။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၇၀)
၇၁။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၇၁)
၇၂။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၇၂)
၇၃။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၇၃)
၇၄။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၇၄)
၇၅။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၇၅)
၇၆။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၇၆)
၇၇။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၇၇)
၇၈။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၇၈)
၇၉။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၇၉)
၈၀။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၈၀)
၈၁။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၈၁)
၈၂။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၈၂)
၈၃။ ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ (၁)
၈၄။ ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ (၂)
၈၅။ ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ (၃)
၈၆။ ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ (၄)
၈၇။ ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ (၅)
၈၈။ ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ (၆)
၈၉။ ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ (၇)
၉၀။ ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ (၈)
၉၁။ ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ (၉)
၉၂။ ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ (၁၀)
၉၃။ ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ (၁၁)
၉၄။ ဗုဒ္ဓခေတ်သူဠေးကြီးများနှင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု
၉၅။ မိဘနှင့်သားသမီးအကြား မှန်ကန်သောအမြင်များ (၁)
၉၆။ မိဘနှင့်သားသမီးအကြား မှန်ကန်သောအမြင်များ (၂)
၉၇။ မိဘနှင့်သားသမီးအကြား မှန်ကန်သောအမြင်များ (၃)
၉၈။ မိဘနှင့်သားသမီးအကြား မှန်ကန်သောအမြင်များ (၄)
၉၉။ မိဘနှင့်သားသမီးအကြား မှန်ကန်သောအမြင်များ (၅)
၁၀၀။ မိဘနှင့်သားသမီးအကြား မှန်ကန်သောအမြင်များ (၆)
၁၀၁။ မိဘနှင့်သားသမီးအကြား မှန်ကန်သောအမြင်များ (၇)
၁၀၂။ မိဘနှင့်သားသမီးအကြား မှန်ကန်သောအမြင်များ (၈)
၁၀၃။ မိဘနှင့်သားသမီးအကြား မှန်ကန်သောအမြင်များ (၉)
၁၀၄။ မိဘနှင့်သားသမီးအကြား မှန်ကန်သောအမြင်များ (၁၀)
၁၀၅။ မိဘနှင့်သားသမီးအကြား မှန်ကန်သောအမြင်များ (၁၁)
၁၀၆။ မိဘနှင့်သားသမီးအကြား မှန်ကန်သောအမြင်များ (၁၂)
၁၀၇။ မိဘနှင့်သားသမီးအကြား မှန်ကန်သောအမြင်များ (၁၃)
၁၀၈။ မိဘနှင့်သားသမီးအကြား မှန်ကန်သောအမြင်များ (၁၄)
၁၀၉။ (၁၈-၃-၂၀၁၄) စစ်ကိုင်းသုဗောဓာရုံဆွမ်းကပ်အနုမောဒနာ
၁၁၀။ (၂၀-၃-၂၀၁၄) မွေးနေ့ အနုမောဒနာ
၁၁၁။ သိမ်ကျောင်းအလှူ အနုမောဒနာ
၁၁၂။ ရဟန်းခံ အနုမောဒနာ
၁၁၃။ (၂၇-၃-၂၀၁၄) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား
၁၁၄။ (၂၉-၃-၂၀၁၄) မွေးနေ့ အနုမောဒနာ
၁၁၅။ (၂၉-၃-၂၀၁၄) မြန်မာတို့၏ မင်္ဂလာပါ
၁၁၆။ (၃၀-၃-၂၀၁၄) ဆွမ်းကပ် အနုမောဒနာ
၁၁၇။ (၃၀-၃-၂၀၁၄) ပညာရှိမှသာ သိနိုင်မည့်တရား
၁၁၈။ (၃၁-၃-၂၀၁၄) ရှင်ပြုအနုမောဒနာတရား
၁၁၉။ (၃၁-၃-၂၀၁၄) ပြင်ရခက်တဲ့အမှား
၁၂၁။ (၁၂-၄-၂၀၁၄) ရဟန်းခံရှင်ပြုအနုမောဒနာ
၁၂၂။ ကွန်ကရစ်လမ်းမရေစက်ချ အနုမောဒနာ
၁၂၆။ (၄-၃-၂၀၁၄) အကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်ခြင်း
၁၂၈။ (၂၅-၁-၂၀၁၄) ဆွမ်းအလှူအနုမောဒနာ(၁)
၁၂၉။ (၂၅-၁-၂၀၁၄) ဆွမ်းအလှူအနုမောဒနာ(၂)
၁၃၀။ (၃၁-၁-၂၀၁၄) မြတ်ဗုဒ္ဓအပေါ် ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏ ကြည်ညိုမှု
၁၃၁။ (၁-၂-၂၀၁၄) အနုမောဒနာ
၁၃၂။ (၁၈-၂-၂၀၁၄) မွေးနေ့ရေစက်ချအနုမောဒနာ
၁၃၃။ (၅-၅-၂၀၁၄) အရိယာဘဝသို့ရောက်အောင်ကျင့်ဆောင်ခြင်း
၁၃၄။ (၆-၆-၂၀၁၄) ဘဝကိုရှုမြင်သုံးသပ်ခြင်း
၁၃၅။ (၇-၁၂-၂၀၁၃) မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမအရ လူတော်လူကောင်းအရည်အချင်း
၁၃၆။ (၈-၁၂-၂၀၁၃) စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်အမျှော်အမြင်
၁၃၇။ (၉-၁၂-၂၀၁၃) မိဘနှင့်သားသမီး အကြားမှန်ကန်သောအမြင်များ
၁၃၈။ (၁၀-၁၂-၂၀၁၃) ဘဝနာနှစ်ပါး စိတ်ခွန်အား
၁၃၉။ (၁၂-၆-၂၀၁၄) သြဃတရဏသုတ်အနှစ်ချုပ်
၁၄၀။ (၁၃-၃-၂၀၁၄) ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်နိုင်ငံခြားသားများ
၁၄၁။ (၁၆-၃-၂၀၁၄) ဗုဒ္ဓဟုဝန်ခံခြင်း
၁၄၂။ (၁၈-၄-၂၀၁၄) အလေးထားခြင်း သုံးမျိုးဖြင့်နေထိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်း
၁၄၃။ (၂၀-၄-၂၀၁၄) ရှင်ပြုအနုမောဒနာ
၁၄၄။ (၂၀-၅-၂၀၁၄) မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမဖြင့် ချမ်းသာသုခကိုရှာခြင်း
၁၄၅။ (၂၂-၄-၂၀၁၄) ရှင်ပြုအနုမောဒနာ
၁၄၆။ တပေါင်းလရာသီနှင့် သဲပုံစေတီပွဲတော်အကြောင်း
၁၄၇။ (၂၅-၄-၂၀၁၄) အရှုံးထဲပအမြတ်ရရေး
၁၄၈။ (၂၅-၅-၂၀၁၄) အသက်ရှည်သမျှအကျိုးရှိစေရမည်။
၁၄၉။ (၂၇-၄-၂၀၁၄) ရှင်ပြုအနုမောဒနာ
၁၅၀။ (၃၀-၅-၂၀၁၄) ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦး၏ဓမ္မအမြင်
၁၅၁။ (၁၉-၄-၂၀၁၄) ရေစက်ချ အလှူတော် အနုမောဒနာ
၁၅၂။ (၂၀-၄-၂၀၁၄) ရဟန်းခံအလှူအနုမောဒနာ
၁၅၃။ စစ်ကိုင်းမြို့၊ ရွှေမြိုင် ပိုးထည်၊ ချည်ထည်နှင့် ရှမ်းရိုးရာအထည်အမျိုးမျိုးဖြန့်ချီရေး မိသားစု။
ကျောင်းဆောင်တော် ရေစက်ချ အနုမောဒနာတရား
၁၅၄။ နံနက်ပိုင်းသြင်္ကန်အလုပ်ပေးတရား (၁)
၁၅၅။ နံနက်ပိုင်းသြင်္ကန်အလုပ်ပေးတရား (၂)
၁၅၆။ နံနက်ပိုင်းသြင်္ကန်အလုပ်ပေးတရား (၃)
၁၅၇။ နံနက်ပိုင်းသြင်္ကန်အလုပ်ပေးတရား (၄)
၁၅၈။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဂုဏ်တော် ၉ပါး (၁)
၁၅၉။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဂုဏ်တော် ၉ပါး (၂)
၁၆၀။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဂုဏ်တော် ၉ပါး (၃)
၁၆၁။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဂုဏ်တော် ၉ပါး (၄)
၁၆၂။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဂုဏ်တော် ၉ပါး (၅)
၁၆၃။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဂုဏ်တော် ၉ပါး (၆)
၁၆၄။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဂုဏ်တော် ၉ပါး (၇)
၁၆၅။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဂုဏ်တော် ၉ပါး (၈)
၁၆၆။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဂုဏ်တော် ၉ပါး (၉)
၁၆၇။ (၁၃-၁၂-၃၀၁၃) စိတ်ကောင်းရှိဖို့က ပထမ
၁၆၈။ (၂၆-၇-၂၀၁၄) ကိုကျော်သူအောင်မွေးနေ့ အနုမောဒနာ
၁၆၉။ (၂၉-၇-၂၀၁၄) ရတနာပုံဆိုက် ဘာစီးတီးဝါဆိုသင်င်္ကန်းကပ်
၁၇၀။ (၃၀-၇-၂၀၁၄) မေဖူးသက်မွေးနေ့အနုမောဒနာ
၁၇၁။ (၃-၈-၂၀၁၄) အနုမောဒနာ
၁၇၂။ (၁၆-၈-၂၀၁၄) အနုမောဒနာ
၁၇၃။ (၂၄-၈-၃၀၁၄) စိုးရိမ်စိတ်ကိုဖယ်ရှားခြင်း
၁၇၄။ (၂၉-၈-၂၀၁၄) ရောင့်ရဲခြင်း
၁၇၅။ ဝိပဿနာရှုဖွယ် တောလေးဆယ် (၁)
၁၇၆။ ဝိပဿနာရှုဖွယ် တောလေးဆယ် (၂)
၁၇၇။ ဝိပဿနာရှုဖွယ် တောလေးဆယ် (၃)
၁၇၈။ ဝိပဿနာရှုဖွယ် တောလေးဆယ် (၄)
၁၇၉။ ဝိပဿနာရှုဖွယ် တောလေးဆယ် (၅)
၁၈၀။ ဝိပဿနာရှုဖွယ် တောလေးဆယ် (၆)
၁၈၁။ ဝိပဿနာရှုဖွယ် တောလေးဆယ် (၇)
၁၈၂။ (၃-၉-၂၀၁၄) ဗုဒ္ဓသီဟနာဒသုတ် အနှစ်ချုပ်
၁၈၃။ (၁၄-၉-၂၀၁၄) သူလိုလူစား တရားမရှိ
၁၈၄။ (၁၇-၉-၂၀၁၄) လူနှင့်စကားသတိထား
၁၈၅။ (၁၈-၉-၂၀၁၄) ချမ်းသာသုခများနှင့်ဓမ္မဝိပဿနာ
၁၈၆။ (၂၀-၉-၂၀၁၄) ဗုဒ္ဓဟောကြားသစ္စာတရား (၁)
၁၈၇။ (၂၀-၉-၂၀၁၄) ဗုဒ္ဓဟောကြားသစ္စာတရား (၂)
၁၈၈။ (၂၅-၉-၂၀၁၄) သူတပါးအကျိုးဆောင်ကိုယ့်အကျိုးအောင်
၁၈၉။ (၂၈-၉-၂၀၁၄) ဇာတကမှအဏ္ဏဝါဗဟုသုတအကြောင်း
၁၉၀။ (၂၉-၉-၂၀၁၄) ဂါရဝနှင့်အဂါရဝအကြောင်း
၁၉၁။ (၃၀-၉-၂၀၁၄) စိတ်ဓာတ်ပျော့ညံ့သူနှင့်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်နိုင်သူ
၁၉၂။ (၁-၁၀-၂၀၁၄) လူကြီးရွေးပွဲ
၁၉၃။ (၂-၁၀-၂၀၁၄) ရွှေသားအစစ်လူ့အနှစ်
၁၉၄။ (၃-၁၀-၃၀၁၄) အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်ရှိသူ
၁၉၅။ (၄-၁၀-၂၀၁၄) မကယ်နိုင်တဲ့ဘေးလွတ်မြောက်ရေး
၂၀၀။ ကံနှင့်ဘဝ အလုပ်နှင့်လုပ်အားခ
၂၀၁။ အနုမောဒနာတရား (၁)
၂၀၂။ အနုမောဒနာတရား (၂)
၂၀၃။ အနုမောဒနာတရား (၃)
၂၀၄။ အနုမောဒနာတရား (၄)
၂၀၅။ အနုမောဒနာတရား (၅)
၂၀၆။ အနုမောဒနာတရား (၆)
၂၁၀။ လူတို့၏ ကာမစ္ဆန္ဒအကြောင်း
၂၁၁။ မသူတော်တရားကို အနိုင်ယူခြင်း
၂၁၂။ အညစ်အကြေးများ ထာဝရသန့်စင်ရေး
၂၁၃။ အောင်မြင်ကြီးပွား အကြောင်းများ
၂၁၅။ ပျက်စီးမှုကိုရှောင် ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစား
၂၁၆။ ဗုဒ္ဓဘာသာတို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ
၂၁၇။ သူတော်ကောင်းသည် အားလုံးအတွက်ဖြစ်သည်
၂၁၈။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီးများ၏ ဘဝအောင်မြင်ရေး
၂၂၇။ ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် လူတို့၏ဂုဏ်ရည်
၂၃၃။ စွမ်းအားကြီးမား သာသနာ့မျက်လုံးများ
၂၃၄။ မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့် သမဏ(၄)မျိုး အကြောင်း
၂၃၅။ စွမ်းအားကြီးမား မြတ်ဗုဒ္ဓ၏မျက်လုံးများ (၁)
၂၃၆။ စွမ်းအားကြီးမား မြတ်ဗုဒ္ဓ၏မျက်လုံးများ (၂)
၂၃၇။ တပေါင်းလရာသီနှင့် ရှင်ကာဠုဒါရီအကြောင်း
၂၃၉။ ရှင်သုမနသာရ ရဟန်းခံအနုမောဒနာ
၂၄၀။ ရှင်သုရိယ ရဟန်းခံ အနုမောဒနာ
၂၄၁။ ဦးနေအောင်+ဒေါက်တာမိမိငယ် ဆွမ်းကပ်အနုမောဒနာ
၂၄၃။ ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်၏ (၇၅)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အနုမောဒနာ
၂၄၄။ သုမေဓာထေရီမ၏ သံသရာဘဝများနှင့်ရင်တွင်းစကား
၂၄၅။ ၁၃၇၇နှစ် – နံနက်ခင်းအလုပ်ပေးတရား (၁)
၂၄၆။ ၁၃၇၇နှစ် – နံနက်ခင်းအလုပ်ပေးတရား (၂)
၂၄၇။ ၁၃၇၇နှစ် – နံနက်ခင်းအလုပ်ပေးတရား (၃)
၂၄၈။ ၁၃၇၇နှစ် – နံနက်ခင်းအလုပ်ပေးတရား (၄)
၂၄၉။ ကောသလအိမ်မက်နှင့်ယနေ့ကမ္ဘာ (၁)
၂၅၀။ ကောသလအိမ်မက်နှင့်ယနေ့ကမ္ဘာ (၂)
၂၅၁။ ကောသလအိမ်မက်နှင့်ယနေ့ကမ္ဘာ (၃)
၂၅၅။ ဗြဟ္မနိမန္တနိကသုတ် အနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၁)
၂၅၆။ ဗြဟ္မနိမန္တနိကသုတ် အနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၂)
၂၅၈။ မြတ်နိဗ္ဗာန်နှင့် သန္တမဂ္ဂလမ်းစဉ်
၂၅၉။ ပါရမီရှင်တို့၏ မြင့်မြတ်သောစိတ်ထား
ဟောကြားတော်မူအပ်သောတရားတော်များ (အတွဲ – ၅+၆ )
DVD MP3 တရားတော်များ ( မဉ္စမတွဲ နှင့် ဆဋ္ဌမတွဲ)
တရားတော် ( ၄၈၇ ) ပုဒ်
(မှတ်ချက်။ အောက်ပါ တရားတော်များသည် ပုရပိုက်ဖြန့်ချီရေးမှ စီစဉ်ထုတ်ဝေပါသည်။
ကနဦးက ထုတ်ဝေထားသော DVD 05 တွင်ပါသော တရားတော် နံပါတ်များနှင့် ကွဲလွဲမှုရှိနေသဖြင့် ပုရပိုဒ်မှ ထုတ်ဝေ version ကို သီသန့် ပြန်လည် တင်ပြပါသည်။ )
၁။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၁) (၁၁-၇-၂၀၁၃)
၂။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၂) (၁၂-၇-၂၀၁၃)
၃။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၃) (၁၃-၇-၂၀၁၃)
၄။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၄) (၁၄-၇-၂၀၁၃)
၅။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၅) (၁၅-၇-၂၀၁၃)
၆။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၆) (၁၆-၇-၂၀၁၃)
၇။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၇) (၁၇-၇-၂၀၁၃)
၈။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၈) (၁၈-၇-၂၀၁၃)
၉။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၉) (၂၁-၇-၂၀၁၃)
၁၀။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၁၀) (၂၂-၇-၂၀၁၃)
၁၁။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၁၁) (၂၃-၇-၂၀၁၃)
၁၂။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၁၂) (၂၄-၇-၂၀၁၃)
၁၃။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၁၃) (၂၅-၇-၂၀၁၃)
၁၄။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၁၄) (၂၆-၇-၂၀၁၃)
၁၅။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၁၅) (၂၇-၇-၂၀၁၃)
၁၆။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၁၆) (၃၀-၇-၂၀၁၃)
၁၇။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၁၇) (၁-၁၂-၂၀၁၃)
၁၈။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၁၈) (၄-၁၂-၂၀၁၃)
၁၉။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၁၉) (၁၄-၁၂-၂၀၁၃)
၂၀။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၂၀) (၁၅-၁၂-၂၀၁၃)
၂၁။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၂၁) (၁၆-၁၂-၂၀၁၃)
၂၂။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၂၂) (၂၀-၁၂-၂၀၁၃)
၂၃။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၂၃) (၂၁-၁၂-၂၀၁၃)
၂၄။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၂၄) (၂၂-၁၂-၂၀၁၃)
၂၅။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၂၅) (၂၃-၁၂-၂၀၁၃)
၂၆။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၂၆) (၂၄-၁၂-၂၀၁၃)
၂၇။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၂၇) (၂၅-၁၂-၂၀၁၃)
၂၈။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၂၈) (၂၇-၁၂-၂၀၁၃)
၂၉။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၂၉) (၅-၁-၂၀၁၄)
၃၀။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၃၀) (၆-၁-၂၀၁၄)
၃၁။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၃၁) (၂၁-၇-၂၀၁၃)
၃၂။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၃၂) (၂၂-၇-၂၀၁၃)
၃၃။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၃၃) (၂၃-၇-၂၀၁၃)
၃၄။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၃၄) (၂၄-၇-၂၀၁၃)
၃၅။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၃၅) (၂၅-၇-၂၀၁၃)
၃၆။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၃၆) (၂၆-၇-၂၀၁၃)
၃၇။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၃၇) (၂၇-၇-၂၀၁၃)
၃၈။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၃၈) (၃၀-၇-၂၀၁၃)
၃၉။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၃၉) (၁-၁၂-၂၀၁၃)
၄၀။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၄၀) (၄-၁၂-၂၀၁၃)
၄၁။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၄၁) (၁၄-၁၂-၂၀၁၃)
၄၂။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၄၂) (၁၅-၁၂-၂၀၁၃)
၄၃။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၄၃) (၁၆-၁၂-၂၀၁၃)
၄၄။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၄၄) (၂၀-၁၂-၂၀၁၃)
၄၅။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၄၅) (၁၉-၆-၂၀၁၄)
၄၆။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၄၆) (၂၀-၆-၂၀၁၄)
၄၇။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၄၇) (၁၅-၁၀-၂၀၁၄)
၄၈။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၄၈) (၉-၁၀-၂၀၁၄)
၄၉။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၄၉) (၁၀-၁၀-၂၀၁၄)
၅၀။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၅၀) (၁၁-၁၀-၂၀၁၄)
၅၁။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၅၁) (၁၃-၁၀-၂၀၁၄)
၅၂။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၅၂) (၁၄-၁၀-၂၀၁၄)
၅၃။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၅၃) (၁၅-၁၀-၂၀၁၄)
၅၄။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၅၄) (၁၆-၁၀-၂၀၁၄)
၅၅။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၅၅) (၁၇-၁၀-၂၀၁၄)
၅၆။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၅၆) (၁၈-၁၀-၂၀၁၄)
၅၇။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၅၇) (၁၉-၁၀-၂၀၁၄)
၅၈။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၅၈) (၂၀-၁၀-၂၀၁၄)
၅၉။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၅၉) (၂၁-၁၀-၂၀၁၄)
၆၀။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၆၀) (၂၂-၁၀-၂၀၁၄)
၆၁။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၆၁) (၉-၁၁-၂၀၁၄)
၆၂။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၆၂) (၁၂-၁၁-၂၀၁၄)
၆၃။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၆၃) (၁၃-၁၁-၂၀၁၄)
၆၄။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၆၄) (၁၄-၁၁-၂၀၁၄)
၆၅။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၆၅) (၁၄-၁၁-၂၀၁၄)
၆၆။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၆၆) (၁၅-၁၁-၂၀၁၄)
၆၇။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၆၇) (၁၆-၁၁-၂၀၁၄)
၆၈။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၆၈) (၁၈-၁၁-၂၀၁၄)
၆၉။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၆၉) (၁၉-၁၁-၂၀၁၄)
၇၀။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၇၀) (၂၄-၁၁-၂၀၁၄)
၇၁။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၇၁) (၂၅-၁၁-၂၀၁၄)
၇၂။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၇၂) (၂၆-၁၁-၂၀၁၄)
၇၃။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၇၃) (၂၉-၁၁-၂၀၁၄)
၇၄။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၇၄) (၃၀-၁၁-၂၀၁၄)
၇၅။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၇၅) (၁-၁၂-၂၀၁၄)
၇၆။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၇၆) (၂-၁၂-၂၀၁၄)
၇၇။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၇၇) (၉-၁၂-၂၀၁၄)
၇၈။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၇၈) (၁၀-၁၂-၂၀၁၄)
၇၉။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၇၉) (၁၄-၁၂-၂၀၁၄)
၈၀။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၈၀) (၁၅-၁၂-၂၀၁၄)
၈၁။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၈၁) (၁၆-၁၂-၂၀၁၄)
၈၂။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် (၈၂) (၂၇-၁၂-၂၀၁၄)
၈၃။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အရဟံဂုဏ်တော် (၁၃-၄-၂၀၁၄) (ဓမ္မသဟာယ၊ ပြင်ဦးလွင်)
၈၄။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော် (၁၄-၄-၂၀၁၄) (ဓမ္မသဟာယ၊ ပြင်ဦးလွင်)
၈၅။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဝိဇ္ဇာစရဏ၊ သမ္ပန္နဂုဏ်တော် (၁၅-၄-၂၀၁၄) (ဓမ္မသဟာယ၊ ပြင်ဦးလွင်)
၈၆။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ သုဂတဂုဏ်တော် (၁၆-၄-၂၀၁၄) (ဓမ္မသဟာယ၊ ပြင်ဦးလွင်)
၈၇။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ လောကဝိဒူ ဂုဏ်တော် (၁၇-၄-၂၀၁၄) (ဓမ္မသဟာယ၊ ပြင်ဦးလွင်)
၈၈။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အနုတ္တရောပုရိသဒမ္မသာရထိ ဂုဏ်တော် (၂၃-၄-၂၀၁၄) (ဓမ္မသဟာယ၊ ပြင်ဦးလွင်)
၈၉။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ သတ္တာဒေဝမနုဿာနံ ဂုဏ်တော် (၂၇-၄-၂၀၁၄) (ဓမ္မသဟာယ၊ ပြင်ဦးလွင်)
၉၀။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဗုဒ္ဓ ဂုဏ်တော် (၈-၅-၂၀၁၄) (ဓမ္မသဟာယ၊ ပြင်ဦးလွင်)
၉၁။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဘဂဝါ ဂုဏ်တော် (၁၆-၈-၂၀၁၄) (ဓမ္မသဟာယ၊ ပြင်ဦးလွင်)
၉၂။ ဝိပဿနာရှုဖွယ် တောလေးဆယ် (၁) (၃-၁၀-၂၀၁၃) (မြစ်သား)
၉၃။ ဝိပဿနာရှုဖွယ် တောလေးဆယ် (၂) (၄-၁၀-၂၀၁၃) (ကျောက်ဆည်)
၉၄။ ဝိပဿနာရှုဖွယ် တောလေးဆယ် (၃) (၅-၁၀-၂၀၁၃) (မိတ္ထီလာ)
၉၅။ ဝိပဿနာရှုဖွယ် တောလေးဆယ် (၄) (၆-၁၀-၂၀၁၃) (မန ္တလေး)
၉၆။ ဝိပဿနာရှုဖွယ် တောလေးဆယ် (၅) (၇-၁၀-၂၀၁၃) (မန္တလေး)
၉၇။ ဝိပဿနာရှုဖွယ် တောလေးဆယ် (၆) (၈-၁၀-၂၀၁၃) (စစ်ကိုင်း)
၉၈။ ဝိပဿနာရှုဖွယ် တောလေးဆယ် (၇) (၉-၁၀-၂၀၁၃) (မန္တလေး)
၉၉။ ဘဝခရီးဝယ် လမ်းနှစ်သွယ် (၁) (၇-၄-၂၀၁၃) (တောင်ကြီး)
၁၀၀။ ဘဝခရီးဝယ် လမ်းနှစ်သွယ် (၂) (၈-၄-၂၀၁၃) (တောင်ကြီး)
၁၀၁။ ဘဝခရီးဝယ် လမ်းနှစ်သွယ် (၃) (၉-၄-၂၀၁၃) (တောင်ကြီး)
၁၀၂။ သတိပြုရှောင်ရှား ခိုးခြင်းနှစ်ဆယ့်ငါးပါး (၁) (၁၀-၁-၂၀၁၄) (ကမာရွတ်)
၁၀၃။ သတိပြုရှောင်ရှား ခိုးခြင်းနှစ်ဆယ့်ငါးပါး (၂) (၁၁-၁-၂၀၁၄) (ကမာရွတ်)
၁၀၄။ ဗိမာန်ရှင်တို့၏ ပြန်ကြားချက်းများ (၁) (၂-၂-၂၀၁၄) (တာမွေ)
၁၀၅။ ဗိမာန်ရှင်တို့၏ ပြန်ကြားချက်းများ (၂) (၃-၂-၂၀၁၄) (လှိုင်သာယာ)
၁၀၆။ ဗိမာန်ရှင်တို့၏ ပြန်ကြားချက်းများ (၃) (၄-၂-၂၀၁၄) (ရန်ကင်း)
၁၀၇။ ကဆုန်လပြည့် ဗျာဒိတ်တော်ပွဲနှင့် အမှတ်တရ ပုံရိပ်များ (၁) (၁၂-၅-၂၀၁၄)
၁၀၈။ ကဆုန်လပြည့် ဗျာဒိတ်တော်ပွဲနှင့် အမှတ်တရ ပုံရိပ်များ (၂) (၁၃-၅-၂၀၁၄)
၁၀၉။ ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ (၁) (၂-၃-၂၀၁၄) (ဗန်းမော်)
၁၁၀။ ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ (၂) (၃-၃-၂၀၁၄) (ဗန်းမော်)
၁၁၁။ ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ (၃) (၁၇-၃-၂၀၁၄) (ကျောက်ဆည်)
၁၁၂။ ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ (၄) (၁၈-၃-၂၀၁၄) (ကျောက်ဆည်)
၁၁၃။ ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ (၅) (၁၉-၃-၂၀၁၄) (မြစ်သား)
၁၁၄။ ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ (၆) (၂၀-၃-၂၀၁၄) (မန္တလေး)
၁၁၅။ ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ (၇) (၂၂-၃-၂၀၁၄) (မန္တလေး)
၁၁၆။ ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ (၈) (၂၃-၃-၂၀၁၄) (မန္တလေး)
၁၁၇။ ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ (၉) (၂၄-၃-၂၀၁၄) (စစ်ကိုင်း)
၁၁၈။ ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ (၁၀) (၂၅-၃-၂၀၁၄) (စစ်ကိုင်း)
၁၁၉။ ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ (၁၁) (၂၆-၃-၂၀၁၄) (စစ်ကိုင်း)
၁၂၀။ ဇာတကဒေသနာမှ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမများ (၁) (၂၄-၂-၂၀၁၄) (နေပြည်တော်)
၁၂၁။ ဇာတကဒေသနာမှ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမများ (၂) (၂၅-၂-၂၀၁၄) (နေပြည်တော်)
၁၂၂။ ဇာတကဒေသနာမှ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမများ (၃) (၂၆-၂-၂၀၁၄) (နေပြည်တော်)
၁၂၃။ ဗုဒ္ဓဟောကြား သစ္စာတရား (၁) (၂၀-၉-၂၀၁၄) (မန္တလေး)
၁၂၄။ ဗုဒ္ဓဟောကြား သစ္စာတရား (၂) (၂၀-၉-၂၀၁၄) (မန္တလေး)
၁၂၅။ ယုဂနဒ္ဓသုတ် အနှစ်ချုပ် (၁) (၂၉-၁၂-၂၀၁၄) (ရန်ကုန်၊ ကိုင်းတန်းလမ်း)
၁၂၆။ ယုဂနဒ္ဓသုတ် အနှစ်ချုပ် (၂) (၃၀-၁၂-၂၀၁၄) (ရန်ကုန်၊ ကိုင်းတန်းလမ်း)
၁၂၉။ နံနက်ပိုင်းသြင်္ကန်အလုပ်ပေးတရား (၁) ၂၀၁၄ (ဓမ္မသဟာယ၊ ပြင်ဦးလွင်)
၁၃၀။ နံနက်ပိုင်းသြင်္ကန်အလုပ်ပေးတရား (၂) ၂၀၁၄ (ဓမ္မသဟာယ၊ ပြင်ဦးလွင်)
၁၃၁။ နံနက်ပိုင်းသြင်္ကန်အလုပ်ပေးတရား (၃) ၂၀၁၄ (ဓမ္မသဟာယ၊ ပြင်ဦးလွင်)
၁၃၂။ နံနက်ပိုင်းသြင်္ကန်အလုပ်ပေးတရား (၄) ၂၀၁၄ (ဓမ္မသဟာယ၊ ပြင်ဦးလွင်)
၁၃၃။ စွမ်းအားကြီးမား၊ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ မျက်လုံးများ (၁) (၂၅-၂-၂၀၁၅) (ဓမ္မသဟာယ၊ ပြင်ဦးလွင်)
၁၃၄။ စွမ်းအားကြီးမား၊ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ မျက်လုံးများ (၂) (၂၆-၂-၂၀၁၅) (ဓမ္မသဟာယ၊ ပြင်ဦးလွင်)
၁၃၅။ မြတ်ဗုဒ္ဓနှင့် ကောသလမင်းတို့ တွေ့ဆုံခြင်း မှတ်တမ်းများ (၁) (၇-၁၂-၂၀၁၅)
၁၃၆။ မြတ်ဗုဒ္ဓနှင့် ကောသလမင်းတို့ တွေ့ဆုံခြင်း မှတ်တမ်းများ (၂) (၂၆-၂-၂၀၁၅)
၁၃၇။ မြတ်ဗုဒ္ဓနှင့် ကောသလမင်းတို့ တွေ့ဆုံခြင်း မှတ်တမ်းများ (၃) (၉-၁-၂၀၁၅)
၁၃၈။ ကောသလ အိမ်မက်နှင့် ယနေ့ကမ္ဘာ (၁) (၁၃-၄-၂၀၁၅) (ဓမ္မသဟာယ၊ ပြင်ဦးလွင်)
၁၃၉။ ကောသလ အိမ်မက်နှင့် ယနေ့ကမ္ဘာ (၂) (၁၄-၄-၂၀၁၅) (ဓမ္မသဟာယ၊ ပြင်ဦးလွင်)
၁၄၀။ ကောသလ အိမ်မက်နှင့် ယနေ့ကမ္ဘာ (၃) (၁၅-၄-၂၀၁၅) (ဓမ္မသဟာယ၊ ပြင်ဦးလွင်)
၁၄၁။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဝိဘင်္ဂကျမ်း သုတ္တန္တဘာဇနိယ (၁) (၁၇-၁-၂၀၁၅) (အသံမကောင်း)
၁၄၂။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဝိဘင်္ဂကျမ်း သုတ္တန္တဘာဇနိယ (၂) (၁၈-၁-၂၀၁၅) (အသံမကောင်း)
၁၄၃။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဝိဘင်္ဂကျမ်း သုတ္တန္တဘာဇနိယ (၃) (၂၄-၁-၂၀၁၅) (အသံမကောင်း)
၁၄၄။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဝိဘင်္ဂကျမ်း သုတ္တန္တဘာဇနိယ (၄) (၂၅-၁-၂၀၁၅) (အသံမကောင်း)
၁၄၅။ ဓမ္မသည် သဘာဝအလင်းရောင် (၃၀-၁၀-၂၀၁၁) (မန္တလေး)
၁၄၆။ သာသနပူဇာ မြတ်မင်္ဂလာ (၁၈-၁၁-၂၀၁၁) (စစ်ကိုင်း)
၁၄၇။ ဇာတိမြေမှ သာသနာ (၂၆-၆-၂၀၁၂) (စဉ့်ကူး၊ ညောင်ပင်ရွာ)
၁၄၈။ ဥစ္စာဓန ရှာဖွေကြ (၉-၄-၂၀၁၃) (တောင်ကြီး) အသံတိုးသည်
၁၄၉။ ကျေးလက်ဒေသ မြန်မာ့ အမွေအနှစ်များ (၂-၇-၂၀၁၃) (စဉ့်ကူး၊ ညောင်ပင်ရွာ)
၁၅၀။ မတွေးသင့်သော အတွေးများ (၂၀-၇-၂၀၁၃) (ကျောက်ဆည်)
၁၅၁။ ဘဒ္ဒေကသုတ် အနှစ်ချုပ် (၂၉-၇-၂၀၁၃) (မန္တလေး)
၁၅၂။ ဘုရားနှင့်တွေ့အောင်ကြိုးစားပါ (၁-၉-၂၀၁၃) (အမရပူရ)
၁၅၃။ မေးခွန်းထုတ်၍ အဖြေရှာခြင်း (၂-၉-၂၀၁၃) (ကျောက်ဆည်)
၁၅၄။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ သံဝေဂတရားနှင့် အဆုဲးအမ စကား (၈-၉-၂၀၁၃) (မန္တလေး)
၁၅၅။ အရဏဝိဘင်္ဂသုတ် အနှစ်ချုပ် (၁၄-၉-၂၀၁၃) (မန္တလေး)
၁၅၆။ ဗုဒ္ဓအလိုတော်ကျ လူ့ဘဝဖော်ဆောင်ရေး (၂၀-၉-၂၀၁၃) (ပြင်ဦးလွင်)
၁၅၇။ ကြိုတင်ကောင်းမှု ကြိုးစားပြု (၂၆-၉-၂၀၁၃) (မန္တလေး)
၁၅၈။ စိတ်ဖြစ်စဉ်ကို ပဋ္ဌာန်းနည်းဖြင့် လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း (၂၈-၉-၂၀၁၃) (အမရပူရ)
၁၅၉။ ပညာရှင်များသာ သိနိုင်သည့်တရား (၁-၁၀-၂၀၁၃) (မန္တလေး)
၁၆၀။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြည်ညိုဖွယ်ရာ ဂုဏ်ရည်များ (၂-၁၀-၂၀၁၃) (ကျောက်ဆည်)
၁၆၁။ အရှက်တရားနှင့် အကုသိုလ်ကိုတားမြစ်ခြင်း (၁၀-၁၁-၂၀၁၃) (မန္တလေး)
၁၆၂။ ရှင်တိဿ၏ ဝိပဿနာ (၁၁-၁၀-၂၀၁၃) (ပြင်ဦးလွင်)
၁၆၃။ ပရာဘဝသုတ် အနှစ်ချုပ် (၁၂-၁၀-၂၀၁၃) (မန္တလေး)
၁၆၄။ မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့် သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့အမှတ်တရများ (၁၉-၁၀-၂၀၁၃) (ဗဟန်း)
၁၆၅။ စိတ်ဆင်ရိုင်းနှင့် ပညာချွန်း (၂၃-၁၀-၂၀၁၃) (ကျောက်ဆည်)
၁၆၆။ တန်ခိုးရှင်ဖြစ်ရုံနှင့် အသိဉာဏ်မရှိနိုင်ပုံ (၄-၁၁-၂၀၁၃) (မန္တလေး)
၁၆၇။ မြတ်နိဗ္ဗာန်တရားနှင့် ပရိနိဗ္ဗာန် စံဝင်မှုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း (၇-၁၁-၂၀၁၃) (မန္တလေး)
၁၆၈။ ရခဲတဲ့ အခွင့်အရေးသုံးပါး (၈-၁၁-၂၀၁၃) (အမရပူရ)
၁၆၉။ အိပ်မောကျသူနှင့် နိုးကြားသူ (၉-၁၁-၂၀၁၃) (မန္တလေး)
၁၇၀။ နောက်ဆုံးလူ မဖြစ်စေနဲ့ (၁၀-၁၁-၂၀၁၃) (မန္တလေး)
၁၇၁။ သူတော်ကျေးဇူး အထူးသိမြင် (၁၂-၁၁-၂၀၁၃) (မန္တလေး)
၁၇၂။ သာမညဖလနှင့် တန်ဆောင်တိုင်ည၏ အမှတ်တရ (၁၆-၁၁-၂၀၁၃) (ဇဗ္ဗူသီရိ)
၁၇၃။ ပညာရှိ စကားဝိုင်း (၁၆-၁၁-၂၀၁၃) (စမ်းချောင်း)
၁၇၄။ အရှင်အာနန္ဒာ၏ ယုဂနဒ္ဓဘာဝနာ (၁၈-၁၁-၂၀၁၃) (ပဲခူး)
၁၇၅။ အတုန့်အလှည့်နှင့် ကာမနိယာမ၏ သဘောတရားများ (၁၉-၁၁-၂၀၁၃) (ညောင်ဦး)
၁၇၆။ အဆိုးဆုံးဒုက္ခနှင့် အကောင်းဆုံးချမ်းသာ (၂၀-၁၁-၂၀၁၃) (ပုဂံမြို့သစ်)
၁၇၇။ မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်ခြင်း (၂၈-၁၁-၂၀၁၃) (မန္တလေး)
၁၇၈။ ဘဝကိုရွေးချယ်ခြင်းနှင့် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမ (၂၉-၁၁-၂၀၁၃) (မန္တလေး)
၁၇၉။ ရဟန္တာဖြစ်ရန် အကျင့်မှန် (၂-၁၂-၂၀၁၃) (ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်)
၁၈၀။ သူတော်ကောင်းတို့၏ ဂုဏ်ရနံ့ (၃-၁၂-၂၀၁၃) (ပုလိပ်မြို့)
၁၈၁။ အတ္တဟိတနှင့် ပရဟိတ (၅-၁၂-၂၀၁၃)
၁၈၂။ ဆက်ဆံရေး (၆-၁၂-၂၀၁၃) (အမရပူရ)
၁၈၃။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမအရ လူတော် လူကောင်း၏ အရည်အချင်းများ (၇-၁၂-၂၀၁၃)
၁၈၄။ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့် အမြှော်အမြင် (၈-၁၂-၂၀၁၃) (ပခုက္ကူ)
၁၈၅။ မိဘနှင့် သားသမီးကြား မှန်ကန်သောအမြင်များ (၉-၁၂-၂၀၁၃) (ပခုက္ကူ)
၁၈၆။ ဘာဝနာနှစ်ပါး စိတ်ခါန်အား (၁၀-၁၂-၂၀၁၃) (ပခုက္ကူ)
၁၈၇။ အများအကျိုးပြု ကောင်းမှုပါရမီ (၁၁-၁၂-၂၀၁၃) (ဇဗ္ဗူသီရိဗိမ္မာန်)
၁၈၈။ သုံးသပ်ဆင်ခြင် စိတ်ထားပြင် (၁၂-၁၂-၂၀၁၃) (ဇဗ္ဗူသီရိဗိမ္မာန်)
၁၈၉။ စိတ်ကောင်းရှိဖို့က ပထမ (၁၃-၁၂-၂၀၁၃) (ဇဗ္ဗူသီရိဗိမ္မာန်)
၁၉၀။ လူ့အရည်အချင်း (၁၇-၁၂-၂၀၁၃) (ကမာရွတ်)
၁၉၁။ ကိုယ်လုပ်တာ ကိုယ်ရမည် (၁၈-၁၂-၂၀၁၃) (အင်းစိန်)
၁၉၂။ တမလွန်ဘဝအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ (၁၉-၁၂-၂၀၁၃) (ကျိုက်ထို)
၁၉၃။ ကစ္စနဂေါတ္တသုတ္တန် (၂၄-၁၂-၂၀၁၃) (မော်လမြိုင်၊ ဖားအောက်)
၁၉၄။ ဗုဒ္ဓဘာသာပီသသော နေထိုင်ခြင်း (၂၆-၁၂-၂၀၁၃) (ကျိုက်ထို)
၁၉၅။ နှစ်မျိုးလုံးကောင်းတဲ့ မလုပ်တာနဲ့ လုပ်တာ (၃၀-၁၂-၂၀၁၃) (သာကေတ)
၁၉၆။ မဟာသာဝကကြီးတို့၏ စကားဝိုင်း (၁-၁-၂-၁၄)
၁၉၇။ ပရဟိတသမား စိတ်ခွန်အား (၁-၁-၂၀၁၄) (မြောက်ဒဂုံ)
၁၉၈။ အဘယဋ္ဌာနီ ဘေးမဲ့ပြည် (၄-၁-၂၀၁၄) (ပုဂံမြို့သစ်)
၁၉၉။ ပရဟိတဒါနနှင့် မြတ်ပုည (၇-၁-၂၀၁၄) (စစ်ကိုင်း)
၂၀၀။ မိဘရိပ်မှာ အကြာင်နာ (၈-၁-၂၀၁၄) (တောင်ဒဂုံ)
၂၀၁။ သာသနာ့အရိပ်မှာ ပညာ (၉-၁-၂၀၁၄) (တောင်ဒဂုံ)
၂၀၂။ ကာမေသု မိစ္ဆာစာရ (၁၂-၁-၂၀၁၄) (ကမာရွတ်)
၂၀၃။ မိကောင်း ဖကောင်း (၁၆-၁-၂၀၁၄) (ပဲခူး)
၂၀၄။ သားကောင်း သမီးကောင်း (၁၇-၁-၂၀၁၄) (တောင်ဒဂုံ)
၂၀၅။ တရားပွဲမှ ရရှိသော အကျိုးအမြတ် (၁၈-၁-၂၀၁၄) (ကမာရွတ်)
၂၀၆။ သူတို့ဘဝ သူတို့အကြောင်း တစေ့တစောင်း (၂၀-၁-၂၀၁၄) (ထန်းတပင်)
၂၀၇။ လူ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဂါရဝ (၂၁-၁-၂၀၁၄) (ပဲခူး၊ ဇီးကုန်း)
၂၀၈။ မစ ္ဆရိယအဖွင့် (၂၂-၁-၂၀၁၄) (အသံမကောင်းပါ)
၂၀၉။ အနုဗုဒ္ဓသုတ် အနှစ်ချုပ် (၂၃-၁-၂၀၁၄) (ရန်ကင်း)
၂၁၀။ မာနခက်ထန်သူကု ဆုံးမခြင်း (၂၄-၁-၂၀၁၄) (မရန်ကုန်း)
၂၁၁။ သမဂ္ဂနှင့် ဝိဝါဒ (၂၅-၁-၂၀၁၄) (ပဲခူး)
၂၁၂။ ပိဋကတ်စာပေအရ တဖုဿနှင့် ဘလ္လိကတို့ ဘဝအကြောင်း (၂၆-၁-၂၀၁၄)
၂၁၃။ ယုံကြည်မှုနှင့် ကိုးကွယ်မှု (၂၆-၁-၂၀၁၄) (အမှတ် ၁၊ ဆေးတပ်)
၂၁၄။ ဝိသာခ၏ ညီမကို ဆုံးမခြင်း (၂၇-၁-၂၀၁၄) (အသံမကောင်းပါ)
၂၁၅။ ပုထုစဉ်များ၏ ဘဝပန်းချီကား (၂၈-၁-၂၀၁၄) (စမ်းချောင်း)
၂၁၆။ ဉာဏဒဿန၏ အကြောင်းတရားကို ရှာဖွေခြင်း (၂၉-၁-၂၀၁၄) (ဗဟန်း)
၂၁၇။ အပြစ်တင်ခြင်းနှင့် ကဲ့ရဲ့ခြင်း (၂၉-၁-၂၀၁၄) (ပန်းဘဲတန်း)
၂၁၈။ မြတ်ဗုဒ္ဓအပေါ် ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏ ကြည်ညိုမှု (၃၀-၁-၂၀၁၄)
၂၁၉။ ရှင်ပါဟုလမထေရ်မြတ်၏ ဆုံးမစကား (၁-၂-၂၀၁၄) (တာမွေ)(အသံမကောင်း)
၂၂၀။ ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမဖြင့် နေထိုင်ခြင်း (၅-၂-၂၀၁၄)
၂၂၁။ ဒါနအရာ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ မိန့်မှာချက် (၁၁-၂-၂၀၁၄) (ဘုရင့်နောင်)
၂၂၂။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမနှင့် ကျေးလက်ဒေသ (၁၂-၂-၂၀၁၄) (ဝက်လက်မြို့)
၂၂၃။ လောကသားတို့အတွက် ဓမ္မအလင်းရောင် (၁၃-၂-၂၀၁၄) (ဆားလင်းကြီး)
၂၂၄။ မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားဆုံးမသည့် လူသားတို့၏ ကိုယ်ကျင့်တရား (၁၄-၂-၂၀၁၄)
၂၂၅။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အမွေအနှစ်များ (၁၅-၂-၂၀၁၄) (စစ်ကိုင်း)
၂၂၆။ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရန် အခြေခံတရား (၁၆-၂-၂၀၁၄) (တွံတေး)
၂၂၇။ ကံနှင့် ကိလေသာ (၁၇-၂-၂၀၁၄) (လှိုင်)
၂၂၈။ ကျေးဇူးတရားအကြီးမားဆုံးသော ပုဂ္ဂိုလ်သုံးဦး (၁၅-၄-၂၀၁၅) (မြင်းခြံ)
၂၂၉။ စောင့်စည်စည်းမှ ကောင်းမည် (၂၁-၂-၂၀၁၄) (မြင်းခြံ)
၂၃၀။ အာမခံသူမရှိတဲ့တရားများ (၂၂-၂-၂၀၁၄)(နေပြည်တော်၊ ဇဗ္ဗူသီရိ)
၂၃၁။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ စံပြတပည့်များ (၂၃-၂-၂၀၁၄) (နေပြည်တော်၊ တပ်ကုန်း)
၂၃၂။ ဒီဘက်ကမ်းမှ ဟိုဘက်ကမ်းသို့ (၂၄-၂-၂၀၁၄) (နေပြည်တော်၊ တပ်ကုန်း)
၂၃၃။မေးခွန်းထုတ်၍ အဖြေရှာခြင်း (၂၈-၂-၂၀၁၄)
၂၃၄။ အားကိုးရတဲ့ မိတ်ဆွေများ (၁-၃-၂၀၁၄) (အင်းစိန်)
၂၃၅။ အကောင်းဆုံးကို ရွေချယ်ခြင်း (၄-၃-၂၀၁၄) (ဗန်းမော်)
၂၃၆။ အများ၏ ကြည်ညိုလေးစားမှု (၅-၃-၂၀၁၄) (ဗန်းမော်)
၂၃၇။ မြန်မာတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ရှင်ပြုမင်္ဂလာ (၈-၃-၂၀၁၄) (ကျောက်ပန်းတောင်း)
၂၃၈။ ဗုဒ္ဓခေတ်သူဋ္ဌေးကြီးများနှင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုများ (၁၀-၃-၂၀၁၄) (ဇဗ္ဗူသီရိ)
၂၃၉။ အကျိုးကြီးမားသည့် ဆုံစည်းမှုများ (၁၂-၃-၂၀၁၄) (မန္တလေး)
၂၄၀။ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် နိုင်ငံခြားသားများ (၁၃-၃-၂၀၁၄) (မန္တလေး)
၂၄၁။ အနုမောဒနာတရား (၇၄-နှစ်ပြည့် ပါချုပ်ဆရာတော်မွေးနေ့) (၁၅-၃-၂၀၁၄)
၂၄၂။ ဗုဒ္ဓဟု ဝန်ခံခြင်း (၁၆-၃-၂၀၁၄) (မန္တလေး)
၂၄၃။ ပညာဖြင့် အသက်မွေးခြင်း (၁၈-၃-၂၀၁၄) (မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်)
၂၄၄။ အနုမောဒနာတရား (မန ္တလေးရွှေဆိုင်တန်း) (၁၈-၃-၂၀၁၄) (စစ်ကိုင်း)
၂၄၅။ ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်း တရား (၂၇-၃-၂၀၁၄) (မန္တလေး)
၂၄၆။ သုမေဓာထေရီမ၏ သံသရာဘဝများနှင့် ရင်တွင်းစကား (၂၈-၃-၂၀၁၄) (မန ္တလေး)
၂၄၇။ မြန်မာတို့ရဲက မင်္ဂလာပါ (၂၉-၃-၂၀၁၄) (မန္တလေး)
၂၄၈။ ပညာရှိမှသာ သိနိုင်မည့်တရား (၃၀-၃-၂၀၁၄) (မန္တလေး)
၂၄၉။ ပြင်ရခက်တဲ့ အမှား (၃၁-၃-၂၀၁၄) (ကျောက်ဆည်)
၂၅၀။ လူ့ဘဝနှင့် ဓနဥစ္စာ (၃-၄-၃-၂၀၁၄) (မိုးကုတ်)
၂၅၁။ ပုထုစဉ်ဘဝနှင့် အရိယာဘဝ (၄-၄-၂၀၁၄) (ဓမ္မသဟာယ)
၂၅၂။ အရိယာဘဝသို့ရောက်အောင် ကျင့်ဆောင်ခြင်း (၅-၄-၂၀၁၄) (မိုးကုတ်)
၂၅၃။ ၅၂၈ ဖြာ မေတ္တာ ဘာဝနာ (၁၇-၄-၂၀၁၄) (ဓမ္မသာယာယ)
၂၅၄။ အလေးထားခြင်းသုံးမျိုးဖြင့် နေထိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်း (၁၈-၄-၂၀၁၄) (နေပြည်တော်)
၂၅၅။ အရှုးထဲက အမြတ်ရရေး (၂၅-၄-၂၀၁၄) (စဉ့်ကူး)
၂၅၆။ ကံနိယာမ သဘောတရားနှင့် ကံကိုကုန်စေတတ်သော တရား (၁၉-၅-၂၀၁၄)(ပြင်ဦးလွင်) (အသံသင့်)
၂၅၇။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမဖြင့် ချမ်းသာသုခကို ရှာခြင်း (၂၀-၅-၂၀၁၄) (ပြင်ဦးလွင်)
၂၅၈။ အသက်ရှည်သမျှ အကျိုးရှိစေရမည် (၂၅-၅-၂၀၁၄) (ပြင်ဦးလွင်)
၂၅၉။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာမိသားစု ဘဝ (၂၇-၅-၂၀၁၄) (နမ့်ဆန်)
၂၆၀။ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရန် အခြေခံတရား (၂၉-၅-၂၀၁၄) (နမ့်ဆန်)
၂၆၁။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦး၏ ဓမ္မအမြင် (၃၀-၅-၂၀၁၄) (နမ့်ဆန်)
၂၆၂။ ဘဝကို ရှုမြင်သုံးသပ်ခြင်း (၇-၆-၂၀၁၄) (စစ်ကိုင်း)
၂၆၃။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဘဝနှင့် ဝါဆိုလပြည့်နေ့ အမှတ်တရ (၁၁-၆-၂၀၁၄) (ဓမ္မစကြာအခါတော်နေ့) (ဓမ္မသဟာယ)
၂၆၄။ သြဃတရတရဏသုတ် အနှစ်ချုပ် (၁၂-၆-၂၀၁၄) (ရွှေဘို)
၂၆၅။ အဆင့်ခြောက်ဆင့်ဖြင့် သာသနာကွယ်ခြင်း (၃၀-၆-၂၀၁၄) (မန္တလေး)
၂၆၆။ ကိုးကွယ်ခြင်း၏ အမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက် (၁၇-၇-၂၀၁၄) (စစ်ကိုင်း)
၂၆၇။ ဟိတနှင့် သုခ (၁၇-၇-၂၀၁၄) (စဉ့်ကိုင်)
၂၆၈။ မိတ္တပူဇာ မြတ်ဒေသနာ (၁၈-၇-၂၀၁၄) (ဝက်လက်၊ စစ်ကိုင်း)
၂၆၉။ အနုမောဒနာတရား (ရတန်ာပုံဆိုက်ဘာစီးတီး) (၂၉-၇-၂၀၁၄) (ပြင်ဦးလွင်)
၂၇၀။ စိုးရိမ်စိတ်ကို ဖယ်ရှားခြင်း (၂၄-၈-၂၀၁၄) (ဓမ္မသဟာယ)
၂၇၁။ ရောင့်ရဲခြင်း (၂၉-၈-၂၀၁၄) (စစ်ကိုင်း)
၂၇၂။ ဗုဒ္ဓသီဟနာဒသုတ္တံ အနှစ်ချုပ် (၃-၉-၂၀၁၄) (မန္တလေး)
၂၇၃။ သူလိုလူစား တရားမရှိ (၁၄-၉-၂၀၁၄) (မန္တလေး)
၂၇၄။ လူနှင့်စကား သတိထား (၁၇-၉-၂၀၁၄) (မန္တလေး)
၂၇၅။ ချမ်းသာသုခများနှင့် ဓမ္မဝိပဿနာ (၁၈-၉-၂၀၁၄) (မန္တလေး)
၂၇၆။ သူတစ်ပါး အကျိုးဆောင် ကိုာ်အကျိုးအောင် (၂၅-၉-၂၀၁၄) (မန္တလေး)
၂၇၇။ ဇာတကမှ အဏ္ဏဝါဗဟုသုတ (၂၈-၉-၂၀၁၄) (မန္တလေး)
၂၇၈။ ဂါရဝနှင့် အဂါရဝ (၂၉-၉-၂၀၁၄) (စစ်ကိုင်း)
၂၇၉။ စိတ်ဓာတ်ပျော့ညံ့သူနှင့် စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သူ (၃၀-၉-၂၀၁၄) (မုံရွာ)
၂၈၀။ လူကြီးရွေးပွဲ (၁-၁-၂၀၁၄) (မန ္တလေး)
၂၈၁။ အနုမောဒနာတရား (ဦးမောင်မောင်+ဒေါ်နန်းစံဖုန်း)(၁-၁၀-၂၀၁၄)(မုံရွာ)
၂၈၂။ ရွှေသားအစစ် လူ့အနှစ် (၂-၁၀-၂၀၁၄) (အမရပူရ)
၂၈၃။ အမြင့်ဆုံး မျှောမှန်းချက်ရှိသူ (၃-၁၀-၂၀၁၄) (မန္တလေး)
၂၈၄။ မကယ်နိုင်တဲ့ဘေး လွတ်မြောက်ရေး (၄-၁၀-၂၀၁၄) (မန္တလေး)
၂၈၅။ အနုမောဒနာနှင့် ဝိပဿနာတရား (၂၀-၁၀-၂၀၁၄) (မြိတ်မြို့)
၂၈၆။ ရဲစွမ်းသတ္တိရှိသူများ (၂၃-၁၀-၂၀၁၄) (မန္တလေး)
၂၈၇။ ဘေးလေးမျိုးကို ရှောင်၍ စင်ကြယ်အောင်နေထိုင်ခြင်း (၂၄-၁၀-၂၀၁၄) (မန္တလေး)
၂၈၈။ အများကြိုက်တဲ့ အမှားစရိုက်များ (၂၅-၁၀-၂၀၁၄) (မန္တလေး)
၂၈၉။ သူတော်ကောင်းတို့ တောင်းသောဆု (၂၆-၁၀-၂၀၁၄) (မန္တလေး)
၂၉၀။ ကံနှင့် ဘဝ အလုပ်နှင့် လုပ်အားခ (၂၇-၁၀-၂၀၁၄) (မန္တလေး)
၂၉၁။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ (၂၈-၁၀-၂၀၁၄) (၂၈-၁၀-၂၀၁၄) (အမရပူရ)
၂၉၂။ လူတို့၏ ကမစ ္ဆန္ဒ (၂၉-၁၀-၂၀၁၄) (မန္တလေး)
၂၉၃။ မသူတော်တရားကို အနိုင်ယူခြင်း (၃၀-၁၀-၂၀၁၄) (မန္တလေး)
၂၉၄။ အညစ်အကြေးများ ထာဝရသန့်စင်ရေး (၃၁-၁၀-၂၀၁၄) (မန္တလေး)
၂၉၅။ အောင်မြင်ကြီးပွား အကြောင်းများ (၁-၂၀-၂၀၁၄) (မန္တလေး)
၂၉၆။ လူ့အရည်အချင်းများ (၂-၁၁-၂၀၁၄) (မန္တလေး)
၂၉၇။ ပျက်စီးမှုကိုရှောင် ပြည့်စုံအောင်ကြီုးစား (၃-၁၁-၂၀၁၄) (မန္တလေး)
၂၉၈။ ဗုဒ္ဓဘာသာတို့၏ လူနေမှုဘဝ (၄-၁၁-၂၀၁၄) (ညောင်ဦး)
၂၉၉။ သူတော်ကောင်းသည် အားလုံးအတွက်ဖြစ်သည် (၅-၁၁-၂၀၁၄) (ပုဂံ)
၃၀၀။ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင် အမျိုးသမီးများ၏ ဘဝအောင်မြင်ရေး (၆-၁၁-၂၀၁၄) (ညောင်ဦး)
၃၀၁။ နှလုံးသားမှ အဆိုးတရားများကို ဖယ်ရှားခြင်း (၈-၁၁-၂၀၁၄)
၃၀၃။ ထူးချွန်သူ (၁၁-၁၁-၂၀၁၄) (မန္တလေး)
၃၀၄။ အမြတ်ဆုံးကြည်ညိုကိုးကွယ်မှု (၁၇-၁၁-၂၀၁၄) (မန္တလေး)
၃၀၅။ ကောင်းကျိုးဟူသမျှနှင့် အပမာဒ (၂၂-၁၁-၂၀၁၄) (မန္တလေး)
၃၀၆။ ယနေ့ကမ္ဘာနှင့် မေတ္တာတရား (၂၃-၁၁-၂၀၁၄) (မန္တလေး)
၃၀၇။ သူတော်ကောင်းတို့၏ အလှူဒါန (၂၇-၁၁-၂၀၁၄) (အမရပူရ)
၃၀၈။ သောတာပန်နှင့် ဘဝအသိ (၂၈-၁၁-၂၀၁၄) (စစ်ကိုင်း)
၃၀၉။ ဘုံဆွမ်းလောင်းလှူ စိတ်ထားဖြူ (၄-၁၂-၂၀၁၄) (မန္တလေး)
၃၁၀။ အလှူဒါန၏ စွမ်းဆောင်မှုများ (၄-၁၂-၂၀၁၄) (မန္တလေး)
၃၁၁။ ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် လူတို့၏ဂုဏ်ရည် (၆-၁၂-၂၀၁၄) (မလှိုင်မြို့)
၃၁၂။ ပိုင်ဆိုင်မှုနှစ်မျိုး တန်ဖိုးဖြတ်ခြင်း (၇-၁၂-၂၀၁၄) (မလှိုင်မြို့)
၃၁၃။ ကောင်းမှုစွမ်းအားနှင့် လူ့အရည်အချင်းများ (၈-၁၂-၂၀၁၄) (မိတ္ထီလာ)
၃၁၄။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမဖြင့် ဘဝအောင်မြင်မှုကို ရယူခြင်း (၈-၁၂-၂၀၁၄) (မိတ္ထီလာ)
၃၁၅။ နာဂရောပမသုတ်ကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း (၁၁-၁၂-၂၀၁၄) (တောင်ဒဂုံ)
၃၁၆။ အလေးထားခြင်းများနှင့် ဗုဒ္ဓသာသနာ (၁၂-၁၂-၂၀၁၄) (ကျောင်းကုန်းမြို့)
၃၁၇။ စိတ်စွမ်းအားများနှင့် စွမ်းဆောင်ရာဋ္ဌာနများ (၁၄-၁၂-၂၀၁၄) (သင်္ဃန်းကျွန်း)
၃၁၈။ အနဂ္ဂဟိတသုတ်အနှစ်ချုပ် (၁၆-၁၂-၂၀၁၄) (မရမ်းကုန်း)
၃၁၉။ စီပွားဥစ္စာ ရှာဖွေခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်း (၁၈-၁၂-၂၀၁၄) (မင်္ဂလာဈေး)
၃၂၀။ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ (၁၉-၁၂-၂၀၁၄) (မတ္တရာမြို့)
၃၂၁။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး (၂၀-၁၂-၂၀၁၄) (ရွှေဘိုမြို့)
၃၂၂။ လူ့လောကမှ ကောလဟာလများ (၂၁-၁၂-၂၀၁၄)
၃၂၃။ စိတ်ကို သတိဖြင့် စောင့်ကြည့်ရမည် (၂၂-၁၂-၂၀၁၄) (လှိုင်)
၃၂၅။ အချန်မနှောင်းမီ ကြိုးစာခြင်း (၂၃-၁၂-၂၀၁၄) (ပုသိမ်)
၃၂၆။ အောင်နိုင်ခြင်း နှစ်မျိုး (၂၄-၁၂-၂၀၁၄) (ပုသိမ်)
၃၂၇။ ကျက်သရေရှိသော လူ့ဘဝ (၂၅-၁၂-၂၀၁၄) (ပုသိမ်)
၃၂၈။ စရိုက်ဆိုးများကို မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမဖြင့် ဖယ်ရှားခြင်း (၂၆-၁၂-၂၀၁၄) (ပုသိမ်)
၃၂၉။ အချိန်နှင့် ကြိုးစား မြတ်တရား (၂၈-၁၂-၂၀၁၄) (လှိုင်)
၃၃၀။ မဟာသာရောပမသုတ် အနှစ်ချုပ် (၂၁-၅-၂၀၁၄) (မန္တလေး)
၃၃၁။ စိတိဆန္ဒဖြင့် ဘဝကို ပုံဖော်သူများ (၂၇-၁၁-၂၀၁၄) (မန္တလေး)
၃၃၂။ နှစ်သစ်မင်္ဂလာကို မေတ္တာဖြင့် ကြိုဆိုခြင်း (၁-၁-၂၀၁၅) (ရွှေဂုံတိုင်ဆေးရုံ)
၃၃၃။ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတရားကို ရွေးချယ်ခြင်း (၄-၁-၂၀၁၅) (ပြည်)
၃၃၄။ ချစ်ကြည်ရေးနှင့် စည်းလုံးညီညွတ်ရေး (၅-၁-၂၀၁၅) (ပြည်)
၃၃၅။ သံဝေဂဝတ္ထုရှစ်ပါးနှင့် သံဝေဂ (၁၄-၁-၂၀၁၅) (မန္တလေး)
၃၃၆။ ကျေးဇူးရှင်တို့အား ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း (၂၀-၁-၂၀၁၅) (စစ်ကိုင်း)
၃၃၇။ အများအတွက် သံဃာတော်များ၏ ဆောင်ရွက်ချက် (၂၆-၁-၂၀၁၅) (မန္တလေး)
၃၃၈။ သံဃာဖခင်ကြီးများကို လေးစားခြင်း (၂၇-၁-၂၀၁၅) (ဗဟန်း)
၃၃၉။ စွမ်းအားကြီးမား သာသနာ့မျက်လုံးများ (၉-၂-၂၀၁၅) (မန္တလေး)
၃၄၀။ မြတ်ဗုဒ္ဒသာသနာနှှု့် သာမဏေလေးမျိုး (၂၂-၂-၂၀၁၅) (ပြင်ဦးလွင်)
၃၄၁။ အသက်ရှည်လေ ပိုကောင်းလေ (၂၃-၂-၂၀၁၅) (လှည်းကူး) (အသံသင့်)
၃၄၂။ သူတော် သူမြတ် (၂၇-၂-၂၀၁၅) (စစ်ကိုင်း)
၃၄၃။ တပေါင်းလရာသီနှင့် ရှင်ကာဠုဒါယီ (၃-၃-၂၀၁၅) (စစ်ကိုင်း)
၃၄၄။ တပေါင်းလရာသီနှင့် သဲပုံစေတီပွဲတော် (၅-၃-၂၀၁၅) (မန္တလေး)
၃၄၅။ ဒါနအခြေခံ မြတ်နိဗ္ဗာန် (၂၂-၃-၂၀၁၅) (အမရပူရ)
၃၄၆။ စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှု ရသူနှင့် မရသူ (၂-၄-၂၀၁၅) (စစ်ကိုင်း)
၃၄၇။ အများအတွက် သက်တော်ရှည်ခြင်း (၉-၄-၂၀၁၅) (မန္တလေး)
၃၄၈။ သီလပေး (၁၄-၄-၂၀၁၅) (သြင်္ကန်တွင်း၊ ဓမ္မသဟာယ)
၃၄၉။ ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံ ဝိပဿနာ (၁) (၁၅-၄-၂၀၁၅) (သြင်္ကန်တွင်း၊ ဓမ္မသဟာယ)
၃၅၀။ ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံ ဝိပဿနာ (၂) (၁၅-၄-၂၀၁၅) (သြင်္ကန်တွင်း၊ ဓမ္မသဟာယ)
၃၅၁။ သီလပေး (၁၇-၄-၂၀၁၅) (သြင်္ကန်တွင်း၊ ဓမ္မသဟာယ)
၃၅၂။ ဥပုသ်သည်တို့၏ စကားဝိုင်း (၁၆-၄-၂၀၁၅) (ဓမ္မသဟာယ)
၃၅၃။ ရှင်သမိဒ္ဒိနှင့် နတ်မိမယ် (၁၇-၄-၂၀၁၅) (ဓမ္မသဟာယ)
၃၅၄။ ဗြဟ္မာပြည်မှ သာသနာအကြောင်း (၂၈-၄-၂၀၁၅) (ဓမ္မသဟာယ)
၃၅၅။ ဗြဟ္ဗနိမန္တန်ကသုတ် အနှစ်ချုပ် (၁) (၂-၅-၂၀၁၅) (ဓမ္မသဟာယ)
၃၅၆။ ဗြဟ္ဗနိမန္တန်ကသုတ် အနှစ်ချုပ် (၂) (၂-၅-၂၀၁၅) (ဓမ္မသဟာယ)
၃၅၇။ အနာဂတ်၏ လူငယ်မား (၉-၅-၂၀၁၅) (ဓမ္မသဟာယ)
၃၅၈။ မြတ်နိဗ္ဗာန်နှင့် သန ္တိမဂ္ဂလမ်းစဉ် (၃၁-၅-၂၀၁၅) (တံတားဦး)
၃၅၉။ ပါရမီရှင်တို့၏ မြင့်မြတ်သော စိတ်ထား (၁-၆-၂၀၁၅) (တံတားဦး)
၃၆၀။ ဘုရားသာသနာနှင့် သိကြားအကြောင်း (၂၁-၇-၂၀၁၅) (ပြင်ဦးလွင်)
၃၆၁။ အကျဉ်းဆုံးဝိပဿနာနှင့် အမြင့်ဆုံးအကျိုးတရား (၂၃-၇-၂၀၁၅) (မတ္တရာ)
၃၆၂။ ကုသိုလ်မြစ်ကြီးတွေ စိးနေပါစေ (၂၆-၇-၂၀၁၅) (ဓမ္မသဟာရ)
၃၆၃။ လူ့ဘဝမှာ ကျေနပ်စရာများ (၂၈-၇-၂၀၁၅) (ပြင်ဦးလွင်)
၃၆၄။ ဗုဒ္ဓနိယာမတရား အပါးသုံးဆယ် (၃၁-၇-၂၀၁၅) (ဓမ္မသဟာယ)
၃၆၅။ ရောဂါဖြစ်ပွား အကြောင်းရှစ်ပါး (၂-၈-၂၀၁၅) (ပြင်ဦးလွင်)
၃၆၆။ ဤကမ္ဘာမှ အမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလေးဦး၏ ဘဝနိဂုံး (၁၀-၈-၂၀၁၅) (မန္တလေး)
၃၆၇။ အရှုံးပေးသူက အနိုင်ရခြင်း (၁၃-၈-၂၀၁၅) (ပြင်ဦးလွင်)
၃၆၈။ အဘိရူပနန္ဒာ ကိုယ်တိုင်ပြောပြ သူ့ဘဝ သူ့အကြောင်း
၃၆၉။ အမှန်တွေးမှ အမှန်မြင်သည် (၂၈-၈-၂၀၁၅) (ပြင်ဦးလွင်)
၃၇၀။ သက်စွန်းကြိုးစား အာဇာနည်ရဟန်း (၇)ပါး (၂၉-၈-၂၀၁၅) (ဓမ္မသဟာယ)
၃၇၁။ သြင်္ကန်အကြိုနေ့ အလုပ်ပေးတရား (၁၃-၄-၂၀၁) ဓမ္မသဟာယ (၃၄၈နှင့်တူ)
၃၇၂။ သြင်္ကန်အကြတ်နေ့ အလုပ်ပေးတရား (၁၅-၄-၂၀၁) ဓမ္မသဟာယ (၃၄၉နှင့်တူ)
၃၇၃။ သြင်္ကန်အတက်ုနေ့ အလုပ်ပေးတရား (၁၆-၄-၂၀၁) ဓမ္မသဟာယ (၃၅၀နှင့်တူ)
၃၇၄။ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ အလုပ်ပေးတရား (၁၇-၄-၂၀၁၅) (ဓမ္မသဟာယ)
၃၇၅။ အနုမောဒနာ (ဒေါက်တာဦးထွန်းလင်း) (၂၁-၇-၂၀၁၃)
၃၇၆။ သြဝါဒ (ဓမ္မသဟာယသာသနာစင်တာ)(၃၀-၉-၂၀၁၃)
၃၇၇။ အနုမောဒနာ (မန ္တလေးတက္ကသိုလ်)(၁၂-၁၀-၂၀၁၃)
၃၇၈။ အနုမောဒနာ (ဦးလူမြင့်)(၁၁-၁၁-၂၀၁၃)
၃၇၉။ အနုမောဒနာ (ဦးဇော်လင်းထက်)(၂၄-၁၁-၂၀၁၃)
၃၈၁။ အနုမောဒနာ (ဦးဝင်းမောင်)(၉-၁-၂၀၁၄)
၃၈၂။ အနုမောဒနာ (ဒေါ်ထူးထူး)(၂၃-၁-၂၀၁၄)
၃၈၃။ အနုမောဒနာ (ရတနာပန်းကုန်းကျောင်းတိုက်၊ ရွှေပြည်သာ) (၂၄-၁-၂၀၁၄)
၃၈၄။ အနုမောဒနာ (၂၅-၁-၂၀၁၄)
၃၈၅။ အနုမောဒနာ (အောင်ဘာဂီစာသင်တိုက်) (၁-၂-၂၀၁၄)
၃၈၆။ အနုမောဒနာ (ဦးစန်းလွင်) (၁၈-၂-၂၀၁၄)
၃၈၇။ အနုမောဒနာ (ဦးသာနု+ဒေါ်သိန်းထိုက်) (၂၀-၃-၂၀၁၄)
၃၈၈။ အနုမောဒနာ (ရှင်ဇောတိကလင်္ကာရ) (၂၄-၃-၂၀၁၄)
၃၈၉။ အနုမောဒနာ (နေသူရိန် မြေပဲဆီ) (၂၉-၃-၂၀၁၄)
၃၉၀။ အနုမောဒနာ (ဦးစိုး) (၃၀-၃-၂၀၁၄)
၃၉၁။ အနုမောဒနာ (သီးထွန်းသိန်း)(၃၁-၃-၂၀၁၄)
၃၉၂။ အနုမောဒနာ (ဦးအောင်မွန်) (၁၂-၄-၂၀၁၄)
၃၉၃။ အနုမောဒနာ (အပ္ပမာဒတောင်စခန်းရိပ်သာ) (၁၉-၄-၂၀၁၄)
၃၉၄။ အနုမောဒနာ (မြတ်ပွရမီ မိသားစု) (၂၀-၄-၂၀၁၄)
၃၉၅။ အနုမောဒနာ (ဦးအောင်သူမျိုး) (၂၂-၄-၂၀၁၄)
၃၉၆။ အနုမောဒနာ (ဦးမြင့်ရွှေ) (၂၇-၄-၂၀၁၄)
၃၉၇။ အနုမောဒနာ (ဒေါ်နန်းညွန့်ဝေ) (၃၀-၅-၂၀၁၄)
၃၉၈။ အနုမောဒနာ (ဗိုလ်မှုကြီး မြင့်ကြည်) (၄-၆-၂၀၁၄)
၃၉၉။ အနုမောဒနာ (ပင်လုံဆေးရုံ၊ မြောက်ဒဂုံ) (၆-၆-၂၀၁၄)
၄၀၀။ အနုမောဒနာ (ဦးချစ်ထွေး+ဒေါ်ကြင်စိန်)(၁၃-၆-၂၀၁၄)
၄၀၁။ အနုမောဒနာ (ဆရာကြီးဒေါ်ကဉ္စာနာ)(၁၆-၇-၂၀၁၄)
၄၀၂။ အနုမောဒနာ (တယ်လီတောပ်မိုဘိုင်း) (၂၀-၇-၂၀၁၄)
၄၀၃။ အနုမောဒနာ (အမေများအဖွဲ့၊ မန ္တလေး) (၂၁-၇-၂၀၁၄)
၄၀၄။ အနုမောဒနာ (ဦးကျော်သူအောင်) (၂၁-၇-၂၀၁၄)
၄၀၅။ အနုမောဒနာ (နည်းပညာတက္ကသိလ်၊ ရတနာပုံ) (၂၉-၇-၂၀၁၄)
၄၀၆။ အနုမောဒနာ (မေဖူးသက်) (၃၀-၇-၂၀၁၄)
၄၀၇။ အနုမောဒနာ (ရဲသူရ ရန်ရှင်း) (၃-၈-၂၀၁၄)
၄၀၈။ အနုမောဒနာ (ဦးဝင်းလွင်သီး) (၁၆-၈-၂၀၁၄)
၄၀၉။ အနုမောဒနာ (ရတနာ ညီအကိုများအဖွဲ့) (၂၁-၈-၂၀၁၄)
၄၁၀။ အနုမောဒနာ (မမြမြအေး) (၂၉-၈-၂၀၁၄)
၄၁၁။ အနုမောဒနာ (ဦးသောင်းလွင် + ဒေါ်နုနုရီ) (၃၁-၈-၂၀၁၄)
၄၁၂။ အနုမောဒနာ (ရဲမှုးကြီး အောင်နိုင်သူ) (၁၇-၉-၂၀၁၄)
၄၁၃။ အနုမောဒနာ (ဦးလှအောင်) (၂၁-၉-၂၀၁၄)
၄၁၄။ အနုမောဒနာ (ဦးမောင်မောင် + ဒေါ်နန်းစ့ဖုန်း) (၁-၁၀-၂၀၁၄)
၄၁၅။ အနုမောဒနာ (မတ္တရာမြို့ ကုသိုလ်ရှင်အပေါင်း)(၂-၁၀-၂၀၁၄)
၄၁၆။ အနုမောဒနာ (စံတဝတ်ကျေးရွာ) (၁၉-၁-၂၀၁၄)
၄၁၇။ အနုမောဒနာ (ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေး အောက်မြန်မာပြည်)(၂၂-၁၀-၂၀၁၄)
၄၁၈။ အနုမောဒနာ (ဒေါ်လှလှမြင့်)(၂၃-၁၀-၂၀၁၄)
၄၁၉။ အနုမောဒနာ (ဦးသက်နိုင်) (၂၅-၁၀-၂၀၁၄)
၄၂၀။ အနုမောဒနာ (ဦးတင်အောင်) (၂၆-၁၀-၂၀၁၄)
၄၂၁။ အနုမောဒနာ (ဒေါ်မေကြည်) (၂၈-၁၀-၂၀၁၄)
၄၂၂။ အနုမောဒနာ (ဦးသိုက်ညွန့်) (၃-၁၁-၂၀၁၄)
၄၂၃။ အနုမောဒနာ (ဋ္ဌေးမြင့်မော် ကျောက်မျက်) (၁၃-၁၁-၂၀၁၄)
၄၂၄။ အနုမောဒနာ (ဦးကြည်မြင့်) (၆-၁၂-၂၀၁၄)
၄၂၅။ သြဝါဒစကား (အမှတ်-၉၉ ခြေမြန်တပ်မ ဋ္ဌာနချုပ်) (၈-၁၂-၂၀၁၄)
၄၂၆။ အနုမောဒနာ (အမှတ်-၃၃ ခြေမြန်တပ်မဋ္ဌာနချုပ်) (၂၁-၁၂-၂၀၁၄)
၄၂၇။ အနုမောဒနာ (အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဋ္ဌာနချုပ်) (၂၅-၁၂-၂၀၁၄)
၄၂၈။ အနုမောဒနာ (ဝင်းကိယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း) (၃၀-၁-၂၀၁၅)
၄၂၉။ အနုမောဒနာ (မင်းသီဟမုန့်မျိုးစုံ) (၂၈-၂-၂၀၁၅) (စစ်ကိုင်း)
၄၃၀။ အနုမောဒနာ (နိုင်မြန်မာကားဘော်ဒီ) (၂-၃-၂၀၁၅)
၄၃၁။ အနုမောဒနာ (ဦးနေအောင်) (၃-၃-၂၀၁၅)
၄၃၂။ အနုမောဒနာ (၇၅-နှစ်ပြည့် ဆရာတော်မွေးနေ့) (၄-၃-၂၀၁၅)
၄၃၃။ အနုမောဒနာ (၇၅-နှစ်ပြည့် ဆရာတော်မွေးနေ့) (၄-၃-၂၀၁၅)
၄၃၄။ အနုမောဒနာ (မဟာသန္တာအေးကျောင်းတိုက်) (၂၈-၃-၂၀၁၅)
၄၃၅။ အနုမောဒနာ (ညောင်ပင်ရွာ) (၃၀-၃-၂၀၁၅)
၄၃၆။ အနုမောဒနာ (ရဲမှုး ရဲသူရရန်ရှင်း) (၃၀-၃-၂၀၁၅)
၄၃၇။ အနုမောဒနာ (ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသာအေး) (၉-၄-၂၀၁၅)
၄၃၈။ အနုမောဒနာ (ဦးအံ့မောင်+ဒေါ်ချယ်ရီ) (၁၁-၄-၂၀၁၅)
၄၃၉။ အနုမောဒနာ (ဒေါ်တင်မုံ) (၁၂-၄-၂၀၁၅)
၄၄၀။ အနုမောဒနာ (ဓမ္မသဟာယစင်တာ ၄ နှစ်ပြည့်) (၁၉-၄-၂၀၁၅)
၄၅၅။ အနုမောဒနာ (၁-၇-၂၀၁၅)
၄၅၆။ သာသနာ ၂၆၀၀ အကြောင်း (၃-၇-၂၀၁၅) စစ်ကိုင်း
၄၅၇။ အနုမောဒနာ (၅-၇-၂၀၁၅)
၄၅၉။ အနုမောဒနာ တရား (၁၂-၇-၂၀၁၅) (ဓမ္မသဟာယ၊ ပြင်ဦးလွင်)
၄၆၀။ အနုမောဒနာ တရား (၁၇-၇-၂၀၁၅) (ရတနာပုံဆိုက်ဘာစီးတီး)
၄၆၁။ အနုမောဒနာ တရား (၁၉-၇-၂၀၁၅) (ဦးကုသလ၊ ဓမ္မသဟာယ)
၄၆၂။ အနုမောဒနာ တရား (၂၃-၇-၂၀၁၅) (မတ္တရာမြို့)
၄၆၃။ အနုမောဒနာ တရား (၂၆-၇-၂၀၁၅) (ဓမ္မသဟာယ၊ ပြင်ဦးလွင်)
၄၆၄။ အနုမောဒနာ တရား (၂၉-၇-၂၀၁၅) (ဓမ္မသဟာယ၊ ပြင်ဦးလွင်)
၄၆၅။ အနုမောဒနာ တရား (၁-၈-၂၀၁၅) (ဓမ္မသဟာယ၊ ပြင်ဦးလွင်)
၄၆၆။ ဝါဆိုဝါကပ် အနုမောဒနာ (၁-၈-၂၀၁၅) (ဓမ္မသဟာယ၊ ပြင်ဦးလွင်)
၄၆၇။ ဝါဆိုဝါကပ်သြဝါဒ (၅-၈-၂၀၁၅)(စစ်ကိုင်း)
၄၆၈။ အနုမောဒနာ တရား (၆-၈-၂၀၁၅)(စစ်ကိုင်း)
၄၆၉။ အနုမောဒနာ တရား (၆-၈-၂၀၁၅)(စစ်ကိုင်း)
၄၇၀။ အနုမောဒနာ တရား (၆-၈-၂၀၁၅)(မန္တလေး)
၄၇၁။ အနုမောဒနာ တရား (၇-၈-၂၀၁၅)(စစ်ကိုင်း)
၄၇၂။ အနုမောဒနာ တရား(ဇော် အထူးဆေးကုခန်း) (၈-၈-၂၀၁၅)စစ်ကိုင်း
၄၇၃။ အနန္တဂုဏပူဇာ (စစ်ကိုင်း)(၈-၈-၂၀၁၅)
၄၇၄။ ဓမ္မဒီပသင်တန်း သြဝါဒ တရား (၈-၈-၂၀၁၅) မန္တလေး
၄၇၅။ အနုမောဒနာ တရား (၉-၈-၂၀၁၅) (ဓမ္မသဟာယ၊ ပြင်ဦးလွင်)
၄၇၆။ အနုမောဒနာ တရား (၉-၈-၂၀၁၅) (ဓမ္မသဟာယ၊ ပြင်ဦးလွင်)
၄၇၇။ အနုမောဒနာ တရား (၁၀-၈-၂၀၁၅) (ဓမ္မသဟာယ၊ ပြင်ဦးလွင်)
၄၇၈။ အနုမောဒနာ တရား (၁၂-၈-၂၀၁၅) (ဓမ္မသဟာယ၊ ပြင်ဦးလွင်)
၄၇၉။ အနုမောဒနာ တရား (၁၅-၈-၂၀၁၅) (ဓမ္မသဟာယ၊ ပြင်ဦးလွင်)
၄၈၀။ လူကဲခတ်နည်း (၁၇-၆-၂၀၁၅) (အောင်ပန်းမြို့)
၄၈၁။ ဘဝအတွင်းမှ အမှောင်နှင့် အလင်းများ (၁၈-၆-၂၀၁၅) (ကေလောမြို့)
၄၈၂။ လွတ်မြောက်သည့်စိတ်ဓာတ်နှင် အကျင့်မြတ် (၁၉-၆-၂၀၁၅) (ညောင်ရွှေ)
၄၈၃။ ချမ်းသာသုခနှင့် ဘဝအခွင့်အရေး (၂၀-၆-၂၀၁၅) (ညောင်ရွှေ)
၄၈၄။ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အမှီကောင်းများ (၂၁-၆-၂၀၁၅)(ညောင်ရွှေ)
၄၈၅။ စည်းလုံးညီညာ ပြည်သာယာ (၁) (၂၂-၆-၂၀၁၅) (တောင်ကြီး)
၄၈၆။ စည်းလုံးညီညာ ပြည်သာယာ (၂) (၂၃-၆-၂၀၁၅) (တောင်ကြီး)
၄၈၇။ စည်းလုံးညီညာ ပြည်သာယာ (၃) (၂၄-၆-၂၀၁၅) (တောင်ကြီး)
DVD MP3 တရားတော်များ ( ၆-၁ )
၁။ ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်း စကားများ (၁)
၂။ ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်း စကားများ (၂)
၃။ ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်း စကားများ (၃)
၄။ ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်း စကားများ (၄)
၅။ ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်း စကားများ (၅)
၆။ ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်း စကားများ (၆)
၇။ ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်း စကားများ (၇)
၈။ ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်း စကားများ (၈)
၉။ ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်း စကားများ (၉)
၁၀။ ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်း စကားများ (၁၀)
၁၁။ ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်း စကားများ (၁၁)
၁၂။ ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်း စကားများ (၁၂)
၁၃။ ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်း စကားများ (၁၃)
၁၄။ ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်း စကားများ (၁၄)
၁၅။ ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်း စကားများ (၁၅)
၁၆။ ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်း စကားများ (၁၆)
၁၇။ ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်း စကားများ (၁၇)
၁၈။ ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်း စကားများ (၁၈)
၁၉။ ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်း စကားများ (၁၉)
၂၀။ ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်း စကားများ (၂၀)
၂၁။ ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်း စကားများ (၂၁)
၂၂။ ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်း စကားများ (၂၂)
၂၃။ ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်း စကားများ (၂၃)
၂၄။ ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်း စကားများ (၂၄)
၂၅။ ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်း စကားများ (၂၅)
၂၆။ ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်း စကားများ (၂၆)
၂၇။ ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်း စကားများ (၂၇)
၂၈။ ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်း စကားများ (၂၈)
၂၉။ ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်း စကားများ (၂၉)
၃၀။ ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်း စကားများ (၃၀)
၃၁။ ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်း စကားများ (၃၁)
မိလိန္ဒမင်းနှင့်ရှင်နာဂသေနတို့၏ ဗုဒ္ဓဝါဒရေးရာ အချေအတင်ပြောဆိုချက်များ
အပိုင်း (၁) ၀၉-၀၆-၂၀၁၆
အပိုင်း (၂) ၁၀-၀၆-၂၀၁၆
အပိုင်း (၃) ၁၁-၀၆-၂၀၁၆
အပိုင်း (၄) ၁၂-၀၆-၂၀၁၆
အပိုင်း (၅) ၁၃-၀၆-၂၀၁၆
အပိုင်း (၆) ၁၄-၀၆-၂၀၁၆
အပိုင်း (၇) ၁၅-၀၆-၂၀၁၆
အပိုင်း (၈) ၁၆-၀၆-၂၀၁၆
အပိုင်း (၉) ၁၇-၀၆-၂၀၁၆
အပိုင်း (၁၀) ၀၁-၀၇-၂၀၁၆
အပိုင်း (၁၁) ၀၂-၀၇-၂၀၁၆
အပိုင်း (၁၂) ၀၄-၀၇-၂၀၁၆
အပိုင်း (၁၃) ၀၅-၀၇-၂၀၁၆
အပိုင်း (၁၄) ၂၂-၁၁-၂၀၁၆
အပိုင်း (၁၅) ၁၂-၁၂-၂၀၁၆
အပိုင်း (၁၇) ၁၆-၁၂-၂၀၁၆
အပိုင်း (၁၈) ၂၁-၁၂-၂၀၁၆
အပိုင်း (၂၀) ၂၃-၁၂-၂၀၁၆
အပိုင်း (၂၁) ၂၈-၁၂-၂၀၁၆
အပိုင်း (၂၂) ၃၀-၁၂-၂၀၁၆
အပိုင်း (၂၃) ၁၂-၀၁-၂၀၁၇
အပိုင်း (၂၅) ၂၂-၀၁-၂၀၁၇
၁။ ဘဝအသွင်ကို ဓမ္မအမြင်ဖြင့် ရှုမြင်ခြင်း
၂။ ဘဝခရီးဝယ် ရွေးချယ်ရမဲ့လမ်း
၃။ လက်တွေ့ဘဝကို ပဋ္ဌာန်းဖြင့် လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း
၅။ အရှင်အာနန္ဒာ၏ အလွမ်းစကားနှင့် မြတ်ဗုဒ္ဓဆုံးမစကား
၆။ ဓာတုဝိဘင်္ဂဂသုတ်၊ အနှစ်ချုပ် တရားတော်
၈။ စိတ်ဓါတ်ခွန်အား မြှင့်တင်ထား
၉။ မနုဿဓမ္မနှင့် ဥတ္တလိမနုဿဓမ္ဓ
၁၁။ မြတ်ဗုဒ္ဓဒေသနာနှင့် ယနေ့ကမ္ဘာ
၁၂။ အလောင်းတော်သုမေဓာ၏ ဘဝအပေါ် ရှုမြင်သုံးသပ်ချက်
၁၄။ မြတ်သောဥစ္စာ စုဆောင်းပါ
၁၅။ ယနေ့လူသားများရဲ့ မနက်ဖြန်ကမ္ဘာ
၁၆။ ရန်ကင်းမှ ရန်ရှင်မည်
၁၇။ နှစ်ဦးကာလ ဓမ္မလက်ဆောင်
၁၈။ တရားမြင်မှ ဘုရားမြင်မည်
၁၉။ ကိုးကွယ်ရာ အမှန်တရား
၂၀။ အကောင်းဆုံးသော ညတည
၂၂။ အကျင့်မှန်မှ နိဗ္ဗာန်ရ
၂၃။ ရှင်သာရိပုတ္တရာ မထေရ်မြတ်၏ နှစ်မတော်တို့၏ ဓမ္မအမြင်များ
၂၅။ သမ္မာ ပတ္တိ သုတ္တန်
၂၆။ ပမာဒနှင့် အပ္ပမာဒ
၂၈။ ဒကာရင်းကို ကယ်တင်ခြင်း
၂၉။ ဂတိကလ၏ ဘဝတစိတ် သမိုင်းပုံရိပ်
၃၀။ ဓမ္မသည်သာ ကိုးကွယ်ရာ
၃၁။ လူ့ပြည်ရောက် နတ်တမန်အကြောင်း
၃၃။ သူတော်ကောင်းဥစ္စာ ခုနှစ်ဖြာ
၃၄။ အဘိဓမ္မာ နေ့မြတ်အခါ
၃၅။ တေမိကုမ္မာရ ဇာတ်တော် (၁)
၃၆။ တေမိကုမ္မာရ ဇာတ်တော် (၂)
၃၇။ တေမိကုမ္မာရ ဇာတ်တော် (၃)
၃၈။ နိဗ္ဗာန်တံခါးကြီး ဖွင့်တော်မူပါ (၁)
၃၉။ နိဗ္ဗာန်တံခါးကြီး ဖွင့်တော်မူပါ (၂)
၄၀။ နိဗ္ဗာန်တံခါးကြီး ဖွင့်တော်မူပါ (၃)
၄၁။ နိဗ္ဗာန်တံခါးကြီး ဖွင့်တော်မူပါ (၄)
၄၂။ ကမ္ဘာဦးက လူသားမျာအကြောင်း ၁၂-၇-၂၀၀၈
၄၅။ ထာဝရတွေးထားရမဲ့ ဘဝအရေးများ
၅၀။ မှန်ကန်သော ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု
၅၂။ သြဃလေးဖြာ သံသရာ
၂။ သမ္မုသစ္စာ ပရမတ္တသစ္စာ
၃။ ရုပ်တရားများနှင့် ရုပ်၏ အကြောင်းတရား
၄။ ရုပ်တရားကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအကြောင်း
၅။ စိတ်၏ သဘာဝ
၆။ စိတ်ကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း အကြောင်း
၇။ စိတ်၏ အညစ်ကြေးများ
၈။ စိတ်ကို အမှီပြု အင်အားစုများ
၉။ စိတ်ဖြူစင်မှု အင်အားစုများ(၁)
၁၀။ စိတ်ဖြူစင်မှု အင်အားစုများ(၂)
၁၁။ ပညာမဲ့ သဒ္ဒါတရား(၁)
၁၂။ ပညာမဲ့ သဒ္ဒါတရား(၂)
၁၃။ ဘဝ၏ ဝန်ထုပ်ပိုများ
၁၄။ ၂၅၉၇ကြိမ် ဓမ္မစြင်္ကာ အခါ
၁၅။ လောဘနှင့် အလောဘ
၁၇။ ဆင်းရဲတွင်းမှ လွတ်ကင်းခြင်း
၁၈။ သောတပန်၏ ပုံရိပ်လွှာ
၁။ အမတာဘိသေက-တရားတော် (မန္တလေး)
၂။ ဂတိကာလသုတ္တန် (အမရပူရ)
၃။ နိဗ္ဗာန်တံခါးဖွင့်မှအပါယ်တံခါးပိတ်မယ် (မင်္ဂလာဈေး)ဓမ္မာရုံ
၄။ ရင်ထဲကဓမ္မစွမ်းအားများ (၁) (မုံရွာ)
၅။ ရင်ထဲကဓမ္မစွမ်းအားများ (၂) (မုံရွာ)
၆။ အနှိုင်းမဲ့ချမ်းသာ (၁) (မုံရွာ)
၇။ အနှိုင်းမဲ့ချမ်းသာ (၂) (မုံရွာ)
၈။ ဟိုဘက်ကမ်းကငြိမ်းအေးတယ် (မန္တလေး)
၉။ ဓမ္မအသိဖြင့်အကျိုးရှိရှိနေမည် (ကြည့်မြင်တိုင်)
၁၀။ ကျေးဇူးတရားတော် (စမ်းချောင်း)
၁၁။ အသိတရားရှိသူတို.၏စိတ်နေသဘောထား (ကံမြင့်)
၁၂။ သာသနာပြုစွမ်းအားစု (မုံရွာ)
၁။ တောင်ပို့ထဲကရတနာ (ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း) (၈-၁၂-၂၀၀၇)
၂။ ပါရမီပုံရိပ် အမှတ်တံခါး (ကြည့်မြင်တိုင်)
၃။ စွမ်းအားပြည့်စိတ်နှင့် စွမ်းအားမဲ့စိတ် (ကမာရွတ်)
၄။ အစွမ်းတန်ခိုးများနှင့်သာသနာ (ဗဟိုလမ်း)
၅။ ကိုယ်ကျင့်တရားသည်သာလူ့အဆင့်အတန်း (နတ်ချောင်းတာမွေ)
၆။ သူတော်ကောင်းတို့၏စိတ်နေသဘောထား (အင်းစိန်အရှေ့ဂျို့ကုန်း)
၇။ စိတ္တေန၊ နိယတော၊ လောကော (ဘာဝနာလမ်း၊ စမ်းချောင်း)
၈။ အင်အားရှိမှအခက်အခဲကိုကျော်လွှားနိုင်မည် (လှိုင်သာယာ)
၁၀၊ လူဖြစ်ကျိုးနပ်ပါစေ (မတ္တရာမြို့)
၁၁။ ယနေ့ကမ္ဘာကြီး၏နောက်ဆုံးနေ့များ (ကိုးဘွဲ့ရကျောင်း)
၁၂။ လောဘနှင့်အလောဘ (ဆူးလေစေတီတော်)
၁၃။ သာသနာ့ဗိမ္မာန် ဓမ္မာရုံ (ရန်ကင်း)
၁။ မေတ္တာနှလုံးအစဉ်သုံး (မင်္ဂလာဗျူဟာ)
၃။ ရောဂါကုစားစိတ်စွမ်းအား (ကံမြင့်)
၄။ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ (မင်္ဂလာတောင်ညွန်.)
၅။ ကံကြမ္မာ၏ရုပ်ပုံလွှာများ (လှိုင်)
၆။ ကိုယ်ခံစွမ်းအား (မင်္ဂလာဒုံ)
၇။ ဘောဂတဏှာ (စမ်းချောင်း)
၈။ အနှစ်တစ်ရာနှင့်တစ်နေ.တာ (စမ်းချောင်း)
၉။ ကောင်းတာကိုသာရွေးချယ်ကြပါ (အလုံ)
၁၀။ နေတံ မမ (ဒဂုံမြောက်)
၁၁။ နုစသော၊ နစအညော (မလွှကုန်း)
၁၂။ တို.မှာခေါင်းဆောင်ရှိတယ် (အင်းစိန်)
၁၃။ သဗ္ဗေ ဓမ္မာ အနတ္တော (ကြည်.မြင်တိုင်)
၁၄။ လွတ်မြောက်တဲ.စိတ် (ဗိုလ်တထောင်)
၁။ ဘဝအရေး စိတ်အေးရလေအောင် (သူဌေးလမ်း)
၂။ အတ္တာဟိ အတ္တနော နာထော (ရန်ကင်း)
၃။ သဘာဝ၏ လှည့်စားမှုများ (ရန်ကင်း)
၄။ အားပေးစကား (ဥက္ကံမြို့)
၅။ မတူတာတွေကို အတူထားနိုင်ခြင်း (ဥက္ကံမြို့)
၆။ IIA အဘိဓမ္မာ သြဝါဒ ကထာ
၇။ အဘိဓမ္မာနှင့် ဝိပဿနာ ဓမ္မဗျူဟာ (ပဲခူး)
၈။ အဘိဓမ္မာသင်တန်းသူ၊ သင်တန်းသား အမေးအဖြေ-၁ (ဓမ္မဗျူဟာ)
၈။ အဘိဓမ္မာသင်တန်းသူ၊ သင်တန်းသား အမေးအဖြေ-၂ (ဓမ္မဗျူဟာ)
၁။ စိတ်ဖြစ်ပုံကို လေ့လာခြင်း (၁) ၂၁-၃-၂၀၀၉
၂။ စိတ်ဖြစ်ပုံကို လေ့လာခြင်း (၂) ၂၂-၃-၂၀၀၉
၃။ စိတ်အာရုံများနှင့် ဆောင်ရွက်မှု ကိစ္စများ ၂၃-၃-၂၀၀၉
၄။ စိတ်ဖြစ်စဉ်ကို လေ့လာခြင်းအကြောင်း(၁) ၂၄-၃-၂၀၀၉
၅။ စိတ်ဖြစ်စဉ်ကို လေ့လာခြင်းအကြောင်း(၂) ၂၅-၃-၂၀၀၉
၆။ စိတ်ကို အာရုံနှင့် လေ့ကျင့်ခြင်း ၂၇-၃-၂၀၀၉
၇။ သတ္တဝါတို့၏ (၃၁) ဘုံအကြောင်း ၂၈-၃-၂၀၀၉
၈။ ဘဝနိဂုံး သေဆုံးခြင်းအကြောင်း ၂၉-၃-၂၀၀၉
၉။ ဘဝသစ်၌ ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်း ၃၀-၃-၂၀၀၉
၁၀။ နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုခြင်းအကြောင်း ၃၁-၃-၂၀၀၉
၁၁။ သာသနာတော်ရှည်ကြာတည်တန့်ရေး (မုံရွာ) ၁-၃-၂၀၀၉
၁၂။ စိတ်နေစိတ်ထား (မုံရွာ) ၂-၃-၂၀၀၉
၁၃။ သေချာသောလမ်းက လျှောက်လှမ်းပါ (ကျောက်မြောင်း) ၂၀-၃-၂၀၀၉
၁၄။ ကံကိုဖယ်ရှား ကံတရား ၂၆-၃-၂၀၀၉
၁၅။ အနမ တဂ္ဂ သံသရာ (ကြည့်မြင်တိုင်) ၁-၄-၂၀၀၉
၁၆။ ဥပုသ်စောင့်ခြင်း အဓိပ္ပါယ် (ကြည့်မြင်တိုင်) ၂-၄-၂၀၀၉
၁။ ဝိဇ္ဇာနှင့်အဝိဇ္ဇာ (၂၂-၅-၂၀၀၉)
၂။ ကမ္ဘာဦးကလူသားများ (၇-၇-၂၀၀၈)
၃။ အနုမောဒနာ (၂၀-၁၂-၂၀၀၈)
၅။ နှလုံးသား၏ငြိမ်းအေးမှု (၁၁-၃-၂၀၀၉)ှု
၆။ အခွင့်ကောင်း (၁၉-၃-၂၀၀၉)
၇။ ဓမ္မလမ်းမှလျှောက်လှမ်းပါ (၁၅-၄-၂၀၀၉)
၈။ သာသနာပြု မြတ်ကောင်းမှု (၁၉-၄-၂၀၀၉)
၉။ အထင်နှင့်အမြင် (၂၀-၄-၂၀၀၉)
၁၁။ စံနမူနာယူရမည့်သူလိုလူ (၁၉-၅-၂၀၀၉)
၁၂။ ကိုးကွယ်မှု၏အဓိပ္ပါယ် (၂၃-၅-၂၀၀၉)
၁၃။ အမှန်သိခြင်းမသိခြင်း (၂၄-၅-၂၀၀၉)
၁၄။ စံထားရမည့်ကိုယ်ကျင့်တရားရှိသူများ (၃-၈-၂၀၀၉)
၁၅။ အကြောင်းကင်းပြတ် အငြိမ်းဓါတ် (၆-၈-၂၀၀၉)
၁၇။ ၁၂-နှစ်ကြာ အဖြေရှာခဲ့ရသော မေးခွန်းများ(၂-၉-၂၀၀၉)
၁၈။ ဒိဠိသမ္ပန္နပုဂ္ဂိုလ် (၃-၉-၂၀၀၉)
၁။ မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်အနှစ်ချုပ် (၂၈-၉-၂၀၀၉)
၅။ ဓမ္မာနုပဿနာ (၀၂-၁၀-၂၀၀၉)
၆။ ပုညသဟာရများ (၀၅-၁၀-၂၀၀၉)
၇။ ပါရမီရှင်တို့၏ဘဝ (၁) (၀၆-၁၀-၂၀၀၉)
၈။ ပါရမီရှင်တို့၏ဘဝ (၂) (၀၇-၁၀-၂၀၀၉)
၉။ ဓမ္မစာရီနှင့်အဓမ္မစာရီ (၀၄-၁၀-၂၀၀၉)
၁၀။ သံယောဇဉ် (၀၃-၁၀-၂၀၀၉)
၁၁။ သူ့အကြောင်းကိုယ့်အကြောင်း (၀၉-၁၀-၂၀၀၉)
၁၂။ ဓမ္မဒိန္နာ၏တရားအဖြေများ (၀၅-၁၁-၂၀၀၉)
၁၃။ မိတ်ကောင်းဆွေကောင်း (၀၆-၁၁-၂၀၀၉)
၁၄။ သီလနှင့်သုတ (၁၀-၁၀-၂၀၀၉)
၁၅။ စုဆောင်းခြင်းနှစ်ရပ် (၃၀-၁၀-၂၀၀၉)
၁၆။ လောက၏အဆုံးသို့ရောက်ရှိခြင်း (၁-၁၁-၂၀၀၉)
၁၇။ ဗျာကတနှင့်အဗျာကတ (၂၁-၁၂-၂၀၀၉)
၁၈။ ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တို့၏နှလုံးအိမ် (၃-၁၁-၂၀၀၉)
၁။ အဖြူလား အမဲလား
၂။ ယမမင်း၏ ဆန္ဒ
၄။ ဆုတောင်းပြည့်ဝ မြတ်ဓမ္မ
၅။ အမြတ်ဆုံး ဘာဝနာ
၆။ အာဒိတ္တသုတ်ကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း
၈။ စိတ်၏ ထွက်ပေါက်
၁၀။ အကောင်းဆုံး လက်ဆောင်
၁၁။ မာနတရားကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း
၁၂။ ဥပါဒါနပစ္စယော ဘဝေါ
၁၃။ ဖြစ်နိုင်တာနှင့် မဖြစ်နိုင်တာ
၁၄။ သညာသိနှင့် ပညာသိ
၁၇။ သောတာပန်၏ ဘဝပုံရိပ်လွှာ
၁၈။ ဓမ္မဗျူဟာအသင်း၏ အမေး-အဖြေ
၁။ မိတ်ကောင်းဆွေကောင်း (၆-၁၁-၂၀၀၉)
၂။ စိတ်၏အတွေးများ (၄-၂-၂၀၀၉)
၃။ မင်္ဂလသုတ်အနှစ်ချုပ် (၄-၁-၂၀၁၀)
၄။ နန္ဒီဒုက္ခဿမူလံ (၅-၁-၂၀၁၀)
၅။ ဒဿနဝိသုဒ (၆-၁-၂၀၁၀)
၆။ ခုခံစွမ်းအား (၈-၁-၂၀၁၀)
၇။ ရဲစွမ်းသတ္တိရှိသူမှအောင်နိုင်ခြင်း (၁၀-၁-၂၀၁၀)
၈။ ဝိယတော ဇာယတေ သောကော (၁၁-၁-၂၀၁၀)
၉။ အကောင်းဆုံးချမ်းသာရအောင်ရှာ (၁၂-၁-၂၀၁၀)
၁၀။ က္ကနြ္ဒိယဘာဝနာမြတ်ဒေသနာ (၁၇-၁-၂၀၁၀)
၁၁။ သေဝိတဗ္ဗနှင့် အသေဝိတဗ္ဗ (၁၈-၁-၂၀၁၀)
၁၂။ ဒေဝဒဟသုတ် အနှစ်ချုပ် (၂၅-၁-၂၀၁၀)
၁၃။ ရသတဏှာ (၁-၂-၂၀၁၀)
၁၄။ တမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးများအရေး (၂-၂-၂၀၁၀)
၁၅။ စိတ်ထားမြင့်မြတ်သူ အကြောင်း (၃-၂-၂၀၁၀)
၁၆။ အကြောင်းဆုံမှအကောင်းဆုံမည် (၄-၂-၂၀၁၀)
၁၇။ သံသရာခရီးသွား အမှားမလုပ်မိစေနှင့် (၇-၂-၂၀၁၀)
၁၈။ အဆိုးဆုံးကိုဖယ်ရှားနိုင်မှအကောင်းဆုံးရမည် (၈-၂-၂၀၁၀)
၁၉။ အထင်မှားအမြင်မှား (၉-၂-၂၀၁၀)
၂၀။ ကမ္မဠာန်းအလုပ်နှင့်အိပ်ငိုက်ခြင်း (၁၅-၂-၂၀၁၀)
၂၁။ ပါရမီကုသိုလ် (၁၉-၂-၂၀၁၀)
၂၂။ တရားသိလျှက်အကျင့်ခက် (၂၁-၂-၂၀၁၀)
၂၃။ အနာမဲ့သူ ရှင်ဗာကူ (၂၂-၂-၂၀၁၀)
၁၁။ အဘိဓမ္မာ နှင့် ဝိပဿနာ
၁၂။ လူတိုင်းအတွက် ဝိပဿနာ
၁၄။ သမထပုဗ္ဗင်္ဂမ ဝိပဿနာ
၁၇။ မေတ္တ သုတ်အနှစ်ချုပ်
၁၉။ ဒေဝဒဟသုတ် အနှစ်ချုပ်
၂။ သတိမကွာ အသိပညာဖြင့်နေထိုင်ခြင်း
၈။ သင်္ခတ နှင့် အသင်္ခတ
၁၄။ ဆန္ဒောဝါဒ သုတ္တန်
၁၆။ ဘဝခရီးသွား အနည်းအများ
၁၈။ ရေစက်ချ အနုမောဒနာ
၁။ ဓမ္မအမေးနှင့်အဖြေများ – ၁
၂။ ဓမ္မအမေးနှင့်အဖြေများ – ၂
၃။ ဓမ္မအမေးနှင့်အဖြေများ – ၃
၅။ သွားဘက်ဆိုင်ရာ မဟာပုရိသ လက္ခဏာတော်
၆။ မုံရွာကျောင်း ရေစက်ချအနုမောဒနာ
၈။ သတိမထားက လှည့်စားခံရခြင်း
၁၁။ စစ်ကိုင်းမြို့မဟာသုဗောဓာရ ကျောင်းဆောင်သစ်ရေစက်ချအနုမောဒနာ
၁။ အခက်ခဲကျော်လွှား လူခွန်အား
၂။ ပညာဝိမုတ္တ ရဟန္တာ
၆။ ရန်ကုန်မြို့ သဒ္ဓမ္မရံသီ ယောဂီများဝါဆိုသင်္ကန်းကပ် အနုမောဒနာ
၇။ မုံရွာမြို့ သဒ္ဓမ္မဇောတိကသုဗောဓာရုံကျောင်းအတွင်းတွင်ကျောင်းဆောင်ရေစက်ချအနုမောဒနာ
၈။ တိပိဋက ပူဇော်ပွဲ သြဝါဒတရား
၉။ စစ်ကိုင်းမြို့ မဟာသုဗောဓာရုံ(၅၂)နှစ်ပြည့်ကျောင်းတိုက်နေ့ သြဝါဒတရား
၁၀။ ကွန်ပြူတာ တက္ကသိုလ် ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ် အနုမောဒနာ
၁၁။ ရတနာသုတ် အနှစ်ချုပ်-၁
၁၂။ ရတနာသုတ် အနှစ်ချုပ်-၂
၁၄။ အဝိဇ္ဇာနှင့် ဝိဇ္ဇာ
၈။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုပဌာန်းနည်းဖြင့်လေ့လာခြင်း (၁)
၉။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုပဌာန်းနည်းဖြင့်လေ့လာခြင်း (၂)
၁၀။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုပဌာန်းနည်းဖြင့်လေ့လာခြင်း (၃)
၁၁။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုပဌာန်းနည်းဖြင့်လေ့လာခြင်း (၄)
၁၂။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုပဌာန်းနည်းဖြင့်လေ့လာခြင်း (၅)
၂၄။ ပါရမီရှင်တို.ဘဝ (၁)
၂၅။ ပါရမီရှင်တို.ဘဝ (၂)
ဟောကြားတော်မူအပ်သောတရားတော်များ (အတွဲ – ??? )
(၁) မှ (၁၈) ပဌာန်းမြတ်ဒေသနာ အပိုင်း(၁)မှ အပိုင်း(၁၈) ထိ
(၁၉) မှ (၃၁) ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကို ပဌာန်းနည်းဖြင့် လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း
( အပိုင်း(၁) မှ အပိုင်း(၁၃) ထိ)
(၃၂) လက်တွေ့ဘဝကို ပဋ္ဌာန်းနည်းဖြင့် လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း
(၃၃) လက်တွေ့ဘဝကို ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နည်းဖြင့် လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း
(၃၄) ဘဝနှင့် ဆက်စပ်၍ ပဌာန်းမြတ်ဒေသနာကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း(၁)
(၃၅) ဘဝနှင့် ဆက်စပ်၍ ပဌာန်းမြတ်ဒေသနာကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း (၂)
(၃၆) စိတ်ဖြစ်စဉ်ကို ပဋ္ဌာန်းနည်းဖြင့် လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း (၂၈.၉.၁၃)
(၃၇) ဓမ္မသင်္ဂဏီကျမ်း (၁)
(၃၈) ဓမ္မသင်္ဂဏီကျမ်း (၂)
(၃၉) ဓမ္မသင်္ဂဏီကျမ်း၊ (၃)
(၄၀) ဓမ္မသင်္ဂဏီကျမ်း (၄)
(၄၁) ဓမ္မသင်္ဂဏီကျမ်း (၅)
(၄၂) ဃဋိကာရ၏ ဘဝတစ်စိတ် သမိုင်းပုံရိပ်များ
(၄၄) စိတ္တေန နိယတောလေလာကော
(၄၅) အနှစ်တစ်ရာနှင့် တစ်နေ့တာ
(၄၆) လက်တွေ့ဘဝနှင့် ဒုက္ခသမုဒယ(အမရပူရ)
(၄၇) အတ္တဒီပနှင့် တဒင်္ဂအငြိမ်း(၁၆.၈.၁၂)
(၄၉) အဘိဓမ္မာဆိုင်ရာသင်တန်း (၁၄.၆.၂၀ဝ၉)
(၅၀) ဝိဘင်းကျမ်းသင်တန်း အပိုင်း(၁)
(၅၁) ဝိဘင်းကျမ်းသင်တန်း အပိုင်း(၂)
(၅၂) ဝိဘင်းကျမ်းသင်တန်း အပိုင်း(၃)
(၅၃) ဝိဘင်းကျမ်းသင်တန်း အပိုင်း(၄)
(၅၄) ဝိဘင်းကျမ်းသင်တန်း အပိုင်း(၅)
(၅၅) ဝိဘင်းကျမ်းသင်တန်း အပိုင်း(၆)
(၅၆) ဝိဘင်းကျမ်းသင်တန်း အပိုင်း(၇)
(၅၇) ဝိဘင်းကျမ်းသင်တန်း အပိုင်း(၈)
(၅၉) ဓမ္မအစစ်ဖြင့် ဘဝအနှစ်ကိုရယူခြင်း(၁၅.၁၂.၁၂)
(၆၀) ဝိမာန်ရှင်တို့၏ ပြန်ကြားချက်များ (၁)(၂.၂.၁၄)
(၆၁) ဝိမာန်ရှင်တို့၏ ပြန်ကြားချက်များ၊ (၂)(၃.၂.၁၄)
(၆၂) ဝိမာန်ရှင်တို့၏ ပြန်ကြားချက်များ၊ (၃)(၄.၂.၁၄)
(၆၃) ကဆုန်လပြည့် ဗျာဒိတ်တော်ပွဲနှင့် အမှတ်တရ ပုံရိပ်များ (၁)(၁၂.၅.၁၄)
(၆၄) ကဆုန်လပြည့် ဗျာဒိတ်တော်ပွဲနှင့် အမှတ်တရ ပုံရိပ်များ (၂) (၁၃.၅.၁၄)
(၆၅) ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ (၁)(၂.၃.၁၄)
(၆၆) ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ (၂)(၃.၃.၁၄)
(၆၇) ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ၊ (၃)(၁၇.၃.၁၄)
(၆၈) ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ၊ (၄)(၁၈.၃.၁၄)
(၆၉) ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ၊ (၅)(၁၉.၃.၁၄)
(၇ဝ) ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ (၆)(၂၀.၃.၁၄)
(၇၁) ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ (၇)(၂၂.၃.၁၄)
(၇၂) ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ (၈)(၂၃.၃.၁၄)
(၇၃) ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ (၉)(၂၄.၃.၁၄)
(၇၄) ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ (၁၀)(၂၅.၃.၁၄)
(၇၅) ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ (၁၁)(၂၆.၃.၁၄)
(၇၆) သံသရာနှင့် နိဗ္ဗာန် (၁)(၄.၄.၂၀၁၅)
(၇၇) သံသရာနှင့် နိဗ္ဗာန် (၂)(၅.၄.၂၀၁၅)
(၇၈) ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်၊ ဝိဘင်္ဂကျမ်း သုတ္တန္တဘာဇနိယ (၁)
(ဂျ၉) ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်၊ ဝိဘင်္ဂကျမ်း သုတ္တန္တဘာဇနိယ (၂)
(၈၀) ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်၊ ဝိဘင်္ဂကျမ်း သုတ္တန္တဘာဇနိယ (၃)
(၈၁) ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်၊ ဝိဘင်္ဂကျမ်း သုတ္တန္တဘာဇနိယ (၄)
(၈၂) ဓမ္မသည်သာ ဘဝ၏အလင်းရောင် (၃၀.၁၀.၁၁)
(၈၃) သာသနပူဇာ၊ မြတ်မင်္ဂလာ (၁၈.၁၁.၁၁)
(၈၄) ဥစ္စာဓန ရှာဖွေကြ (၉.၄.၁၃)
(၈၅) ကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်း ပညာ (၁၁.၃.၁၃)
(၈၆) ကျေးလက်ဒေသ မြန်မာ့အမွေအနှစ်များ (၂.၇.၁၃)
(၈၇) မတွေးသင့်သော အတွေးများ (၂၀.၇.၁၃)
(၈၈) ဘုရားနှင့်တွေ့အောင် ကြိုးစားပါ (၁၉.၁၃)
(၈၉) မေးခွန်းထုတ်၍ အဖြေရှာခြင်း (၂-၉-၁၃)
(၉၀) ကြိုတင်ကောင်းမှု ကြိုးစားပြု (၂၆.၉.၁၃)
(၉၁) ပညာရှင်များသာ သိနိုင်သည့်တရား (၁.၁၀.၁၃)
(၉၂) အရှက်တရားနှင့် အကုသိုလ်ကိုတားခြင်း (၁၀.၁၀.၁၃)
(၉၃) စိတ်ဆင်ရိုင်းနှင့် ပညာချွန်း (၂၃.၁၀.၁၃)
(၉၄) တန်ခိုးရှင် ဖြစ်ရုံဖြင့် အသိဉာဏ် မရှိနိုင်ပုံ (၄.၁၁.၁၃)
(၉၅) ရခဲတဲ့ အခွင့်အရေး သုံးပါး (၈.၁၁.၁၃)
(၉၆) အိပ်မောကျသူနှင့် နိုးကြားသူ (၉.၁၁.၁၃)
(၉၇) နောက်ဆုံးလူ မဖြစ်စေနဲ့ (၁၀.၁၁.၁၃)
(၉၈) သူတော်ကျေးဇူး အထူးသိမြင် (၁၂.၁၁.၁၃)
(၉၉) သာမညဖလနှင့် တန်ဆောင်တိုင်ည၏အမှတ်တရ (၁၆.၁၁.၁၃)
(၁၀ဝ) ပညာရှိစကားဝိုင်း (၁၆.၁၁.၁၃)
(၁၀၁) အရှင်အာနန္ဒာ၏ ယုဂနဒ္ဓဘာဝနာ
(၁၀၂) အတုန့်အလှည့်နှင့် ကာမနိယာမ သဘောတရား
(၁၀၃) အဆိုးဆုံးဒုက္ခ နှင့် အကောင်းဆုံး ချမ်းသာ (၂၀.၁၁.၁၃)
(၁၀၄) မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်ခြင်း (၂၈.၁၁.၁၃)
(၁၀၅) သူတော်ကောင်းတို့၏ ဂုဏ်ရနံ့(၃.၁၂.၁၃)
(၁၀၆) အတ္တဟိတ နှင့် ပရဟိတ (၅.၁၂.၁၃)
(၁၀၇) ဆက်ဆံရေး၊ (၆.၁၂.၁၃)
(၁၀၈) စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့် အမြော်အမြင် (၈.၁၂.၁၃)
(၁၀၉) မိဘနှင့် သားသမီးအကြား မှန်ကန်သော အမြင်များ (၉.၁၂.၁၃)
(၁၁၀) အများအကျိုးပြု ကောင်းမှုပါရမီ (၁၁.၁၂.၁၃)
(၁၁၁) သုံးသပ် ဆင်ခြင် စိတ်ထားပြင် (၁၂.၁၂.၁၃)
(၁၁၂) လူ့အရည်အချင်း (၁၇.၁၂.၁၃)
(၁၁၃) ကိုယ်လုပ်တာ ကိုယ်ရမည် (၁၈.၁၂.၁၃)
(၁၁၄) ဗုဒ္ဓဘာသာ ပီသသော နေထိုင်ခြင်း (၂၆.၁၂.၁၃)
(၁၁၅) နှစ်မျိုးလုံးကောင်းတဲ့ မလုပ်တာနဲ့လုပ်တာ (၃၁.၁၂.၁၃)
(၁၁၆) မဟာသာဝကကြီးတို့၏ စကားဝိုင်း (၁.၁.၁၄)
(၁၁၇) ပရဟိတသမား စိတ်ခွန်အား (၁.၁.၁၄)
(၁၁၈) အဘယဌာနီ ဘေးမဲ့ပြည် (၄.၁.၁၄)
(၁၁၉) ပရဟိတဒါန နှင့် မြတ်ပုည (၇.၁.၁၄)
(၁၂၀) မိဘအရိပ်မှာ အကြင်နာ (၈.၁.၁၄)
(၁၂၁) သာသနာ့အရိပ်မှာ ပညာ (၉.၁.၁၄)
(၁၂၂) မိကောင်း ဖကောင်း (၁၆.၁.၁၄)
(၁၂၃) သားကောင်း သမီးကောင်း (၁၇.၁.၁၄)
(၁၂၄) တရားပွဲမှ ရရှိသော အကျိုးးအမြတ် (၁၈.၁.၁၄)
(၁၂၅) သူတို့ဘဝ သူတို့အကြောင်း တစေ့တစောင်း (၂၀.၁.၁၄)
(၁၂၆) လူ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဂါရဝတရား (၂၁.၁.၁၄)
(၁၂၇) မစ္ဆရိယအဖွင့် (၂၂.၁.၁၄)
(၁၂၈) မာနခက်ထန်သူကို ဆုံးမခြင်း (၂၄.၁.၁၄)
(၁၂၉) သမဂ္ဂနှင့် ဝိဝါဒ (၂၅.၁.၁၄)
(၁၃၀) ပိဋကစာပေအရ တဖုဿနှင့် ဘလ္လိကတို့ဘဝအကြောင်း (၂၆.၁.၁၄)
(၁၃၁) ယုံကြည်မှုနှင့် ကိုးကွယ်မှု (၂၆.၁.၁၄)
(၁၃၂) ဝိသာခါ၏ ညီမကို ဆုံးမခြင်း (၂၇.၁.၁၄)
(၁၃၃) ပုထုစဉ်များ၏ ဘဝပန်းချီကား (၂၈.၁.၁၄)
(၁၃၄) ဉာဏဒဿန၏ အကြောင်းတရားကို ရှာဖွေခြင်း (၂၉.၁.၁၄)
(၁၃၅) အပြစ်တင်ခြင်းနှင့် ကဲ့ရဲ့ခြင်း (၂၉.၁.၁၄)
(၁၃၆) ရှင်ပါကုလမထေရ်မြတ်၏ ဆုံးမစကား (၁.၂.၁၄)
(၁၃၇) ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရန် အခြေခံတရား (၁၆.၂.၁၄)
(၁၃၈) ကံ နှင့် ကိလေသာ (၁၇.၂.၁၄)
(၁၃၉) ကျေးဇူးတရား အကြီးမားဆုံးသော ပုဂ္ဂိုလ်သုံးဦး (၂၀.၂.၁၄)
(၁၄၀) စောင့်စည်းမှ ကောင်းမည် (၂၁.၂.၁၄)
(၁၄၁) အာမခံသူမရှိတဲ့ တရားများ (၂၂.၂.၁၄)
(၁၄၂) ဒီဘက်ကမ်းမှ ဟိုဘက်ကမ်းသို့ (၂၄.၂.၁၄)
(၁၄၃) မေးခွန်းထုတ်၍ အဖြေရှာခြင်း (၂၈.၂.၁၄)
(၁၄၄) အားကိုးရတဲ့ မိတ်ဆွေများ (၁.၃.၁၄)
(၁၄၅) အကောင်းဆုံးကို ရွေးချယ်ခြင်း (၄.၃.၁၄)
(၁၄၆) အများ၏ကြည်ညိုလေးစားမှု (၀၅.၀၃.၁၄)
(၁၄၇) မြန်မာတို့၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ရှင်ပြုမင်္ဂလာ (၈.၃.၁၄)
(၁၄၈) ဗုဒ္ဓခေတ်သူဌေးကြီးများနှင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု (၁၀.၃.၁၄)
(၁၄၉) အကျိုးကြီးမားသည့် ဆုံဆည်းမှုများ (၁၂.၃.၁၄)
(၁၅၀) ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် နိုင်ငံခြားသားများ (၁၃.၃.၁၄)
(၁၅၁) အနုမောဒနာ (၇၄) နှစ်ပြည့် ပါချုပ်ဆရာတော်၏မွေးနေ့) (၁၅.၃.၁၄)
(၁၅၂) ပညာဖြင့်အသက်မွေးခြင်း (၁၈.၃.၁၄)
(၁၅၃) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ရင်တွင်းစကား (၂၇.၃.၁၄)
(၁၅၄) သုမေဓာထေရီမ၏သံသရာဘဝများနှင့်ရင်တွင်းစကား (၂၈.၃.၁၄)
(၁၅၅) မြန်မာတို့ရဲ့မင်္ဂလာပါ (၂၉.၃.၁၄)
(၁၅၆) ပညာရှိမှသာသိနိုင်သည့်တရား (၃၀.၃.၁၄)
(၁၅၇) ပြင်ရခက်တဲ့အမှား (၃၁.၃.၁၄)
(၁၅၈) လူ့ဘဝနှင့်ဓနဥစ္စာ (၃.၄.၁၄)
(၁၅၉) ပုထုဇဉ်ဘဝနှင့် အရိယာဘဝ (၄.၄.၁၄)
(၁၆၁) အလေးထားခြင်း သုံးမျိုးဖြင့်နေထိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်း (၁၈.၄.၁၄)
(၁၆၂) အရှုံးထဲကအမြတ်ရရေး (၂၅.၄.၁၄)
(၁၆၃) ကမ္မနိယာမသဘောတရားနှင့် ကံကိုကုန်စေတတ်သောတရား ( ၁၉.၅.၁၄)
(၁၆၄) အသက်ရှည်သမျှအကျိုးရှိစေရမည် (၂၅.၅.၁၄)
(၁၆၅) ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရန် အခြေခံတရား (၂၉.၅.၁၄)
(၁၆၆) ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦး၏ဓမ္မအမြင် (၃၀.၅.၁၄)
(၁၆၇) ဘဝကိုရှုမြင်သုံးသပ်ခြင်း (၇.၆.၁၄)
(၁၆၈) အဆင့်ခြောက်ဆင့်ဖြင့်သာသနာကွယ်ခြင်း (၃၀.၆.၁၄)
(၁၆၉) ကိုးကွယ်ခြင်း၏အမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက် (၁၇.၇.၁၄)
(၁၇၀) ဟိတနှင့်သုခ (၁၇.၇.၁၄)
(၁၇၁) မိတ္တပူဇာ မြတ်ဒေသနာ (၁၈.၇.၁၄)
(၁၇၂) စိုးရိမ်စိတ်ကိုဖယ်ရှားခြင်း (၂၄.၈.၁၄)
(၁၇၃) ရောင့်ရဲခြင်း (၂၉.၈.၁၄)
(၁၇၄) သူလိုလူစား တရားမရှိ (၁၄.၉၁၄)
(၁၇၅) လူနှင့်စကားသတိထား (၁၄.၉.၁၄)
(၁၇၆) သူတစ်ပါးအကျိုးဆောင် ကိုယ်ကျိုးအောင် (၂၅.၉.၁၄)
(၁၇၇) ဇတကမှ အဏ္ဏဝါ ဗဟုသုတ (၂၈.၉.၁၄)
(၁၇၈) ဂါရဝ နှင့် အဂါရဝ (၂၉.၉.၁၄)
(၁၇၉) စိတ်ဓာတ်ပျော့ညံ့သူနှင့် စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သူ (၃၀.၉.၁၄)
(၁၈၀) လူကြီးရွေးပွဲ (၁.၁၀.၁၄)
(၁၈၁) ရွှေသားအစစ် လူ့အနှစ် (၂.၁၀.၁၄)
(၁၈၂) အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်ရှိသူ (၃.၁၀.၁၄)
(၁၈၃) မကယ်နိုင်တဲ့ဘေး လွတ်မြောက်ရေး (၄.၁၀.၁၄)
(၁၈၄) ရဲစွမ်းသတ္တိရှိသူများ (၂၃.၁၀.၁၄)
(၁၈၅) ဘေးလေးမျိုးကိုရှောင်ရျ် စင်ကြယ်အောင်နေထိုင်ခြင်း (၂၄.၁၀.၁၄)
(၁၈၆) အများကြိုက်တဲ့အမှားစရိုက်များ (၂၅.၁၀.၁၄)
(၁၈၇) သူတော်ကောင်းတို့တောင်းသောဆု (၂၆.၁၀.၁၄)
(၁၈၈) ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏တာဝန်ဝတ္တရားများ (၂၈.၁၀.၁၄)
(၁၈၉) လူတို့၏ကာမစ္ဆန္ဒ (၂၉.၁၀.၁၄)
(၁၉၀) မသူတော်တရားကို အနိုင်ယူခြင်း (၃၀.၁၀.၁၄)
(၁၉၁) အညစ်အကြေးများ ထာဝရသန့်စင်ရေး (၃၀.၁၀.၁၄)
(၁၉၂) အောင်မြင် ကြီးပွား အကြောင်းများ (၁.၁၁.၁၄)
(၁၉၃) လူ့ အရည်အချင်းများ (၂.၁၁.၁၄)
(၁၉၄) ပျက်စီးမှုကိုရှောင် ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစား (၃.၁၁.၁၄)
(၁၉၅) ဗုဒ္ဓဘာသာတို့၏ လူနေမှုဘဝ (၄.၁၁.၁၄)
(၁၉၆) သူတော်ကောင်းသည် အားလုံးအတွက်ဖြစ်သည် (၅.၁၁.၁၄)
(၁၉၇) ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီးများ၏ ဘဝအောင်မြင်ရေး (၆.၁၁.၁၄)
(၁၉၈) နှလုံးသားမှ အဆိုးတရားများကို ဖယ်ရှားခြင်း (၈.၁၁.၁၄)
(၁၉၉) အပြစ်ခပ်သိမ်း လွတ်ငြိမ်းရေး (၁၀.၁၁.၁၄)
(၂၀၀) ထူးချွန်သူ (၁၁.၁၁.၁၄)
(၂၀၁) အမြတ်ဆုံး ကြည်ညိုကိုးကွယ်မှု (၁၇.၁၁.၁၄)
(၂၀၂) ကောင်းကျိုးဟူသမျှနှင့် အပ္ပမာဒ (၂၂.၁၁.၁၄)
(၂၀၃) ယနေ့ကမ္ဘာနှင့် မေတ္တာတရား (၂၃.၁၁.၁၄)
(၂၀၄) သူတော်ကောင်းတို့၏ အလှူဒါန (၂၇.၁၁.၁၄)
(၂၀၅) ဘုံဆွမ်းလောင်းလှူ စိတ်ထားဖြူ (၄.၁၂.၁၄)
(၂၀၆) အလှူဒါန၏ စွမ်းဆောင်မှုများ (၅.၁၂.၁၄)
(၂၀၇) ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် လူတို့၏ဂုဏ်ရည် (၆.၁၂.၁၄)
(၂၀၈) ပိုင်ဆိုင်မှု နှစ်မျိုး တန်ဖိုးဖြတ်ခြင်း (၇.၁၂.၁၄)
(၂၀၉) ကောင်းမှုစွမ်းအားနှင့် လူ့အရည်အချင်းများ (၈.၁၂.၁၄)
(၂၁၀) အလေးထားခြင်းများနှင့် ဗုဒ္ဓသာသနာ (၁၂.၁၂.၁၄)
(၂၁၁) စိတ်စွမ်းအားများနှင့် စွမ်းဆောင်ရာဋ္ဌာနများ (၁၄.၁၂.၁၄)
(၂၁၂) စီးပွား ဥစ္စာရှာဖွေခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်း (၁၈.၁၂.၁၄)
(၂၁၃) လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ (၁၉.၁၂.၁၄)
(၂၁၄) ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေး (၂၀.၂.၁၄)
(၂၁၅) လူ့လောကမှ ကောလဟာလများ (၂၁.၁၂.၁၄)
(၂၁၆) ဓမ္မတာဝန် (၂၃.၁၂.၁၄)
(၂၁၇) အချိန်မနှောင်းမီ ကြိုးစားခြင်း (၂၃.၁၂.၁၄)
(၂၁၈) အောင်နိုင်ခြင်းနှစ်မျိုး (၂၄.၁၂.၁၄)
(၂၁၉) အချိန်နှင့် ကြိုးစား မြတ်တရား (၂၈.၁၂.၁၄)
(၂၂၀) နှစ်သစ်မင်္ဂလာကို မေတ္တာဖြင့်ကြိုဆိုခြင်း (၁.၁.၁၅)(SSC)
(၂၂၁) ကိုးကွယ်ရာဘာသာတရားကို ရွေးချယ်ခြင်း (၄.၁.၁၅)
(၂၂၂) ချစ်ကြည်ရေး နှင့် စည်းလုံးညီညွတ်ရေး (၅.၁.၁၅)
(၂၂၃) သံဝေဂ ဝတ္ထုရှစ်ပါးနှင့် သံဝေဂ (၁၄.၁.၁၅)
(၂၂၄) ကျေးဇူးရှင်တို့အား ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း (၂၀.၁.၁၅)
(၂၂၅) စွမ်းအားကြီးမား သာသနာမျက်လုံးများ (၉.၂.၁၅)
(၂၂၆) အသက်ရှည်လေ ပိုကောင်းလေ (၂၃.၂.၁၅)
(၂၂၇ သူတော်သူမြတ် (၂၇.၂.၁၄)
(၂၂၈) တပေါင်းလရာသီနှင့် ရှင်ကာဠုဒါယီ (၃.၃.၁၅)
(၂၂၉) တပေါင်းလရာသီနှင့် သဲပုံစေတီပွဲတော် (၅.၃.၁၅)
(၂၃၀) ဒါနအခြေခံ မြတ်နိဗ္ဗန် (၂၂.၃.၁၅)
(၂၃၁) စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှု ရသူနှင့် မရသူ (၂.၄.၁၅)
(၂၃၂) အများအတွက် သက်တော်ရှည်ခြင်း (၉.၄.၁၅)
(၂၃၃) ဥပုသ်သည်တို့၏ စကားဝိုင်း (၁၆.၄.၁၅)
(၂၃၄) ရှင်သမိဒ္ဓိနှင့် နတ်မိမယ် (၁၇.၄.၁၅)
(၂၃၅) မြင့်မြတ်သူတို့၏ သစ္စာတရား (၇.၁၁.၁၄)
(၂၃၆) လူကဲခတ်နည်း (၁၇.၆.၁၅)
(၂၃၇) ဘဝအတွင်းမှ အမှောင်နှင့်အလင်းများ (၁၈.၆.၁၅)
(၂၃၈) လွတ်မြောက်သည့်စိတ်ဓာတ်နှင့်အကျင့်မြတ် (၁၉.၆.၁၅)
(၂၃၉) ချမ်းသာသုခနှင့် ဘဝအခွင့်အရေး (၂၀.၆.၁၅)
(၂၄၀) ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အမှီကောင်းများ (၂၁.၆.၁၅)
(၂၄၁) စည်းလုံးညီညာပြည်သာယာ (၁) (၂၁.၆.၁၅)
(၂၄၂) စည်းလုံးညီညာပြည်သာယာ (၂) (၂၂.၆.၁၅)
(၂၄၃) စည်းလုံးညီညာပြည်သာယာ (၃) (၂၃.၆.၁၅)
(၂၄၄) စစ်ကိုင်းသာသနာ (၂၆၀၀)(၃.၇.၁၅)
(၂၄၅) သြဝါဒကထာ (၇၅ နှစ်ပြည့်ဆရာတော်မွေးနေ ့)(၄.၃.၁၅)
(၂၄၆) အနုမောဒနာ (၇၅ နှစ်ပြည့်ဆရာတော်မွေးနေ ့)(၄.၃.၁၅)
(၂၄၇) အနာဂတ်၏ လူငယ်များ (၉.၅.၁၅)
(၂၄၈) မြတ်နိဗ္ဗာန်နှင့် သန္တိမဂ္ဂလမ်းစဉ် (၃၁.၅.၁၅)
(၂၄၉) ပါရမီရှင်တို့၏ မြင့်မြတ်သောစိတ်ထား (၁.၆.၁၅) (မဟာသမယနေ့)
(၂၅၀) ဘုရားသာသနာနှင့် သိကြား (၂၁.၇.၁၅)
(၂၅၁) အကျဉ်းဆုံးဝိပဿနာနှင့် အမြင့်ဆုံးအကျိုးတရား (၂၃.၇.၁၅)
(၂၅၂) ကုသိုလ်မြစ်ကြီးတွေ စီးနေပါစေ (၂၆.၇.၁၅)
(၂၅၃) လူ့ဘဝမှာ ကျေနပ်စရာများ (၂၈.၇.၁၅)
(၂၅၄) ဗုဒ္ဓနိယာမတရား အပါးသုံးဆယ် (၃၁.၇.၁၅)
(၂၅၅) ရောဂါဖြစ်ပွား အကြောင်းရှစ်ပါး (၂.၈.၁၅)
(၂၅၆) ဤကမ္ဘာမှ အမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီး (၄)ဦး၏ ဘဝနိဂုံး (၁၀.၈.၁၅)
(၂၅၇) အရှုံးပေးသူက အနိုင်ရခြင်း (၁၃.၈.၁၅)
(၂၅၈) အဘိရူပနန္ဒာ ကိုယ်တိုင်ပြောပြ သူ့ဘ၀ သူ ့အကြောင်း (၂၄.၈.၁၅)
(၂၅၉) အမှန်တွေးမှ အမှန်မြင်သည် (၂၈.၈.၁၅)
(၂၆၀) သက်စွန့်ကြိုးစား အာဇာနည်ရဟန်း (၇) ပါး (၂၉.၈.၁၅)
(၂၆၁) ကံအကြောင်းတရားနှင့် ဆုတောင်းစကား (၂၀.၉.၁၅)
(၂၆၂) ထာဝရစင်ကြယ်ရေး (မန္တလေးတက္ကသိုလ်) (၂၁.၉.၁၅)
(၂၆၃) ရွေးချယ်မှု မှန်ကန်ခြင်းနှင့် ခေါင်းဆောင်၏အရည်အချင်း (၂၃.၉.၁၅)
(၂၆၄) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၁) (၁.၁၂.၁၅)
(၂၆၅) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၂) (၂.၁၂.၁၅)
(၂၆၆) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၃) (၃.၁၂.၁၅)
(၂၆၇) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၄) (၄.၁၂.၁၅)
(၂၆၈) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၅) (၅.၁၂.၁၅)
(၂၆၉) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၆) (၇.၁၂.၁၅)
(၂၇၀) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၇) (၈.၁၂.၁၅)
(၂၇၁) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၈) (၉.၁၂.၁၅)
(၂၇၂) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၉) (၁၀.၁၂.၁၅)
(၂၇၃) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၁၀) (၁၁.၁၂.၁၅)
(၂၇၄) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၁၁) (၁၂.၁၂.၁၅)
(၂၇၅) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၁၂) (၁၃.၁၂.၁၅)
(၂၇၆) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၁၃) (၁၄.၁၂.၁၅)
(၂၇၇) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၁၄) (၁၅.၁၂.၁၅)
(၂၇၈) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၁၅) (၁၆.၁၂.၁၅)
(၂၇၉) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၁၆) (၁၇.၁၂.၁၅)
(၂၈၀) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၁၇) (၁၈.၁၂.၁၅)
(၂၈၁) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၁၈) (၁၉.၁၂.၁၅)
(၂၈၂) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၁၉) (၂၂.၁၂.၁၅)
(၂၈၃) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၂၀) (၂၄.၁၂.၁၅)
(၂၈၄) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၂၁) (၂၇.၁၂.၁၅)
(၂၈၅) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၂၂) (၂၈.၁၂.၁၅)
(၂၈၆) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၂၃) (၂၉.၁၂.၁၅)
(၂၈၇) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၂၄) (၃၀.၁၂.၁၅)
(၂၈၈) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၂၅) (၁.၁.၁၆)
(၂၈၉) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၂၆) (၃.၁.၁၆)
(၂၉၀) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၂၇) (၅.၁.၁၆)
(၂၉၁) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၂၈) (၆.၁.၁၆)
(၂၉၂) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၂၉) (၈.၁.၁၆)
(၂၉၃) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၃၀) (၉.၁.၁၆)
(၂၉၄) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၃၁) (၁၀.၁.၁၆)
(၂၉၅) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၃၂) (၂၆.၁.၁၆)
(၂၉၆) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၃၃) (၂၇.၁.၁၆)
(၂၉၇) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၃၄) (၂၈.၁.၁၆)
(၂၉၈) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၃၅) (၂၉.၁.၁၆)
(၂၉၉) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၃၆) (၃၀.၁.၁၆)
(၃၀၀) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၃၇) (၃၁.၁.၁၆)
(၃၀၁) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၃၈) (၂.၂.၁၆)
(၃၀၂) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၃၉) (၃.၂.၁၆)
(၃၀၃) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၄၀) (၄.၂.၁၆)
(၃၀၄) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၄၁) (၁၄.၂.၁၆)
(၃၀၅) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၄၂) (၁၅.၂.၁၆)
(၃၀၆) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၄၃) (၁၉.၂.၁၆)
(၃၀၇) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၄၄) (၂၁.၂.၁၆)
(၃၀၈) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၄၅) (၂၂.၂.၁၆)
(၃၀၉) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၄၆) (၂၃.၂.၁၆)
(၃၁၀) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၄၇) (၂၅.၂.၁၆)
(၃၁၁) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၄၈) (၂၆.၂.၁၆)
(၃၁၂) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၄၉) (၂၇.၂.၁၆)
(၃၁၃) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၅၀) (၃.၃.၁၆)
(၃၁၄) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၅၁) (၁၆.၃.၁၆)
(၃၁၅) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၅၂) (၂၁.၃.၁၆)
(၃၁၆) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၅၃) (၂၄.၃.၁၆)
(၃၁၇) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၅၄) (၂၈.၃.၁၆)
(၃၁၈) ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား (၅၅) (၆.၄.၁၆)(၃၁၉) ဘာလိသိကောပမသုတ် အနှစ်ချုပ် (၂၆.၁၀.၁၅) (မန္တလေး)
(၃၂၀) ဘဝနှောင်ကြိုးမှ လွတ်ကင်းအောင် ကျင့်သုံးခြင်း (၂၇.၁၀.၁၅)
(၃၂၁) ဘဝမှ လွတ်မြောက်အောင် ကျင့်ဆောင်ခြင်း (၁.၁၁.၁၅)
(၃၂၂) မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ လောကအကျိုးပြု နေထိုင်မှု (၂.၁၁.၁၅) (ကျောက်ဆည်)
(၃၂၃) အများကောင်းကြိုး ဆောင်ရွက်နိုင်သူ (၁၁.၁၁.၁၅)(ပြင်ဦးလွင်)
(၃၂၄) သာသနာနောက်ပိုင်းမှ ရဟန်းတစ်ပါး၏ ဘဝသင်ခန်းစာ (၁၂.၁၁.၁၅)
(၃၂၅) ကုသိုလ်ရေးနှင့် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမ (၆.၁၂.၁၅) (ပြင်ဦးလွင်)
(၃၂၆) ဗုဒ္ဓဘာသာတို့၏ ယုံကြည်ချက် (၂၀.၁၂.၁၅)(English)(ပြင်ဦးလွင်)
(၃၂၇) ကဉ္ဇာနဂေါတသုတ် အနှစ်ချုပ် (၂၁.၁၂.၁၅) (ပြင်ဦးလွင်)
(၃၂၈) ဘဝအောင်မြင်ရေး (၂၅.၁၂.၁၅)(စစ်ကိုင်း)
(၃၂၉) သဒ္ဓမ္မအလင်းတိုင်၏ ရွှေရတုနှစ် (၂၅.၁၂.၁၅) (မုံရွာ)
(၃၃၀) ဗဟုဓနဟိတနှင့် ဗဟုဓနသုခ (၁.၁.၁၆)(SSC)
(၃၃၁) ဗုဒ္ဓဘာဝင်တို့၏ ယုံကြည်ချက်နှင့် ခံယူချက် (၂.၁.၁၆)(UFL)
(၃၃၂) အကြင်နာနှင့်ပညာ (၄.၁.၁၆)(Novotal)
(၃၃၃) ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ့်လူမျိုးနှင့် ကိုယ့်သာသနာ(၁၅.၁.၁၆)
(၃၃၄) ရဟန်းခံရှင်ပြု မြတ်ကောင်းမှု(၂၁.၆.၁၆)(မတ္တရာ)
(၃၃၅) မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမနှင့်ပညာရှိများ၏ အကြံပြုစကား(၅.၂.၁၆)
(၃၃၆) ဆရာမြတ်တို့၏ ဆန္ဒ(၈.၂.၁၆)(စစ်ကိုင်း)
(၃၃၇) ဝိနယဒေသနာနှင့် မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာ(၂၄.၂.၁၆)(ပြင်ဦးလွင်)
(၃၃၈) မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အာမခံစကားများ(၂၈.၂.၁၆)(သာကေတ)
(၃၃၉) အပေါင်းအသင်းနှစ်ယောက်နှင့် လူ့ဘဝ(၂၉.၂.၁၆)(လှိုင်သာယာ)
(၃၄၀) ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ ယုံကြည်ချက်နှင့် ကိုယ်ကျင့်တရား(၆.၃.၁၆)
(၃၄၁) နှစ်ဘဝ ကောင်ကျိုးပွားတိုးစေရမည်(၇.၃.၁၆)(မိုးကောင်း)
(၃၄၂) ရင်ထဲက ရတနာ(၈.၃.၁၆)(ဖားကန့်)
(၃၄၄) သံသရာနှင့် နိဗ္ဗာန်(၈.၃.၁၆)(မြစ်ကြီးနား)
(၃၄၅) သန့်စင်စေရမည့် အညစ်အကြေးများ(၁၄.၃.၁၆)(ဇဗ္ဗူသီရိဗိမ္မာန်)
(၃၄၆) နာယူမှတ်သား သူတော်ကောင်းတရား(၁၈.၃.၁၆)
(၃၄၇) မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမ သြဝါဒ(၁၉.၃.၁၆)
(၃၄၈) အပြောအဆို လိမ္မာယဉ်ကျေးမှု(၁၉.၃.၁၆)
(၃၄၉) ရင်တွင်းကလောဘ ဖယ်ရှားကြ(၂၀.၃.၁၆)
(၃၅၀) ကောသလမင်း၏ မြတ်ဗုဒ္ဓအပေါ် ကြည်ညိုလေးစားမှု(၂၅.၃.၁၆)
(၃၅၁) လူ့စိတ်ကို အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်အရ လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း(၂၆.၃.၁၆)
(၃၅၂) ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်၏ အကောင်းဆုံးအရည်အချင်းများ(၂၇.၃.၁၆)
(၃၅၃) မင်္ဂလာကျင့်စဉ်ဖြင့် ဘဝကိုမြှင့်တင်ခြင်း(၂၉.၃.၁၆)(မင်းလှ)
(၃၅၄) ရိုးသားကြိုးစား လူ့စွမ်းအား(၃၀.၃.၁၆)(ဇဗ္ဗူသီရိဗိမ္မာန်)
(၃၅၅) မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားသည့် သင့်၊မသင့်(၂.၄.၁၆)(ဒဂုံ)
(၃၅၆) သူတော်ကောင်းတို့၏ စွမ်းအား(ပြင်ဦးလွင်)(၇.၄.၁၆)
(၃၅၇) မူးယစ်ကင်းကွာ မင်္ဂလာ(၁၀.၄.၁၆)(နောင်ချို)
(၃၅၈) ဝိဓူရ ပညာရှိ(၁)(၁၂.၄.၁၆)(အောင်ချမ်းသာ၊ပြင်ဦးလွင်)
(၃၅၉) ဝိဓူရ ပညာရှိ(၂)(၁၃.၄.၁၆)(အောင်ချမ်းသာ၊ပြင်ဦးလွင်)
(၃၆၀) ဝိဓူရ ပညာရှိ(၃)(၁၄.၄.၁၆)(အောင်ချမ်းသာ၊ပြင်ဦးလွင်)
(၃၆၁) ဝိဓူရ ပညာရှိ(၄)(၁၅.၄.၁၆)(အောင်ချမ်းသာ၊ပြင်ဦးလွင်)
(၃၆၂) ဝိဓူရ ပညာရှိ(၅)(၁၆.၄.၁၆)(အောင်ချမ်းသာ၊ပြင်ဦးလွင်)
(၃၆၃) ဝိဓူရ ပညာရှိ(၆)(၁၇.၄.၁၆)(အောင်ချမ်းသာ၊ပြင်ဦးလွင်)
(၃၆၅) ဓမ္မသေနာပတိမထေရ်မြတ်၏သံဃာကျင့်သုံး ထုံးနည်းဥပဒေ(၂၉.၄.၁၆)
(၃၆၇) ဇာတကလာ သုရာပါန သမိုင်း(၁.၅.၁၆)(ပြင်ဦးလွင်)
(၃၆၈) လူတိုင်းကြိုးစား ကာသိုလ်စီးပွား(၄.၅.၁၆)(အောင်ချမ်းသာ၊ပြင်ဦးလွင်)
(၃၆၉) ရွှေတစ်နေ့ ငွေတစ်နေ့ လူ့ဘဝ၏အချိုးအကွေ့များ(၁၉.၅.၁၆)
(၃၇၁) ဆရာတော်ကြီးချီးမြှင့်ပေးသော ဗုဒ္ဓနုဿတိဘာဝနာပွားခြင်း
(၃၇၂) ဘုရားပွင့်ခြင်းကြောင့် ကောင်းကျိုး(၁၂)မျိုး ပေါ်ထွန်းခြင်း(၂၁.၅.၁၆)
(၃၇၃) မကောင်းမှုမှ စိတ်ကိုတားမြစ်ရမည်(၂၃.၅.၁၆)
(၃၇၄) အောင်မြင်ကြီးပွား စက်လေးပါး(၂၃.၅.၁၆)
(၃၇၅) အမှောင်တွင်းမှ အမြင်များ(ပြင်ဦးလွင်)(၂၉.၅.၁၆)
(၃၇၆) လူမိုက်နှင့် သံသရာ(ပြင်ဦးလွင်)(၃၀.၅.၁၆)
(၃၇၇) ဥစ္စာစီးပွား ယိုပေါက်များ(မန္တလေး)(၉.၇.၁၆)
(၃၇၈) သေမင်း၏ နယ်မြေကို ဖြတ်ကော်ခြင်း (မန္တလေး) (၁၀-၇-၂၀၁၆)
(၃၇၉) မိမိကိုယ်ကို မြတ်နိုးပါ (စစ်ကိုင်း) (၁၄-၇-၂၀၁၆)
(၃၈၀) ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့် ရဲရင့်ခြင်း (မန္တလေး) (၁၄-၇-၂၀၁၆)
(၄၇၀) အနုမောဒနာ (မြကန်သာ)(၃၀.၁.၁၁)
(၄၇၄) ဘ၀ နဲ့သာသနာ
(၄၇၇) အနုမောဒနာ(ဦးအောင်မြင့် + ဒေါ်အေးအေးမြင့်)(၁၁.၆.၁၁)
(၄၉၂) အနုမောဒနာ(မဏိရတနာ သီလရှင်စာသင်တိုက်(၈.၁.၁၂)
(၅၀၃) မွေးနေ့ အနုမောဒနာ(၁၇.၂.၁၂)
(၅၀၄) မွေးနေ့ အနုမောဒနာ
(၅၀၅) သာရဏီရကထာ အနုမောဒနာ(၂၀.၂.၁၂)(Max Myanmar မိသားစု)
(၅၁၄) သြဝါဒ(အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဘိဓမ္မာတက္ကသိုလ်)(၅.၇.၁၂)
(၅၁၅) အနုမောဒနာ သြဝါဒ(၇.၇.၁၂)(မန္တလေး)
(၅၁၆) အနုမောဒနာ သြဝါဒ
(၅၁၇) အနုမောဒနာ သြဝါဒ(၈.၇.၁၂)(မန္တလေး)
(၅၁၈) အနုမောဒနာ (ဒေါက်တာအဖွဲ့)(၁၀.၇.၁၂)(စစ်ကိုင်း)
(၅၁၉) ရဟန်းခံရှင်ပြု သြဝါဒ(၁၅.၇.၁၂)(စစ်ကိုင်း)
(၅၂၀) သြဝါဒ (၂၁.၇.၁၂)
(၅၂၂) ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ် အနုမောဒနာ
(၅၂၉) သြဝါဒကထာ အနုမောဒနာ(၁၂.၂.၁၂)(ဝင်းပအထည်ချုပ်)
(၅၃၁) အနုမောဒနာ(၇.၄.၁၁)(ပြင်ဦးလွင်)(ဓမ္မသဟာယ သာသနစင်တာဖွင့်ပွဲ)
(၅၃၃) သာရဏီကထာ (ဦးဇင်း ရေဝတ)(ဒေါ်ခင်သန်းမြင့်)
(၅၃၅) သာရဏီကထာ (၃၁.၇.၁၂)(အင်းစိန်)
(၅၃၈) မွေးနေ့ အနုမောဒနာ(စစ်ကိုင်း)(၈၅ နှစ်ပြည့် ဆရာမကြီးဒေါ်ကဉ္ဇနာ)
(၅၃၉) သြဝါဒ(စစ်ကိုင်း)(၄၅ ကြိမ်မြောက် အနန္တဂုဏပူဇာ)
(၅၄၁) ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်(လူပုဂ္ဂိုလ်များဆိုင်ရာ ဓမ္မဗျူဟာအဖွဲ့)
(၅၄၂) ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်(၁၆.၈.၁၂)(ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဓာတုဗေဒမိသားစု)
(၅၄၃) မွေးနေ့ အနုမောဒနာ(၁၇.၈.၁၂)
(၅၄၄) အနုမောဒနာ(၁၇.၈.၁၂)(Hotel Yangon)
(၅၄၇) ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ် (၁၉.၈.၁၂)
(၅၅၁) အနုမောဒနာ သြဝါဒ(၉.၉.၁၂)(ဦးသန့်စင်နေအိမ်)
(၅၅၂) အနုမောဒနာ(၉.၉.၁၂)(Max Myanmar)
(၅၆၁) အနုမောဒနာ(ကောင်းမြတ်စံ ပညာရေးမိသားစု)(၂၁.၁၁.၁၂)
(၅၆၃) အနုမောဒနာ (၂၅.၁၁.၁၂)(စစ်ကိုင်း)
(၅၆၈) သြဝါဒ အနုမောဒနာ
(၅၇၈) သြဝါဒတရား(ဓမ္မဒီပ ဗုဒ္ဓစာပေသင်တန်း)(၆.၁.၁၃)
(၅၉၅) အနုမောဒနာ(၅.၃.၁၃)(ဓမ္မသဟာယ သာသနစင်တာ)
(၅၉၈) သြဝါဒ(ဝိဘဇ္ဇဝါဒီ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာအခြေခံသင်တန်း)(၁၁.၃.၁၃)
(၅၉၉) အနုမောဒနာ(၂၃.၃.၁၃)(ဓမ္မသဟာယ သာသနစင်တာ)
(၆၀၀) အနုမောဒနာ(၁၅.၄.၁၃)(ဓမ္မသဟာယ သာသနစင်တာ)
(၆၀၁) အနုမောဒနာ(၁၈.၄.၁၃)(ဓမ္မသဟာယ သာသနစင်တာ)
(၆၀၂) အနုမောဒနာ(၁၉.၅.၁၃)(ဓမ္မသဟာယ သာသနစင်တာ)
(၆၀၃) အနုမောဒနာ(၂၂.၅.၁၃)(ဓမ္မသဟာယ သာသနစင်တာ)
(၆၀၅) အနုမောဒနာ(ထေရဝါရ ဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်)
(၆၇၈) သြဝါဒ (စစ်ကိုင်း)(၂၁.၁၂.၁၄)
(၆၇၉) သြဝါဒ (ပုသိမ်)(၂၅.၁၂.၁၄)